2011 | ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှားရေးအသငျးခြုပျ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 11:43 PM | ညှနျကွားလှာ Be the first to comment!
ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော၊ နိုငျငံတျော သံဃမဟာနာယက အဖှဲ့မှ ဖှဲ့စညျးပေးအပျသော
နိုငျငံတျော သီးခွား ဝိနညျးဓိုရျ အဖှဲ့ အမှတျ (၁၇။ ၂၀၁၁) မှ
ဦးဉာဏ ဦးဆောငျသော မိုးပွာဂိုဏျးသားတို့၏
အယူဝါဒအပျေါ အဓမ်မဝါဒမြားအဖွဈ ဆုံးဖွတျကွညောခဲ့ပါသညျ။
နိုဝငျဘာလ ၁၅ ရကျနေ့ မှနျးလှဲ ၁ နာရီ တှငျ ရနျကုနျမွို့ ကမ်ဘာအေးကုနျးမွေ၊ နိုငျငံတျော ဝိနိစ်ဆယအဖှဲ့ရုံးတှငျ မိုးပွာ ဂိုဏျးသားတို့၏ အယူဝါဒအပျေါ ဓမ်မ-အဓမ်မ အငွငျးပှားခွငျးကို ဆှေးနှေး ဆုံးဖွတျခဲ့ကွသညျ။
ထရေဝါဒဗုဒ်ဓဒသေနာတျော အဆုံးအမမြားကိုမလိုကျနာဘဲ အတိတျဘဝ၊ အနာဂတျဘဝ၊ ၃၁ ဘုံနှငျ့ သံသရာမရှိ ဟူသော ရုပျဝါဒအယူ ကိုယူကာ ပိဋကတျတျောသုံးရပျနှငျ့ အဋ်ဌကထာ၊ ဋီကာတို့ကို ဆနျ့ကငျြဝဖေနျပွီး ပစ်စုပ်ပနျကမ်မဝါဒကို တီထှငျဟောကွားသော ဓမ်မ ဝိဟာရီ အမညျခံ ဦးဉာဏ၏ ဟောပွောခကျြမြား၊ ရေးသားခကျြမြား၊ အငျတာနကျပျေါတှငျ တငျပွခကျြမြားသညျ အဓမ်မဝါဒမြားဖွဈကွောငျး နိုငျငံတျော ဝိနညျးဓိုရျ ဆရာတျောကွီးမြားက ဆုံးဖွတျခဲ့ကွသညျ။
ထိုသို့ဆုံးဖွတျတျောမူရာတှငျ စောဒက ဆရာတျောမြားက တငျပွထားသော စောဒကလှာ ၅၂ ခကျြနှငျ့တကှ ဆုံးဖွတျပွီးအဓမ်မဝါဒ အဟောငျးမြား ဖွဈကွသော သြှငျဥက်ကဋ်ဌ၏ လူသလေူဖွဈဝါဒါနု ဝါဒဝိနိစ်ဆယ၊ ဓမ်မနီတိဝါဒဝိနိစ်ဆယ၊ မွဈကွီးနား ဝိစိတ်တသာရဝါဒဝိ နိစ်ဆယ၊ မိုးညှငျး ဦးခမေိန်ဒနှငျ့ ဦးဝိစိတ်တသာရဝါဒ ဝိနိစ်ဆယ၊ အနုဝါဒါမိကရုဏျး ဝိနိစ်ဆယနှငျ့ ကြောကျသင်ျဘောဝါဒဝိနိစ်ဆယ အဓမ်မဝါဒ ဆုံးဖွတျ ခကျြမြား စာအုပျမြားပါ အဓမ်မဝါဒမြားနှငျ့ ထပျတူဖွဈသော အခကျြ ၂၅ ခကျြကိုလညျး အဓမ်မဝါဒမြားအဖွဈ စိစဈကွညောခဲ့ကွပါသညျ။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 11:43 PM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 2:00 AM | အဓမ်မဝါဒ မိုးပွာ Be the first to comment!
သာသနာတျော၌ အဓမ်မဝါဒီ အဝိနယဝါဒီမြား ပျေါပေါကျလာခဲ့ပွီဆိုလြှငျ အနုနညျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ။ အကွမျးနညျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ။ တဈပါးတညျး ဖွရှေငျးရသညျလညျးရှိသညျ။ အုပျစုဖှဲ့၍ ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ။
အခါတဈပါး၌ မွတျစှာဘုရားသညျ သံဃာ့ပရိသတျနှငျ့တကှ ဥပုသျပွုရနျ ဥပုသျအိမျထဲ၌ သီတငျးသုံးတျောမူလြှကျရှိပါသညျ။ ထိုအခါ သံဃာ့ပရိသတျထဲတှငျ ဒုဿီလ - သီလမဲ့ ရဟနျးတပါး ပါဝငျနေ၍ မွတျစှာဘုရားက ဥပုသျပွုတျောမမူဘဲ ထိုငျလြှကျသာ သီတငျးသုံး နတေျောမူပါသညျ။ ဤသို့နှငျ့ ညဉျ့သုံးယာမျပတျလုံး ကုနျဆုံး သှားသညျ့အခါ အရှငျမဟာမောဂ်ဂလာနျက အဘိညာဉျတနျခိုးဖွငျ့ ကွညျ့တျောမူသောအခါ ဒုဿီလရဟနျး တဈပါးကိုတှမွေ့ငျ၍ သုံးကွိမျတိုငျတိုငျ အပွငျထှကျဖို့ တောငျးပနျရှာပါသညျ။ သုံးကွိမျတောငျးပနျလြှကျ မရသောအခါ ဒုဿီလရဟနျးကို လကျမောငျးကိုကိုငျလကျြ အပွငျသို့ ဆှဲထုတျချေါယူသှားခဲ့ပါသညျ။
အထခေါ အာယသ်မာ မဟာမောဂ်ဂလာနော တံ ပုဂ်ဂလံ ဗာဟာယံ ဂဟတှော ဗဟိဒှါရကောဌကာ နိက်ခာမတှော…….။ (ဥပေါသထသုတျ) (အံ၊ ၃။ ၄၄/၅)
ဤဝတ်ထုကိုထောကျလြှငျ သာသနာတျော၏ ခလုတျဆူးငွောငျ့မြား အငျအားမကောငျးပါက တဈပါးတညျးဖွငျ့ သုတျသငျရှငျးလငျးသညျ့ အစဉျအလာ ရှိခဲ့သညျကို တှမွေ့ငျရပမေညျ။ သို့တညျးမဟုတျ သာသနာ့ရနျဆူးရနျငွောငျ့တို့ အုပျစုဖှဲ့၍ မိုကျတှငျးနကျနပေါလြှငျ အငျအားသုံး၍ ခမြှေုနျးရနျ ဘဘုရားကိုယျတိုငျ ခှငျ့ပွုတျောမူခဲ့သညျကို တှရှေိ့ရပါသညျ။ အခါတဈပါး၌ ကီဋာဂီရိဂိုဏျးသားရဟနျးမြားသညျ ကုလဒူသကအနသေနမြိုးစုံဖွငျ့ သာသနာကို ဖကျြဆီးလြှကျရှိရာ မွတျစှာဘုရားက အရှငျသာရိပုတွာ နှငျ့ အရှငျမဟာမောဂ်ဂလာနျ တို့ကိုချေါ၍ “ ခဈြသားတို့ ကီဋာဂီရိဇနပုဒျကို သှားကွ၊ သာသနာ့ ရနျဆူးရနျငွောငျ့တို့ကို မောငျးထုတျကွ ” ဟု စခေိုငျးတျောမူပါသညျ။
ထိုအခါ အရှငျသာရိပုတွာက “ စဏ်ဍာ တေ ဘိက်ခူ ဖရုသာ - မွတျစှာဘုရား၊ အဲဒီရဟနျးတှဟော ခကျထနျကွမျးကွုတျလှပါတယျဘုရား။ ဘယျလိုပုံမြိုးဖွငျ့ နှငျထုတျရပါမလဲဘုရား ” ဟု လြှောကျတျောမူပါသညျ။ ထိုအခါ မွတျစှာဘုရားက….. “ တနေဟိ တုမှေ သာရိပုတ်တာ ဗဟုကဟေိ ဘိက်ခူဟိ သဒ်ဓိံကစ်ဆထ - ဒါဆိုရငျ ရဟနျးမြားစှာ ချေါသှား အငျအားသုံးပွီး နှငျထုတျကွ ” ဟု နညျးပေးခှငျ့ပွုတျောမူခဲ့ပါသညျ။ အဂ်ဂသာဝကနှဈပါးလညျး ရဟနျးမြားစှာချေါသှားကာ သာသနာ့ရနျဆူး ရနျငွောငျ့တို့ကို အပွီးတိုငျ ခုတျထှငျရှငျးလငျး သုတျသငျတျောမူခဲ့ပါသညျ။ (ပါရာဇိကဏျပါဠိတျော၊ ကုလဒူသကသိက်ခာပုဒျနိဒါနျး) ဤဝတ်ထုကို သာဓကပွုလြှငျ အဓမ်မဝါဒီတို့ အားကောငျးပါက အငျအားသုံး၍ ခမြှေုနျးသညျ့ အစဉျအလာသညျ မွတျစှာဘုရားလကျထကျကတညျးက ရှိခဲ့သညျ ဆိုတာကို သဘောပေါကျရပမေညျ။
ဆိုအပျခဲ့ပွီးသော သာဓကတို့ဖွငျ့ မိုးပွာခေါငျးဆောငျ ဦးဉာဏ ကို သံဃမဟာနာယက နှငျ့ အာဏာပိုငျမြားမှ ထောငျခခြွငျးသညျ ဘုရားရှငျ၏ အဆုံးအမနှငျ့ လြျောညီစှာ ထိုကျတနျသော အပွဈဒဏျခတျခွငျးသာ ဖွဈပါ၏။ ဤအကွောငျးကို ထငျရှားစဖေို့ မိုးပွာဦးဉာဏ၏ သမိုငျးကွောငျးနှငျ့ သူ၏လုပျရပျတို့ အကဉျြးခြုပျမြှ တငျပွရပမေညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ကာလ (၂၇) နှဈက ဦးဉာဏသညျ စဈကိုငျးတိုငျး မငျးကှနျး ရှမွေငျတငျတောငျမှာ နထေိုငျသူဖွဈပါသညျ။ ဈာနျရပုဂ်ဂိုလျ၊ ပဋိသမ်ဘီဒါရ ရဟန်တာ စသညျဖွငျ့ ကွှားဝါကာ တရားဟောခဲ့သူဖွဈပါသညျ။ ထိုအကွောငျးကို ကွားသိကွသဖွငျ့ နိုငျငံတျော သံဃနာယက အဖှဲ့ကွီးကပငျ စဈကိုငျးတိုငျး သာသနာရေးမူး ဥိးစိုးမွငျ့ က စှဲဆို၍ စဈကိုငျးမွို့နယျ သံဃနာယက သို့ တငျခဲ့သညျ။ ရှငျဉာဏ နှငျ့ ရှငျဂုဏ တို့နှဈပါး ရှုံးခဲ့ကွပါသညျ။ တဈဖနျ သူတို့ကပငျ တိုငျးသို့တကျခဲ့ကွသညျ။ တိုငျးမှာလဲ သူတို့ပငျ ရှုံးကွပွနျသညျ။ တဈဖနျ ဗဟိုဌာန ဟု ဆိုရမညျဖွဈသော နိုငျငံတျောသံဃမဟာနာယက ထံသို့ သူတို့ကပငျ စောဒနာ တငျကွလကျြ “သာသနာရေး လြှောကျထားတောငျးဆိုလှာ” အမညျဖွငျ့ စတငျ၍ မွို့နယျနှငျ့တိုငျးတို့က ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွငျဆငျပေးရနျ တောငျးဆိုခဲ့ကွသညျ။ နိုငျငံတျောမှာလဲ သူတို့ပငျ ရှုံခဲ့၍ ထောငျ သုံးနှဈကွခဲ့ပါသညျ။ နိုငျငံတျော သံဃနာယကဆရာတျော ဘဒ်ဒန်တမာနိတသီရိဘိဝံသထရျေ ၏ မိနျ့ကွားခကျြအရ သိရသညျမှာ (၁၉၈၃-၁၉၈၆ ခုနှဈက ဝိနညျးဓမ်မကံ (၉/၁၁)ဖွငျ့ တရားစှဲခံရပွီးကတညျးက ပွတျပွတျသားသား အရေးယူဖို့ စီရငျခဲ့ရာတှငျ တိပိဋကဓရ မငျးကှနျးဆရာတျောကွီးက မတ်ေတာရပျခံမူကွောငျ့ ထောငျသုံးနှဈမြှဖွငျ့ ပွီးသှားရခွငျးပငျ) ဟူ၍ ဖွဈပါသညျ။ ၁၉၉၁-၁၉၉၈ ခုနှဈတှငျ ထရေဝါဒအတှငျးမှ ဂိုဏျးသီးသနျ့ထောငျမူဖွငျ့ ထောငျ (၁၀) နှဈကခြဲ့ပါသညျ။ ထောငျကခြံပွီး ထှကျလာပွီးနောကျတှငျ ပစ်စုပ်ပနျကမ်မဝါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာ အမညျခံလကျြ ဂိုဏျးထူးထောငျပွီး မိလိန်ဒပဥှာဝတ်တု စသညျတို့ကိုပါ ပွနျလညျကူးယူဖွနျ့ဝကွေောငျးတှရေ့ပွီး (၂၀၀၂-၂၀၀၈)တို့မှာ အကွီးအကယျြ အငျအားကွီးဂိုဏျးဖွဈလာကွောငျး တှရေ့ပသေညျ။ ဒုတိယအကွိမျ ထောငျမှ ထှကျလာပွီးကတညျးက ထရေဝါဒ သာသနာကို ရစရာမရှိအောငျ ဖကျြဆီး၊ ထရေဝါဒ ပိဋကတျသုံးပုံကိုဖကျြဆီးကာ ဘုရားဟောမဟုတျသညျကို ဘုရားဟော လုပျ၊ ဘုရားရှငျကို အမြိုးမြိုးစှပျစှဲပုတျခတျကာ ဝါဒသဈထူထောငျခွငျးသညျ ခိုငျလုံသော အကွောငျးတရားဖွဈပေ၏။
ပိဋကတျကမျြးစာတို့ကို ဖကျြဆီးထားသညျမြားကို ပွညျ့ပွညျ့ စုံစုံသိလိုပါက စာရေးသူ၏ http://www.dhammaanalysis.multiply.com/ တှငျ လလေ့ာနိုငျ ပါသညျ။ ထို့အပွငျ မွနျမာအငျဂငျြနီယာ ဖိုရမျ တှငျလညျး လလေ့ာနိုငျသညျ။ ဦးဉာဏသညျ ထရေဝါဒဗုဒ်ဓဘာဝငျတို့ လိုကျနာရမညျ့ အနိမျ့ဆုံးဖွဈသော ငါးပါးသီလကိုပငျ ရစရာမရှိအောငျ ဖကျြဆီးထားပသေညျ။
ပါဏာတိပါတာ - တိရိစ်ဆာနျအားလုံး၏ အသကျကို သတျကောငျး၏၊ အဒိန်နာဒါနာ - အဖှဲ့အစညျးပိုငျ၊ အမြားပိုငျ၊ အစိုးရပိုငျ ပစ်စညျးခိုးကောငျး၏။ ကာမသေု - အမြိုးသမီးကနြေပျက ကုသိုလျတောငျရ၊ မုသာ - လိမျပွောကောငျး။ သုရာ - လူမှနျးသူမှနျးမသိ မူးကှဲနအေောငျ မသောကျရငျပွီးရော အရကျသောကျကောငျး၏။ ဤအခကျြငါးခကျြဖွငျ့ပငျ ပိဋကတျကိုဖကျြဆီးသော ပွဈမှု့ဖွငျ့ ထောငျခြ၍ ရနိုငျသောအကွောငျး တရားထငျရှားပသေညျ။ ဒါကိုပငျ ဝငျ့ထနျး နှငျ့ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားဟောငျးဖွဈသော ဆရာတျော ဦးဇဝန တို့ မသိခွငျးကွောငျ့ သံဃနာယကကို အနိုငျကငျြ့သညျဟု ဆိုလသေလော၊ ဦးဉာဏကို ထောငျခခြွငျးသညျ သံဃမဟာနာယက၏ အပွဈလညျးမဟုတျ အာဏာပိုငျမြား၏ အပွဈလညျး မဟုတျခြေ၊ ဗာလော ဒဏ်ဍနေ ဒမ်မတေ - လူမိုကျကို ဒုတျကွီးကွီးဖွငျ့ ဆုံးမအပျသညျ ဟူသော အဆုံးအမနှငျ့ အညီ တတိယအကွိမျ ထောငျဒဏျ အပွဈပေး၍ ဆုံးမခွငျးသာ ဖွဈသညျ။ ယခုအခြိနျထိ တရားခံအစဈ အကွောငျးတရားအစဈကို မသိရှိကွသေး သောကွောငျ့ ဝငျ့ထနျး နှငျ့ ဦးဇဝနတို့က အနိုငျကငျြ့သညျဟု အထငျရောကျခသြေညျ။ တိတ်ထိဝါဒနှငျ့ ဗုဒ်ဓဝါဒ ကှာခွားသညျမှာလညျး ဤသို့ပငျဖွဈ၏ တိတ်ထိတို့ဝါဒသညျ အကွောငျးတရားကို မပယျ၊ မူလအရငျးခံရသေောကျမွဈကို မပယျဘဲ အကြိုးတရားကိုသာ ပယျသတျတတျပေ၏။ ထိုကဲ့သို့ တရားခံအစဈ အကွောငျးတရားအစဈကို မသိသေးသမြှ ကာလပတျလုံး........ သုဝါနဝုတ်တိနော ပန တိတ်ထိယာ။ (ဝိသုဒ်ဓိ၊ ၂။ ၁၃၈။ ပဋိသံ၊ ဌ၊ ၁။ ၁၄၇) ခဲဖွငျ့ ပဈသူကို အရေးမစိုကျ ခဲကိုသာ လိုကျကိုကျတတျသော ခှေးမိုကျကဲ့သို့ ဖွဈနပေလေိမျ့မညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အိမျဦးခနျး၌ မစငျတကျစှနျ့သော ခှေးကို အိမျရှငျက ရိုကျရာတှငျအိမျရှငျ၏ အပွဈမဟုတျ။ ရိုငျးပသြော ခှေး၏ အပွဈသာ ဖွဈ၏။ ပွဈမူကြူးလှနျသူကို ထိုကျတနျသညျ့ ဒဏျခရြာ၌ တရားစီရငျသူ၏ အပွဈမဟုတျ၊ ဒုစရိုကျကောငျ၏ အပွဈသာ ဖွဈ၏။ ထိုနညျးတူစှာပငျ ဓမ်မကို စျောကားလာသူကို သုတျသငျရာ၌ သုတျသငျသူ၏ အပွဈမဟုတျ၊ စျောကားသူ၏ အပွဈသာ ဖွဈ၏။ ဗုဒ်ဓကို စှပျစှဲလာ၍ ဒဏျခတျရာ၌ ဒဏျခတျသူ၏ အပွဈမဟုတျ၊ စှပျစှဲသူ၏ အပွဈသာ ဖွဈ၏။ ထို့ကွောငျ့ ဒဏျခတျ မခံခငျြလြှငျ အစကတညျးက ဗုဒ်ဓကို မစှပျစှဲသငျ့ခြေ၊ ဓမ်မကို မစျောကားသငျ့ခြေ၊ သာသနာကို မဖကျြစီးသငျ့ခြေ၊
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 2:00 AM No comments:
တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာ မိုးပွာဦးဉာဏအား ထောငျခတြာ မှနျကနျသောလုပျရပျတခုသာဖွဈ၏ - ၂ -
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:57 AM | အဓမ်မဝါဒ မိုးပွာ Be the first to comment!
သာသနာကို ဖကျြစီးဖို့ကွိုးစားလာလြှငျ၊ သာသနာကို စျောကားဖို့ကွိုးစားလာလြှငျ ဘုရားအစ ရှိသောသူတျောကောငျးမြား လကျပိုကျကွညျ့မနဘေူးဆိုတာ အပိုငျး - ၁ - မှ သာဓကဖွဈစဉျ မြားကိုကွညျ့ပါက ထငျထငျရှားရှားသိမွငျနိုငျပသေညျ။ အခွားသောသာဓကမြားကိုလညျး ဤအပိုငျးတှငျ ထပျမံ၍ တငျပါဦးမညျ။
သာသနာတျော၌ အဓမ်မဝါဒီမိစ်ဆာတဈယောကျ ပျေါပေါကျလာလြှငျ ဘုရားအစရှိသော သူတျောကောငျးမြား အဘယျသို့ စိတျနှလုံးတုနျလှုပျခွောကျခွားအောငျ ထိတျလနျ့တုနျလှုပျစှာ ခံစားကွရသညျကို ရှေးဦးစှာ သိထားဖို့ လိုအပျပသေညျ။ မွတျစှာဘုရားရှငျတို့သညျ ဓမ်မဥပဒကေို ခြိုးဖောကျသူ၊ ဓမ်မကို စျောကားလာသူမြားကိုလညျး ခေါငျးမဖျောဝံ့အောငျ နှိပျကှပျတျောမူမွဲပငျဖွဈ၏။
မွတျစှာဘုရားရှငျလကျထကျက တံငါသညျသား သာတိ မညျသော ရဟနျးတဈပါး ရှိခဲ့ဘူးသညျ။ ထိုရဟနျးကား ဗဟုသုတနညျးပါးသညျ့အလြှောကျ သဿတဒိဌိ ရှိသူဖွဈ၏။ ထိုရဟနျး ယူဆပုံက “ခန်ဓာငါးပါးအနကျ ရုပျ၊ ဝဒေနာ၊ သညာ၊ သင်ျခါရတို့သညျ ဖွဈလရော ဘဝမှာပငျ ခြုပျပြောကျခဲ့လသေညျ၊ ဝိညာဉျသညျကား ဤဘဝမှ ထိုဘဝသို့လညျးကောငျး၊ ထိုဘဝမှ ဤဘဝသို့ လညျးကောငျး ကငျြလညျကကျြစားကူးသှား၏ ” ဟူ၍ ဖွဈ၏။
ဝိညာဉျသညျ မွဲ၏ဟူသော သဿတဒိဌိအယူပငျ ဖွဈ၏။ အမှားတှကေို အမှနျလုပျပွီး လိုကျလံဟောပွော ပွသနေ၏။ မတရားတှကေို တရားလုပျပွီး လိုကျလံဟောပွောပွသနေ၏။ ဘုရားဟော မဟုတျပါဘဲ ဘုရားဟောဟု ဟောပွောပွသနေ၏။ ထိုသာတိရဟနျးအား ရဟနျးကောငျးတို့က ဝိုငျးဝနျးကဲ့ရဲ့ကွပွီး မွတျစှာဘုရားထံ အပျနှံကွပသေညျ။ ထိုအခါ မွတျစှာဘုရားက သာတိရဟနျးအား မောဃပုရိသဘှဲ့တံဆိပျမြားကို ပလူပြံအောငျ ခြီးမွငျ့ပွီး ခေါငျးမဖျောဝံ့အောငျ နှိပျကှပျတျောမူပုံကို အောကျပါအတိုငျး သိရှိနိုငျပသေညျ။
“မဂျဖိုလျမှ အခညျြးနှီးဖွဈသောယောကြာင်္း(အလကားကောငျ)- အဘယျမညျသောသူအား ငါ ဤသို့ဟောအပျသညျကို သငျ သိသနညျး၊ မောဃပုရိသ - (အလကားကောငျ) ငါသညျ “ဝိညာဉျသညျ အကွောငျးကိုစှဲ၍ ဖွဈ၏။ အကွောငျးကိုကွဉျ၍ ဝိဉာဏျဖွဈခွငျးမညျသညျ မရှိ” ဟု မြားစှာသောအကွောငျးဖွငျ့ ဟောကွားသညျ မဟုတျလော။ မောဃပုရိသ - (အလကားကောငျ)၊ ထိုသို့ဟောထားပါလြှကျ သငျသညျ မိမိအမှားကို ယူဆခွငျးဖွငျ့ ငါတို့ကိုလညျး စှပျစှဲ၏။ မိမိကိုယျကိုလညျး ဖွိုဖကျြ၏။ မြားစှာသော မကောငျးမူ့ကိုလညျး ဖွဈပှါးစေ၏၊ မောဃပုရိသ - (အလကားကောငျ)၊ ထိုအမှားကို ယူဆခွငျးသညျ သငျ့အားရှညျကွာမွငျ့စှာသော ကာလပတျလုံး အစီးအပှါးမဲ့ခွငျး၊ ဆငျးရဲခွငျးငှါ ဖွဈလတ်တံ့“ ဟု မိနျ့တျောမူ၏။ တံငါသညျသား သာတိရဟနျးသညျ နှုတျဆိတျ၍ မကျြနှာမသာဘဲ လညျပငျးငိုကျဆိုကျဖွဈခါ မကျြနှာအောကျခပြွီး မှိုငျတှလေိုကျ ထိုငျနရေလေ၏။ ဤကား မွတျစှာဘုရားကိုယျတိုငျ အဓမ်မဝါဒီ မိစ်ဆာရဟနျးကို ပရိသတျ အလညျ၌ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခြိုးနှိမျနှိပျကှပျပုံဖွဈ၏။
(မဟာတဏှာသင်ျခယသုတျ) (မ၊ ၁၊ ၃၂၃။ မွနျမာပွနျ-၃၃၂)
ဤကဲ့သို့ သာသနာတျော၌ မိစ်ဆာကောငျ တဈယောကျ ပျေါပေါကျလာလြှငျ ကွညျညိုသူအပေါငျး ဆငျးရဲကွောငျးသာဖွဈသောကွောငျ့ မိစ်ဆာကောငျသညျ သာသနာတျော၌ မဟာစောရ(ဗုဒ်ဓကို ပုနျကနျသညျ့ မဟာသူပုနျကွီး) ဟု အမညျပေးရပသေညျ။ မွတျစှာဘုရား၏ သာဝကတို့သညျ မွတျစှာဘုရားနညျးတူ ဓမ်မကိုစျောကားလာသူမြားအား ရံဖနျရံခါ၌ ဓမ်မဘကျမှ ဒဏျခတျသညျ့ ဖွဈရပျတခုကို ဆကျ၍ပွပါဦးမညျ။ မွတျစှာဘုရားလကျထကျက သာဋိမတ်ထိယ အမညျရသော မထရျေတဈပါး ရှိခဲ့ဘူးသညျ။ ထို မထရျေသညျ ဈာနျအဘိဉာဉျရဆဠာဘိည ရဟန်တာတဈပါးဖွဈ၏။ ထိုမထရျေကို ကွညျညို ကုနျသော ဒကာ ဒကာမမြားအနကျ ရုပျရညျရူပကာ ခြောမောလှပ၍ ရှူ့ခငျြစဖှယျအမြိုးသမီးငယျ တဈယောကျသညျ မထရျေ အား အမွဲတနျးရိုသစှော ဆှမျးဆကျကပျ လောငျးလှူသူဖွဈ၏။ ထိုအကွောငျးကို သိရှိသော မာရျနတျကွီးက “ဒီရဟနျး မကောငျးသတငျးထှကျအောငျ ငါလုပျမညျ၊ ဒီရဟနျး ထောကျတညျရာမရအောငျ ငါလုပျမညျ” ဟုကွံစညျကာ သာဋိမတ်ထိယမထရျေ အယောငျဆောငျ၍ ဆှမျးခံကွှရငျး အမြိုးသမီးလကျကို ဆှဲကိုငျလိုကျပါသညျ။ ထိုအခွငျးအရာကို သိမွငျသော အိမျသူအိမျသားအပေါငျးတို့က ထိုမထရျေကို အကွညျညိုပကျြခါ မရိုသေ မလေးစားကွတော့ပေ။ မထရျေကလညျး အိမျရှငျတို့၏ အရိုအသမေဲ့သော အမူအရာကို မွငျ၍ ဆငျခွငျကွညျ့တျောမူသောအခါ မာရျနတျ၏လကျခကျြ ဖွဈနသေညျကို တှရှေိ့လိုကျပသေညျ။ ထိုသို့ သိရှိလိုကျသညျနှငျ့ တပွိုငျနကျ မာရျနတျကို ဒဏျခတျသောအားဖွငျ့ “မာရျနတျ၏ လညျပငျး၌ ခှေးသပေုတျကွီး စှပျစသေတညျး” ဟု အဓိဌာနျလိုကျ၏။ ဤပွဿနာကို မာရျနတျကိုယျတိုငျ ပွနျလညျဖွရှေငျးပေးပွီးမှ ခှေးသပေုတျကို ရုပျသိမျး လိုကျတော့ပသေညျ။ (ထရေ၊ ဌ၊ ၁၊ ၄၆၁ )
ဤသာဓက ဖွဈစဉျကိုကွညျ့ပါက မွတျစှာဘုရား၏ သာဝကတို့သညျ ဓမ်မဝိနယကို စျောကားလာပါက လကျပိုကျကွညျ့မနဘေဲ မာရျနတျကွီးကိုပငျ ဒဏျခတျပွီး နှိမျနှငျးသညျကို တှရှေိ့ရမညျ ဖွဈပသေညျ။ ထိုသာဓကမြားကိုကွညျ့၍ တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာမိုးပွာဦးဉာဏ အား သံဃမဟာနာကမှ စိစဈသုံသပျ၍ အာဏာပိုငျမြားမှ ထောငျခလြိုကျခွငျးသညျ မှနျကနျသော လုပျရပျတခု ဖွဈကွောငျး ရှတှေ့ငျ တငျပွသှားပါမညျ။ တဖကျမှ ဆောငျးပါးရှငျဝငျ့ထနျးက မိုးပွာဝါဒ နဲ့ပတျသကျ၍ မွနျမာအငျဂငျြနီယာဖိုရမျ မှ အငျဂငျြနီယာမြားက မိုးပွာဝါဒအကွောငျးကို ဆှေးနှေးထားသညျ ဟု တငျပွထားပါသညျ။ ဝငျ့ထနျး ၏ တငျပွပုံမှာ မိုးပွာဦးဉာဏ၏ ဝါဒကို စိတျဝငျစား၍ သဘောကြ၍ ဆှေးနှေးထားသလိုမြိုး ထငျအောငျ ရေးထားပသေညျ။ မှနျပေ၏ မွနျမာအငျဂငျြနီယာဖိုရမျ တှငျ မိုးပွာဝါဒ အကွောငျးကို အကယျြတဝငျ့ဆှေးနှေးထားတာကို တှရေ့ပါသညျ။ ထိုဆှေးနှေးခကျြမြားသညျ မိုးပွာဝါဒကိုကွိုကျ၍ ဆှေးနှေးထားသော ဆှေးနှေးခကျြမြားမဟုတျပေ။ သာသနာကို ဖကျြစီးနသေညျ့ မိုးပွာဝါဒ ဟု ပို့ဈပိုငျရှငျ ကိုနိုဗယျမနျး မှ စတငျ၍ ဆှေးနှေးထားသော ဆှေးနှေးခကျြတခုဖွဈကွောငျး တှရှေိ့ရပသေညျ။ ဝိုငျးဝနျးဆှေးနှေးသူ ကိုယျဟယျရီလှငျ၊ အအောငျ၊ ကိုတာတေ၊ ကိုကြျော 81 နဲ့ ဓမ်မမိတျဆှေ အမြားစုက မိုးပွာဝါဒကို ရှတှေ့ငျ ဆိုအပျခဲ့သော အနာထပိဏျသူဌေးကွီးမှ မိစ်ဆာဒိဌိတှကေို နှိပျကှပျသလို နှိပျကှပျဆုံးမထားသော ဆှေးနှေးခကျြမြားကို တှရေ့ပါသညျ။ ထိုအကွောငျးကို သကျဆိုငျရာဖိုရမျသို့ စာဖတျသူကိုယျတိုငျ သှားရောကျလလေ့ာပါက သိရှိနိုငျပေ၏။ မွနျမာအငျဂငျြနီယာ ဖိုရမျ တှငျမကသေး မွနျမာကြူးပဈဖိုရမျ မှာလညျး ရှိပါသေး သညျ။ ထိုဖိုရမျတှငျလညျး ကိုတဇေဟိနျး နှငျ့ သာသနပါလအဖှဲ့သား ဓမ်မမိတျဆှေ မြားက သာသနာကို ဖကျြဆီးနသေညျ့ ဝါဒတခုအဖွဈ ရှူ့မွငျသုံးသပျ၍ ဆှေးနှေးထားသညျကို တှရေ့ပါသေးသညျ။ တိုးတကျလာသော ဂလိုဘယျလိုကျဇေးရှငျးခတျေမှာ သာသနာကို မီဒီယာ ကဏ်ဍဖွငျ့ ဘုရားရှငျနှငျ့သူတျောကောငျးတို့၏ အဆုံးမကို နာခံ၍ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျနသေညျကို တှရေ့မညျ ဖွဈပေ၏။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:57 AM No comments:
တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာ မိုးပွာဦးဉာဏအား ထောငျခတြာ မှနျကနျသောလုပျရပျတခုသာဖွဈ၏ - ၁ -
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:46 AM | အဓမ်မဝါဒ မိုးပွာ Be the first to comment!
မိုးပွာဦးဉာဏကို ထောငျခတြာ အနိုငျကငျြ့တာလားဆိုတဲ့ အမေးကို စာရေးသူက ပွတျပွတျသားသား အဖွပေေးခငျြလို့ ဒီခေါငျးစဉျကိုပေးပွီး ဒီပို့ဈကို ရေးဖို့ဖွဈလာပါတယျ။ တဖကျမှဆောငျးပါးရှငျ ဝငျ့ထနျး ရဲ့ အဆိုပွုခကျြကို ခိုငျလုံသော အထောကျထားပွဆိုပွီးတော့မိုးပွာဦးဉာဏကို ထောငျခလြိုကျတာဟာ ထရေဝါဒ ဗုဒ်ဓသာသနာအတှကျ မှနျကနျသော လုပျရပျတခုဖွဈကွောငျး သကျသပွေဖို့အတှကျ အပိုငျးခှဲပွီး တငျပွသှားပါမယျ၊
ဆောငျးပါးရှငျ ဝငျ့ထနျးက ဗုဒ်ဓဝါဒ ဟာ အစဉျအလာထုံစံအားဖွငျ့ အကွမျးဖကျမှု့ကို ဆနျ့ကငျြပွီး ငွိမျးခမျြးရေးကို လြှောကျလှမျးတဲ့ ဘာသာတခုဖွဈကွောငျး ဆိုလာပါတယျ။ မှနျပါတယျ ဒါဟာလုံးဝ မှနျကနျသော စကားပါပဲ။ ဗုဒ်ဓဝါဒဟာ ဘာသာအယူဝါဒ မတူသူမြားအပျေါကို အနိုငျကငျြ့ပွီး ဗုဒ်ဓအယူဝါဒ ကို လကျခံလာအောငျ ဘယျတုနျးကမှ မလုပျခဲ့ပါဘူး ဒါကို ကမ်ဘာတဝနျးလုံးက ဘာသာတရားကို စိတျဝငျစားတဲ့ လူတှေ အားလုံးသိပါတယျ။ မွတျဗုဒ်ဓ၏ တရားဂုဏျတျော (၆) ပါးတို့တှငျ ဧဟိပဿိက ဂုဏျတျောပါဝငျတယျ။ ဧဟိပဿိက ဆိုတာ အစမျးသပျ ခံရဲခွငျးပါပဲ။ လာလှညျ့ ရှူ့လှညျ့စမျးသပျလှညျ့ ဟု ဖိတျချေါရဲခွငျးပဲ။ ထိုသို့ ဖိတျချေါရဲခွငျး မှာလညျး “သှာက်ခာတော ဘဂဝတာ ဓမ်မော” မွတျဗုဒ်ဓကိုယျတျောတိုငျ ဟောကွားထား ခွငျးကွောငျ့ဖွဈ၏။ ကောငျးခွငျး သုံးဖွာနှငျ့ ပွညျ့စုံသောကွောငျ့ ဖွဈ၏။ သန်ဒိဌိကော-တကယျရှူ့လငျြတကယျမွငျ တကယျသိ သောကွောငျ့ ဖွဈ၏။ အကာလိကော- အခြိနျမရှေး အကြိုးပေးခွငျး၊ ခကျြခွငျးလကျငငျးအကြိုးပေးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈ၏။ ဒီအခကျြကွညျ့ပါက ထငျထငျရှားရှား သိနိုငျပါတယျ တခွားသောဘာသာဝငျတှကေိုလညျး လာလှညျ့ ရှူ့လှညျ့ ဆိုပွီး ရဲရဲတငျးတငျး ဖိတျချေါရဲတဲ့ ဘာသာတခုပါ၊ အစမျးသပျခံရဲတဲ့ ဘာသာတခု ဘာသာအယူဝါဒ မတူသူတှလေိုကျခံတိုကျခိုကျနတောမြိုး မရှိသလို၊ အတငျးအကပျြ ဗုဒ်ဓဘာသာထဲဝငျရနျ ဆှဲချေါနတောမြိုးလညျး မရှိခဲ့ပါဘူး၊ သို့သျောလညျး ဗုဒ်ဓအယူဝါဒကို တိုကျခိုကျလာမယျဆိုရငျ ဘုရားရှငျ ကိုယျတျောတိုငျ လကျပိုကျကွညျ့မနခေဲ့တဲ့ အစဉျအလာတော့ ထငျရှားစှာ ရှိပါတယျ။ သာသနာတျောမှာ အန်တရာယျကရြောကျလာပွီဆိုရငျ မွတျစှာဘုရားတောငျမှ ကောသလမငျးတောငျမှ သိကွားမငျးတောငျမှ အငွိမျမနေ လကျပိုကျပွီးကွညျ့မနခေဲ့ဘူးဆိုတာ အစဉျအလာရှိခဲ့ပါတယျ။ ဇိနတ်ထပကာသနီ ကိုအကဉျြးခြုပျလောကျမြှ ဖတျကွညျ့လြှငျ စာဖတျသူ သိပါလိမျ့မယျ။ ပုရာဏကဿကွီး ဦးဆောငျတဲ့ ဒိဌိတှကေ မွတျစှာဘုရားနဲ့ တနျခိုးပွိုငျမယျ လို့ပွောတဲ့အခါ မွတျစှာဘုရားက တကယျတနျခိုးပွိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလို တနျခိုးပွိုငျတဲ့အခါမှာ တနျခိုးပွပွီး မိစ်ဆာဒိဌိတှကေို နှိမျနှငျးခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျ့သာသနာကို စျောကားလာတဲ့သူကို တနျခိုးနဲ့ နှိမျနှငျးတယျ၊ အဲဒီလို တနျခိုးနဲ့ နှိမျနှငျးတဲ့အခါမှာ ကောသလမငျးကလညျး အစှမျးကုနျကူညီပါတယျ၊ ပရိတျသတျတှေ လူတှေ စုပေးတယျ၊ စညျတီးလှညျ့လှညျပွီးတော့ ကွညောတယျ လာကွဟေ့ တိတ်ထိတှကေို မွတျစှာဘုရားက တနျခိုး ပွပွီး နှိမျနှငျးတော့မယျ ကွညျ့ကွ တနျခိုးပွပှဲကို သာဝတ်ထိပွညျ တပွညျလုံး မကွညျ့မနရေ ပုံစံမြိုးနဲ့ စညျတီး လှညျ့လှညျပွီးတော့ ကွညောမောငျးခပျပါတယျ။ နောကျ သိကွားမငျးကလညျး ဘုရားသာသနာကို ဘာအရညျ အခငျြးမှ မရှိတဲ့ကောငျတှကေ ဘုရားကို အနျတုတယျ သပေစေဆေို့ပွီး အဲဒီတိတ်ထိတှကေို ရရေယျ လရေယျ နရေယျ ပေါငျးပွီးတိုကျခိုကျပါတယျ။ သာသနာ့အန်တရာယျကရြောကျလာတဲ့အခါ သိကွားမငျးလညျး အငွိမျမနပေါဘူး။ နောကျတဈခါ ကရဏီဆိုတဲ့ ဥပါသိကာမလေးကလညျး ကောငျးကငျပျေါတကျပွီး မွတျစှာဘုရားကို လြှောကျတယျ မွတျစှာဘုရားကိုယျတိုငျ မနှိမျနှငျးပါနဲ့ တပညျ့တျော ဒီကောငျတှကေို နှိမျနှငျးမယျဆိုပွီး လြှောကျ တယျ - နောကျ ခုနှဈနှဈသားကိုရငျလေးကလညျး ဒီလိုပဲ အနာထပိဏျသူဌေး နဲ့ ရှငျမဟာမောဂ်ဂလာနျ၊ ဥပ်ပလ ဝဏျထရေီ တို့ကလညျး မွတျစှာဘုရားကို ကိုယျတိုငျမနှိမျနှငျးပါနဲ့ တပညျ့တျောတို့ကိုယျတိုငျ နှိမျနှငျးပါမယျဆိုပွီး ကရြောကျလာတဲ့ သာသနာ့အန်တရာယျကို အပွိုငျအဆိုငျ နှိမျနှငျးကွပါတယျ။ နောကျဆုံးတော့ ပုရာဏကဿပ တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာကွီး ဘုရားကိုအနျတုလို့မရလို့ အရှကျကှဲပွီး ရထေဲငုံ့ပွီး သသှေားရရှာပါတယျ။ ဒါကိုကွညျ့မယျ ဆိုရငျ ဒီကောငျတှကေို မွတျစှာဘုရားက တနျခိုးပွစရာမလိုဘူး အဘိဉာဉျရတဲ့ ခုနှဈနှဈသားကိုရငျလေးကို ဆုံမခိုငျးရငျကိုရတယျ ဒါပမေယျ့ မွတျစှာဘုရားက ကိုယျတိုငျကို ဆုံးမတယျ နှိပျကှပျတယျ၊ ဒါကိုကွညျ့သော အားဖွငျ့ သူတညျထောငျထားတဲ့ သာသနာတျောကွီးကို ဖကျြလို့ဖကျြဆီးလုပျလာရငျ ဘုရားရှငျကိုယျတျောတိုငျ ခန်တီမနဘေူး လကျပိုကျကွညျ့မနဘေူး ကွောငျ့ကွမဲ့မနဘေူး ဆိုတာကို သိနိုငျပါတယျ။ မွတျစှာဘုရားဟာ ဝါသနာ နဲ့တကှ ကိလသောအားလုံးကို အကုနျပယျထားပါတယျ။ သို့သျောလညျး ပုရာဏကဿပကွီးကို သူ တနျခိုးပွဋိယာ ပွလိုကျလို့ရှိရငျ သမေယျဆိုတာကိုလညျး သိထားတာပါပဲ၊ ဒါပမေယျ့ ထညျ့မတှကျနိုငျဘူး သစေလေိုတဲ့စိတျတော့မရှိဘူး၊ သို့သျောလညျး နှိမျနှငျးမယျဆိုတဲ့ စိတျကတော့ရှိနတေယျ သာသနာတျောကို စျောကားလာရငျ ဒီပုံဒီနညျးနဲ့ နှိပျကှပျကွဆိုပွီး မွတျစှာဘုရားက နှုတျတျောက ထုတျဖျောမပွောရုံတမယျပဲ ရှကေ့နလေုပျပွသှားတဲ့ အစဉျလာသာဓက ထငျရှားရှိပါတယျ။ ဒါဟာ လူမငျးဘကျက ကောသလမငျး၊ နတျမငျးဘကျက သိကွားမငျး၊ ရဟနျးဘကျက ဘုရား သုံးဦးပေါငျးပွီး သာသနာမှာကရြောကျလာတဲ့ အန်တရာယျကို ကာကှယျနှိမျနှငျးခဲ့တာပါပဲ၊ မွတျစှာဘုရားဟာ ကိုယျတျောတိုငျ ရှကေ့နေ လုပျပွသှားခဲ့သလို နှုတျတျောက ထုတျဖျောပွီး ပွောကွားသှားတဲ့ သုတ်တနျတခု ရှိပါသေးတယျ၊
အဲဒီသုတ်တနျက ကိံဒိဌိက သုတျ(မငျးဘာအယူရှိ သလဲဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါပဲ) အဂုင်္တ်ထရနိကယျ၊ ဒဿကနိပါတျ၊ ဥပါလိဝဂျမှာ ပါရှိပါတယျ။ အခါတဈပါးမှာ အနာထပိဏျသူဌေးက တိတ်ထိတှရေဲ့ကြောငျးကိုသှားပွီးတော့ အယူဝါဒ စဈထိုးတယျ၊ တိတ်ထိတှကေ သငျဘာအယူရှိသလဲ လို့မေးတယျ အနာထပိဏျသူဌေးက ငါ မွတျစှာဘုရားရဲ့အယူဝါဒအားလုံး ကိုမသိဘူးတဲ့ အဲဒါဆိုရငျ ရဟနျးတှကေကော ဘာအယူရှိသလဲတဲ့ ရဟနျးတှရေဲ့အယူ အကုနျလုံးကို ငါမသိဘူး တဲ့ အဲဒါဆိုရငျ သငျကကော တဲ့ အဲဒီမှာ အနာထိပိဏျသူဌေးက ပွနျပွောပါတယျ ငါ့အယူကိုသိခငျြရငျ မငျးတို့ အယူကိုအရငျပွောပေါ့ အဲဒီတော့ ဒိဌိတှကေ သူတို့အယူဖွဈတဲ့ သဿတ ဥစ်ဆဒေ တို့ကို အကုနျပွောပါတယျ။ အနာထိပိဏျသူဌေးကွီးကလညျး အေးအေးဆေးဆေး ထိုငျနားထောငျလို့လညျးပွီးရော တလုံးခငျြးခေါငျးငုံ့ပွီး နရေအောငျ အရှကျရလောကျအောငျ မကျြနှာမသာမယာဖွဈအောငျ တခှနျးတလမှေ ပွနျမပွောနိုငျအောငျ ခေါငျးမထောငျနိုငျအောငျ ပွနျနှိပျကှပျတယျ၊ တိတ်ထိတှရေဲ့အယူ ဘာကွောငျ့ဖွဈပျေါလာရသလဲဆိုတာကို ပွော ဆိုပွီး နှိပျကှပျတယျ၊ အဲဒီမှာ တိတ်ထိတှေ အရှုံးကွီးရှုံးပွီး သူဌေးကွီးကိုဘာမှပွနျမပွောနိုငျတော့ သူဌေးကွီးလညျး တိတ်ထိတှရေဲ့ကြောငျးမှ ပွနျ၍ မွတျစှာဘုရားထံကိုသှားပွီးတော့ အကွောငျးစုံကို မွတျစှာဘုရားအား ဝမျးသာ အားရလြှောကျပွပါတယျ။ အဲဒီမှာ မွတျစှာဘုရားက သာဓု ချေါပါတယျ၊ နောငျမလုပျပါနဲ့ကှာ သူတို့ဘာသာသူတို့ အယူမှားတာ နပေါစေ ကမ်မသကာပေါ့ဆိုတဲ့ စကားမြိုးကို ဘုရားမသုံးပါဘူး “သာဓု သာဓု ဂဟပတိ - သူဌေးကွီး ကောငျးတယျ ကောငျးတယျ” “ဧဝံ ဟောတေ မောဃပုရိသာ ကာလနေ ကာလံ သဟဓမ်မနေ သုနိဂ်ဂဟိတံ နိဂ်ဂဟတေဗ်ဗာ - ဒီလိုပဲ ဒီအလကားကောငျတှကေို၊ နိဂ်ဂဟတေဗ်ဗာ - နှိပျကှပျရမယျ ဘယျလို နှိပျကှပျရမလဲဆိုရငျ သုနိဂ်ဂဟိတံ - ကောငျးကောငျးကို နှိပျကှပျဆုံးမရမယျ တဲ့ ဒါပမေယျ့ အသားလှတျကွီး လားဆိုတော့ မဟုတျပါဘူး - သဟဓမ်မနေ - ယုတ်တိယုတ်တနျပွပွီးတော့ ဆုံးမကှ” ဆိုပွီး ဘုရားက သခြောသငျ ပေးခဲ့ပါတယျ။ တဈခါတရံပဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး၊ ကာလနေ ကာလံ - ရံဖနျ ရံခါ အခါခှငျ့ သငျ့ရငျ သငျ့သလို အခှငျ့အရေးရရငျ ရသလို ကွုံရငျ ကွုံသလို နှိပျသာနှိပျကှပျကှာဆိုပွီး ဆုံးမခဲ့တာပါပဲ၊ အနာထပိဏျ သူဌေးကွီးကိုလညျး ခြီးမှမျးတျောမူပါတယျ။ သူဌေးကွီး ပွနျသှားတဲ့အခါမှာ မွတျစှာဘုရားက ရဟနျးပရိသတျ ကို မိနျ့တယျ “ယောသိတော ဘိက်ခဝေ ဘိက်ခူ ဣမသ်မိံဝဿသရူပ သပန်ေတာ ဣမသ်မိံဓမ်မဝိနယေ - ခဈြသား တို့ ငါဘုရားရဲ့သာသနာတျောမှာ အသကျတဈရာ ဝါတဈရာ့နှဈဆယျရတဲ့ပုဂ်ဂိုလျ ဖွဈစကောမူ၊ သောဟိ ဧ၀ မဝေံ အညတိတ်ထိယေ ပရိဗ်ဗာဇကေ သုနိဂ်ဂဟိတံ နိဂ်ဂဏယြေ - ဝါ တဈရာရလို့ အသကျတဈရာ့နှဈဆယျရတဲ့ မထရျေကွီးဖွဈစေ ထိုငျမနရေဘူး သာသနာပဖွဈတဲ့ တခွားသော တိတ်ထိတှကေို ဒီပုံဒီနညျးနဲ့ ကောငျးကောငျး နှိပျကှပျဆုံးမရမယျ - ဘယျလိုလဲဆိုတော့ ယထာတံ အနာထပိဏ်ဍိကနေ ဂဟပတိနာ နိဂ်ဂဟိတာ - သူဌေးကွီး ဆုံးမသလိုမြိုး ဆုံးမရမယျ” လို့ မိနျ့တျောမူပါတယျ။ ဒါဟာ ဘုရားရှငျ သကျတျောထငျရှားရှိစဉျက သာဓက ပါ။ နောကျတခု ရှိပါသေးတယျ ဘုရားရှငျ ပရိနိဗ်ဗာနျစံပွီး တတိယသံဃာယနာတငျတဲ့အခြိနျက ရှငျမဟာမောဂ်ဂလိပုတ်တတိဿမထရျေ ဟာ အာဏာပိုငျမငျးတဈပါးဖွဈတဲ့ သိရိဓမ်မာသောက မငျးကွီးနဲ့ပေါငျးပွီး သံဃာယနာမတငျခငျမှာ တိတ်ထိတှကေို နှိမျနှငျးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ တတိယသံဃာယနာ ဘာကွောငျ့တငျသလဲ ဆိုရငျ ဘုရားရှငျ၏ သာသနာမှာ သာသနာ့အန်တရာယျတှေ ကရြောကျနခေဲ့လို့ပါပဲ၊ အဲဒီအခြိနျတုနျးက အိန်ဒိယပွညျမှာ ရဟနျးသံဃာပေါငျး ၆ သနျး(သိနျး - ၆၀) ရှိပါတယျ၊ သိလဝန်တရဟနျးတှပေါပဲ၊ အဲဒီ သိနျးခွောကျဆယျရှိတဲ့ ရဟနျးသံဃာတှထေဲမှာ ၆ သောငျးရှိတဲ့ ဒုဿီလရဟနျးတှေ မညျသူမှ ရဟနျးခံသင်ျကနျးဝတျပေးခွငျး မရှိဘဲနဲ့ ကိုယျတိုငျသင်ျကနျးကောကျဝတျပွီး သာသနာတျောကို ဖကျြဆီးဖို့ကွိုးစားတော့တာပါပဲ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ရဟနျးတု ဒုဿီလရဟနျးတှေ နဲ့ ရဟနျးစဈတှကေိုခှဲခွားဖို့အတှကျ အသောကမငျးကွီးကိုယျတိုငျ ရှငျမဟာ မောဂ်ဂလိပုတ်တတိဿမထရျေထံမှာ ခုနှဈရကျတိုငျတိုငျ ဗုဒ်ဓအယူဝါဒတှကေိုသငျယူပွီး မငျးကွီးကိုယျတိုငျ စဈဆေး မေးမွနျးပွီး အဲဒီတိတ်ထိတှကေို လူဝတျလဲပွီး တိုငျးပွညျကနှငျထုတျခဲ့ပါတယျ၊ နောကျ တတိယသံဃာယနာ တငျခဲ့တယျ တတိယသံဃာယနာတငျတယျဆိုတာက တိတ်ထိတှရေဲ့တရားနဲ့ ဗုဒ်ဓရဲ့ တရားမရောနှောအောငျ လုပျလိုကျ တာပါပဲ ကထာဝတ်ထုကမျြးကို လလေ့ာမယျဆိုရငျ ဒီအကွောငျးတှကေို အကုနျသိနိုငျပါတယျ။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:46 AM No comments:
tint | 8:37 AM |2Comments so far
ကဲပါလေ ဘယနားကစရမှန်းမသိရင်လဲ စေတီက စရအောင် ။
ဦးသီရိန် တို့ ဦးဝါသေဌတို့ ဘုရား ။
ဟောဒါက ဦးကောသလရွှီးတဲ့စေတီ အကြောင်း
ဟောဒါက ဆရာတိုက်စိုးရဲ့စေတီအထိမ်းအမှတ်များ သုတေသနစာတန်း ။
ဘယ်ဟာမှန်လဲ ဘုရား ။ ထောက်ကြပါ ။
၁၁. ထီးတော် (၇) ဆင့်သည် အထက်ဖိုလ် ခုနှစ်ပါးကို ပြဆိုခြင်း(ဦးကောသလ )
အထက်ပါ အချက်များနဲ့ မပြည့်စုံသော စေတီဖြစ်ပါက ဓာတ်ရိုက် ဓာတ် ဆင်၊ ယတြာ၊ အထက်လမ်း၊ အစီအရင်များနဲ့ တည်ထားသော စေတီ မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ နိုင်ပါသည်။ (ဦးကောသလ )
ကဲ စကြပါဘုရား ။
Posted by tint at 8:37 AM2comments:
tint | 10:53 PM | 1 Comment so far
အလွဲထောက်ရာမှာ ဟောတဲ့ သူကို ပါစင်နယ် နာစေ မထောက်ပါ ။
အယူလွဲကို အမှားထောက် အမှန်ပြပြီးသာ ချေဖျက်နိုင်ပါတယ် ။
ပါစင်နယ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ပြီး အယူလွဲ ကိုချေမရပါ။
ဥပမာ လူသေလူဖြစ် ကိုဘဲကြည့်ပါ ။
မူလဆရာကြီးသေလို့ ဘဲ အရိုးတောင်မြေသြဇာဖြစ်ပေါ့ ။ အယူလွဲက မသိနားမလည်သူတွေကြားပြန့် ပွားဆဲပါ ။
ဒီမှာ စာနဲ့သေချာထောက်ထားတဲ့သူတွေကို ပါစင်နယ်အချက်အလက် တခုမှ မပါပါ။ မယုံက စာတိုင်းကို အသေအချာကြည့်ပါ ။
သူတို့ ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေကိုသာထောက်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ တချက်လေး ပြောစရာရှိပါတယ်
ဆရာပါရဂူနဲ့ဆရာဦးအေားမောင်။
သူတို့ စာတွေဟာ ဘာသာပြန်စာတွေပါ ။
(ဆရာပါရဂူရဲ့လူသေလူဖြစ်ဆရာကို အလွန်မတန်ချီးမြှောက်ထားတဲ့ဟောပြောချက်ကလွဲရင် )
သူတို့ ပြသနာက မူရင်းရေးသူအာဘော်လား သူတို့ ကိုယ်ပိုင်အာလော်လား ရှင်းအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့ပြသနာပါ ။ ဒါကြောင့် ခုတိုင်အောင် ရှုပ်နေတာပါ ။
ယှဉ်စဉ်းစားသင့်တာက ဆရာမြသန်းတင့်ပါ ။
ဆရာဟာ တော်လစတွိုင်းရဲ့စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘာသာပြန်စဉ်က အဲအချိန်မှာကားလ်မာ့စ်ရုပ်ဝါဒီဖြစ်တဲ့သူ လက်မခံနိုင်တဲ့တော်လစတီုင်းရဲ့ အယူကို အမှာစာရေးပြီး ရှင်းအောင်ပြုခဲ့ပါတယ် ။
နောက်တဦး ကတော့ " ဒေါက်တာ" ချစ်ငယ် ( လန်ဒန်) ပါဘဲ ။
သူ့ ဟောတရားတွေကို တော့အသေးစိတ်စီစစ်မပြခဲ့ ပါ ။
မလိုအပ်လို့ ပါ ။
မရှိတဲ့ ယ .ူနီက မရတဲ့ ဘွဲ့ ကြီး လူရှေ့ အတင်းကောက်တပ်လာမှတော့ ရှေ့ ဆက်စရာကိုမရှိလို့ ပါ ။
အမှားထောက်ရာမှာ ပါစင်နယ်မပါပါ။ အယူလွဲကိုသာထောက်ပါတယ် ။ အထောက်ခံရသူများ ကိလေသာတရားနဲ့ မကင်းလို့ဒေါသမာနနဲ့တုန့် ပြန်တာတော့မတတ်နိုင်ပါ ။
Posted by tint at 10:53 PM 1 comment:
ကြောက်လို့ သာ လုပ်နေပါသည်
tint | 6:29 AM | Be the first to comment!
ဘာသာတရားမှာ အမှားထောက်တဲ့စာတွေ ရေးနေပြီဆိုရင် ပြဿနာ ရှိလာမယ်ဆိုတာ မသိမဟုတ် စောထဲက သိပြီးဖြစ်ပါတယ် ။
၁) မူလကပင် ဆရာကောင်း နဲ့ တွေ့လေ့လာမှုကလဲမှန်လို့ လမ်းဖြောင့်ပြီးသူများ ။။ ထိုလူစုအနေနဲ့အမှားထောက်သောစာများကို လာလဲ မဖတ်တတ်ကြသလို စိတ်လဲ မ၀င်စားကြ။
၂) မူလကပင် ဆရာမှား၌ စွဲမြဲပြီးသူများ ။ ထိုလူစုမှာကား မိမိတို့ မပြောလေနှင့် သိကြားမင်း ဆင်းဟောတောင် သိကြားကိုဆဲမည့်သူများပင် ။
၃) ရောယောင်နောက်လိုက် ဝေလေလေများ ။ ဒီလိုလူများကတော့ ရေးထားသောစာကိုပင် အမြီးအမောက်တည့်အောင်မဖတ်တတ်ကြလေ ( ရီစရာ ထည့်ရေးရရင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၀လောက်မှာသေတဲ့ အယူလွဲ ဦးဥက္ကဌ နဲ့မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၀၀ကျော်မှာ ပျံလွန်တော်မူရှာသော တောလားများအရေးများသည့် ပေလေးပင် ရှင်လေးပါးအ၀င် ရှင်ဥတ္တမကျော်ကိုတောင်ခွဲမသိသောသူများပါပေ ။ )
၄) အလွန်နဲလှစွာသော လူနဲစုလေးမှာ မူလအခံမညံ့ ၊ သဒ္ဓါတရားလဲရှိပါသော်လည်း ကံအလှည့်မသင့်သဖြင့် အဓမ္မ၀ါဒီများ၏ ညှို့ ချက်တွင် မိနေသောသူများပါပေ။ ထိုနဲလှစွာသော လူစုသာ ထောက်စာကို ဖတ်မိသောကြာင့် မိမိဆည်းကပ်မိသော တောင်ပို့ ၏ ဖွတ်ထွက်သော အဖြစ်ကို သိနိုင်ပေသည် ။
ထိုသောအခါမေးစရာကား ထို နဲလှစွာသော လူစုလေးအတွက် အဓမ္မ၀ါဒိအများ၏ ဆဲဆိုခြင်းကို ခံပြီး ဒီအလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေသင့်သလောဟုပင် ။
မိမိတဦးအတွက် အဖြေကား ကြောက်လို့ ပင်လုပ်နေပါသည် ဟုသာ ။
သွေးဝမ်းသွန်သော ဝေဒနာကြီး နှင့် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြု အံ့ဆဲဆဲတွင် အရှင် သုဘဒ်၏ အယူလွဲကို တည့်ပေးခဲ့ သောမြတ်စွာဘုရား
သွေးအန်သော ဝေဒနာကြီးနှင့် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုအံ့ဆဲဆဲတွင် မယ်တော်ကြီး၏ အယူလွဲကို တည့်ပေးခဲ့ သော အရှင်သာရိပုတြာ
၁၃ပါးသော ဓုတင်ဆောင်လျက်က မိမိ၏ ကြီးရင့်လှသော ခန္ဓာဝန်ကိုမထောက်ဘဲ ပထမသံဂါယနာကို တင်တော်မူခဲ့သော အရှင်မဟာကဿပမှ စပြီး
ဦးဥက္ကဋ္ဌ၏ အဓမ္မ၀ါဒကို ရိုက်ချိုးခဲ့ သော ၀ိနိစ္ဆယခုံရုံး အမှတ် ၂ တွင် ဥိးဆောင်ခဲ့ ပြီး ခုခါ ခန္ဓာဝန်ချခဲ့ ပြီးဖြစ်သည့် မကွေးဆရာတော်နှင့် မြောင်းမြဆရာတော်အလည် ။
ယခုတိုင် သာသနာရန်ဆူးရန်ညှောင့်တို့ ကို တတ်အားသမျှ ရှင်းလင်းပေးတော်မူနေကြသော သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်များ အမှူးရှိသော သံဃာတော်အရှ့င် သူမြတ်တို့ အဆုံးထိ တို့ ၏ ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို မျက်ကွယ်ပြုရမည်ကို အလွန်ကြောက်ပါသည် ။
ထို့ ကြောင့် အလွန်နည်းလှစွာသော အစုအဖွဲ့ လေးတခုသာ ကျေးဇူးရှိမည်ကို၎င်း ။ အင်အားမသေးလှသော အဓမ္မ၀ါဒီများ၏ ဆဲဆိုရန်မူခြင်းကို ခံရမည်ကို၎င်း သိသိကြီးနှင့်ပင် ထေရ၀ါဒသာသနာအတွင်း အလွဲ အမှားအဓမ္မ၀ါဒီများ ပေါ်နေသမျှ ဖေါ်ထုတ်နေမည်သာ
Posted by tint at 6:29 AM No comments:
tint | 4:29 AM |2Comments so far
တပည့်တော်တို့ပြဿနာက အယူလွဲတွေပြန်ပြန်ပေါ်နေတာကို ရှင်းမနိုင်ဖြစ်နေတာဘုရား ။
အဲမှာတပည့်တော် လိုက်လို့ ရသလောက် ဖြစ်နေပုံက အယူလွဲတွေက ပေါင်းမြက်နဲ့တူနေပြီး အယူလွဲတွေကို အားပေးနေတဲ့လှူဒါန်းထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေက မြေခံရေခံနဲ့ တူနေတာ သတိထားမိပါဘုရား ။
အဲဒီပြဿနာကို တပည့်တော်လိုက်ကြည့်တော့ တပည့်တော်တို့ပညာရေးနဲ့လူနေမှုစနစ်ဟာ အခြေခံတခုဖြစ်နေတာ သတိပြုမိပါဘုရား ။
တပည့်တော်တို့ပညာသင်ကြားမှုကို ကြည့်ရင် ကုန်းဘောင်ခေတ် ကနေဘဲ စကြည့်ပါဘုရား ။ မိန်းကလေးတွေက သေစာရှင်စာတတ်ပြီးရောပေါ့ ဆိုပြီး ကျောင်းလွှတ်တာ မရှိသလောက်ပါဘုရား
ယောက်ျားလေးတွေကြည့်တော့ ၃စုကွဲသွားတာတွေ့ ရပါ့ဘုရား
ပထမများရာစု ( ၇၀ %) လောက်က ၇နှစ် ၈နှစ်သားလောက် ကျောင်းရောက် သင်ပုံးကြီးမင်္ဂလသုတ် ကုန်၊ သေခိယ ကျက် ၊ ၁၀နှစ်သားလောက် ကိုရင် တ၀ါလောက်ဝတ် ၊ လိင်ပြန်တာနဲ့မိဘအလုပ်လယ်ထဲချောင်းထဲ တန်းဆင်းတော့တာပါဘဲဘုရား ။ သူတို့ အဘို့ က ကျောင်းက သင်တဲ့ စာဟာ ကျောင်းပြန်ရောက်ပြီး ဘာသာ တရားဆိုတာ ငယ်ဆရာ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ခိုင်းတာ လုပ်ပြီးတာဘဲ လို့သဘောထားပါ ဘုရား ။
ဒုတိယ အစု ( အနဲဆုံးအစု) ကတော့ ကိုရင်ဘ၀မှာ သဒ္ဒါ၊သင်္ဂြိုဟ်တက် ၊ ဆန်းသင် ၊ အဘိဓမ္မာလိုက် ပင်ကိုယ်ကလဲဥာဏ်ကောင်း ပါရမီလဲပါ။ မိဘကလဲ တတ်နိုင် (တတ်နိုင်ဆိုရာမှာ ပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့နိုင်ရုံမက ဒီသားတယောက်ရဲ့ လုပ်အားကို အဆုံးခံနိုင် ) ။ လို့ရဟန်းဘောင်တက် ။ စာတတ်အကျော်အမော်ဖြစ်လာ။ ဒါပေမဲ့ဒီရဟန်းတော်အကျော်အမော်များရဲ့ ဥာဏ်ကျက်စားရာဟာ နိဿယများ ကျမ်းကြီးများ ( စွယ်စုံကျော်ထင် အဖြေကျမ်းလို ) သာ ဖြစ်နေပြီး သာမန် လူထုနဲ့အလှမ်းကွာနေပါဘုရား
တတိယအစုကတော့ မိဘကတတ်နိုင် ၊ လူလေးတွေကလဲ ထက် ၊ ကိုရင်ဘ၀ထဲက ဆေးကျမ်းဓါတ်ကျမ်းကစလို့ဆင်မြင်းအတတ်ထိ လိုက်စားလာ ။လိင်ပြန်တော့ တခါ မြို့ စား ရွာစား မင်းပါးစိုးခွင် ၀င်ထွက် ပညာတွေတက်ရာက မင်းမှုဆက်ထမ်းလာပါဘုရား။ ဒီလူတွေဟာ ထက်မြက်တယ် ။ လောကီပညာစုံတယ် ဆိုသော်လဲ လောကုတ္တရာဗဟုသုတကျ ထင်သလောက်မပေါက်ပါဘုရား ။ သို့ သော် သူတို့ဂုဏ်ကြောင့် လောကမှာတော့ ပြောသမျှ တင့်တယ်သယောင်ပါဘုရား.။
ဒီလိုရှိနေသော်လဲ ဆရာတော်များသြဇာကြီးနေတဲ့လူ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာသာရေးပြဿနာ အကြီးကြီးမပေါ်ပါဘုရား ။
သို့ သော် ကိုလိုနီခေတ် ရောက်လာတော့ ပြဿနာ ကြီးလာပါဘုရား
ဒီမှာ ပထမအစုနဲ့ဒုတိယအစု က အများကြီးမပြောင်းပါဘုရား ။ ဒုံရင်းဒုံရင်းပါဘဲဘုရား
တတိယအစုကျတော့ အရင်က ပွဲကျောင်းတက် ၊ မြို့ ဝန်ထံခစားဆိုတဲ့ပညာရေးကနေ လောကဓါတ်ကျောင်းတက် ၊ ကောလိပ်ရောက် ဆိုတဲ့ခေတ်ပညာရေးကို ကူးလာပါဘုရား ။ ဒါနဲ့ တပြိုင်ထဲဘဲ ကိုလိုနီခေတ်လူနေမှုသဘောကြောင့် ဆရာတော် သံဃာတော်များသြဇာကျလာတာနဲ့ ကြုံပါဘုရား ။
လောကဓါတ်ကျောင်းများရဲ့ သင်ကြားမှုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနဲ့ ဝေးသထက်ဝေးလာပြီး လောကဓါတ်ကျောင်းထွက်တွေရဲ့ဘာသာရေးဗဟုသုတရော ဆရာတော်သံဃာတော်များကို လေးမြတ်မှုပါ လျော့သထက်လျော့လာပါဘုရား ။
တချိန်ထဲမှာဘဲ ပထမအစု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကနေ လယ်ထဲ ချောင်းထဲရောက်တဲ့အစုကလဲ နည်းသထက် နည်းလာပြီး လောကဓါတ်ကျောင်း တက်လာတဲ့လူစုက ပိုများလာပါဘုရား ။
ဒီတင် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံလောက်တောင် သိမှတ်မိတဲ့လူနည်းသထက်နည်းလာပြီး အမည်ခံရုံ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ပေါများလာပါဘုရား ။ ဘာသာတရားကိုယ်ခံနဲတဲ့ အခါကျတော့ အလွဲ အမှားဟောတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ ရင် အမှန်အမှားခွဲခြားနိုင်မှုလဲလျော့လာပါဘုရား
တပြိုင်ထဲမှာဘဲ ဂုဏ်ကြီးသူ လောကီမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဒကာများရဲ့အကြိုက်လိုက် အလိုက်အထိုက် ဟောရာကနေ ပါမှန်းမသိပါပြီး ကိုယ့်ဟာကိ်ုယ် လွဲမှန်းမသိ လွဲရာကနေ ပိုပိုလွဲ ။ နောက်ဆုံးတော့ လက်ခုတ်တီးပေးတဲ့ပရိဿတ်နောက် ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်မိတဲ့သံဃာတော်များလဲ ပေါများလာပါဘုရား ။
ဒီအခြေအနေမှာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရား မာန်လည်ဆရာတော်ဘုရား ကျီးသဲဆရာတော်ဘုရားတို့ စလို့လူထုထဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံတွေ အယူမှန်တွေကို တည့်မတ်ဖြန့် ဖြူးပေးမဲ့ဆရာတော်များစဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ်ခဲ့တည့်မတ်ပေးခဲ့သော်လဲ သူတို့စာတွေကို နားမလည်နိုင် နားလည်အောင်မဖတ်နိုင်တဲ့ပညာတတ်။လူရည်တတ် ဆိုသော ဒကာမိုက်များလောကမှာတော့ အယူလွဲ ကိုယ်တော်များ ဆက်လက်တွင်ကျယ်နေဆဲပါဘုရား ။
မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ၁၉၈၀ကစခဲ့တဲ့ဝိနိစ္ဆယခုံရုံးများနဲ့အယူလွဲများကို တည့်ခဲ့သော်လဲ ကျားကျားမီးယပ် လူစုတွေ ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးမခွဲခြားနိုင်တဲ့လူမိုက်တွေကြားမှာတော့ အမှန်တရားဟာ မထွန်းကားနိုင်သေးပါဘုရား
ဘုရားတပည့်တော် စာရှည်ကို ချုပ်ရရင်တော့ တပည့်တော်တို့ ရဲ့အဓမ္မ၀ါဒီများကို ဖေါ်ထုတ်ဆန့် ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသည် ရေဆန်လမ်းကို လျှောက်ရသလို ခက်ခဲနေဆဲပါဘုရား။
သို့ သော်မသိနားမလည်ခြင်းကို အခြေခံပြီး ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာမို့ခနိုးခနဲ့စောင်းကာရွဲ့ ကြသော်လည်း သည်းခံပြီးသာ မှန်ရာကို ဆက်လက်တင်ပြ ဖြန့် ဖြူးကြရုံသာ ရှိပါကြောင်း လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား
Posted by tint at 4:29 AM2comments:
လူသလေူဖွဈနှငျ့ ဝါဒနုဝါဒမြား ဝိနိစ်ဆယချေါ ထရေဝါဒစှယျစုံကမျြးကွီး
tint | 3:07 AM | Be the first to comment!
မွနျမာကြူးပဈဖိုရမျ သာသနာပါလ မောငျနှမမြားမှ ဓမ်မဒါန ပွုသော လူသလေူဖွဈနှငျ့ ဝါဒနုဝါဒမြား ဝိနိစ်ဆယချေါ ထရေဝါဒစှယျစုံကမျြးကွီး
Posted by tint at 3:07 AM No comments:
tint | 4:02 PM | 12 Comments so far
၁) မဟာယာနပေါ် သဘောထား
၂) ထေရ၀ါဒမှာ ဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ကျမ်းစာပါလား
၃) ဗုဒ္ဓဟောမြွက်တော်မူသော သုတ်၊၀ိနည်း အဘိဓမ္မာထဲမှာ ခေတ်နဲ့မညီလို့ ဆိုပြီး ပြောင်းစရာပါလား
အဲကနေ တဆက်ထဲ နွယ်လာတာက ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အလွန်လွတ်လပ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းမမဲ့ ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကို သဘောပေါက်နိုင်ဘို့ လိုပါတယ် ။
ကိုချမ်းငြိမ်းအမေးကိုလိုက်လို့အစဉ်လိုက်စဉ်လိုက်ပေမဲ့အဖြေကျတော့ နောက်ပြန်ပြန်ဖြေရပါ့မယ် ။
ပထမဆုံးအချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လွတ်လပ်ပါတယ် ။ဘယ်လိ်ုလွတ်လပ်လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှ လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ရမယ် မယုံ ငရဲချမယ်လို့ မကန့် သတ်ပါ ။ ထို့ အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ဖြစ်လို့ဘာတွေလုပ်ရမယ်လို့ လဲ အတင်းအကြပ်မသတ်မှတ်ပါ ။
ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းမမဲ့ ဘူုးဆိုတာမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တဥိး၊ အသင်းအဖွဲ့တခုက လုပ်တဲ့စည်းကမ်းမဟုတ်ဘဲ သဘာဝ စည်းကမ်းသာရှိပါတယ် ။ အဲစည်းကမ်းတွေတော့ ဖေါက်မရပါ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဟာ ဘုရားဖြစ်ချင်လား ။ ရပါတယ် ။ ဘုရားဆုကို ပန် ၊ ပါရမီ ၁၀ပါးကိုဖြည့် နိယတဗျာဒိတ်ခံ ၊ သတ်မှတ်တဲ့ကာလ ပါရမီ ၁၀ပါး အပြား ၃၀ဖြည့် ဘုရားဖြစ် ။
အဂ္ဂသာဝက မဟာသာဝကဖြစ်ချင်လား ။ သာဝကဆုကိုပန် ၊ ပါရမီ ၁၀ပါးကိုဖြည့် နိယတဗျာဒိတ်ခံ ၊ သတ်မှတ်တဲ့ကာလ ပါရမီ ၁၀ပါး အပြား ၃၀ဖြည့် ။ သာဝကဖြစ် ။
ဟာ ရှုပ်ပါတယ် ။ ခုဘ၀ဘဲ မဂ်ဖိုလ်ယူမယ်ကွာ ။ ရပါတယ် ။ လာခဲ့။ လူဆို သီလ၊ ရဟန်းဆို ၀ိနည်းလုံ ၊ ဒိဋ္ဌ်ိကင်းစင်အောင် တရားနာ ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းယူ ၊ ၀ိပဿနာ အားထုတ် ၊ မဂ္ဂဋ္ဌာန် ဖလဋ္ဌာန်ဖြစ်
ကဲပါလေ ။ ခုဘ၀တော့ ပျော်သလိုလေးနေမယ် ။ နောက်ဘ၀မှ ကြည့်ရှင်းတာပေါ့ ဆိုသူများရပါသေးတယ် ။ လူဆို သီလလေးလုံ ၊ ရဟန်းဆို ၀ိနည်းလေးစား ။ (လေးစားဆိုတာ ကိုသေချာနားလည်စေချင်တယ်နော် ၂၂၇သွယ်သောသိက္ခါပုဒ်ကို တစက္ကန့် မှ မကျိုးရလို့ဆိုတာ မဟုတ်ပါ ။ မတော်တဆကျိုးပေါက်ပါက ကုစားနည်းတွေရှိပါတယ် ။ မတော်တဆကျိုးပေါက်တာကို အပြစ်မဆိုပါ။ တမင်ချိုးဖေါက်တာနဲ့ပစ်ပါယ်တာကျ မဖြစ်သင့်လို့ သာ ဆိုပါတယ် ။ ) ဒါဘဲ ။
ဒီအစဉ်လေးနဲ့သွားတဲ့ သဘာဝစည်းကမ်းလေးကို ဘယ်သူမှ ဖေါက်မရပါ။ ဒီအစဉ်လေးအတိုင်းဘဲ သွားနေရပါတယ်
ရဟန်းဖြစ်လို့ဝိနည်းလုံရမယ်မဆို ၊ ဒါပေမဲ့အရိယာဖြစ်လာရင်တော့ ၀ိနည်းကို အလွန်လေးစားပြီးလို့ နားလည်ရပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓ၀ါစန မြတ်ဘုရားဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မတို့ ကို သာမန်ခွဲရင် သုတ္တန် ၊ ၀ိနည်း ၊ အဘိဓမ္မာဆိုပြီး ၃ပိုင်းပိုင်းရပါတယ် ။
သို့ သော် ဒီ ၃ပိုင်းဟာ တခြားစီ သတ်သတ်စီမဟုတ်ပါ ။ သုတ္တန် နဲ့ဝိနည်းဟာ အဘိဓမ္မာရဲ့principles တွေကို လက်တွေ့ အသုံးချတာဖြစ်လို့အားလုံးဟာ အဘိဓမ္မာနဲ့မလွတ်ပါ။
ထို့ အတူ သုတ္တန်တွေ ဟာ မြတ်ဘုရားက လက်ရှိတရားရထိုက်သော ဝေနေယျတို့ ကို လက်တွေ့ လိုက်နာနိုင်အောင်သင်ပြပေးတာမို့လက်တွေ့ ကျင့်စဉ်တွေချည်းသာဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ သော် ဒီနေရာမှာ တခုသတိထားရတာက တရားနာသူ ရဲ့ပုဂ္ဂလစရိုက်ဖြစ်ပါတယ် ။ အရှင်စူဠပန် အရှင်ဗာရုလတို့ လို exceptional တွေလုပ်သလိုလိုက်လုပ်လို့ တော့မဖြစ်သေးပါ။ ဒီတော့ သုတ္တန်မှာ မိမိ နဲ့ နီးစပ်ရာကို ယူရပါတယ် ။ ဆဆက္ကသုတ္တန် ၊ ဓမ္မစကြာ၊ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် စသော ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်သုတ္တန်တွေဟာ လူများစုနဲ့သင့်တော်တတ်ပါတယ် ။
၀ိနည်းကတော့ သံဃာ့အသက်မို့ဝိနည်းမလုံသေးဘဲ မဂ်ဖိုလ်ရဘို့ ဆိုတာ ( အထူးသဖြင့် သာသနာနှောင်းကာလ) မှာ အလွန်ခက်ပါတယ် ။
ဘုရားရှင်ဟာ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်များကို ထုတ်ရာမှာ အလွန့် ကို မျှတပါတယ် ။ မိမိတပည့်သားများ တရားရနိုင်အောင် သပ္ပါယမျှစေဘို့ သာ အဓိက ဦးတည်ပြီး ၂၂၇သွယ်သောစည်းကမ်းများကို ထုတ်တော်မူပါတယ် ။ မယုံကြည်သူများအနေနဲ့ပါရာဇိက လေးတန်ကစလို့၂၂၇သွယ်သော သိက္ခါပုဒ်များကို တခုချင်း လေ့လာပြီး မတရားတာ တခုပါတယ်လို့ ထင်က ဆွဲပြနိုင်ပါတယ် ။
ဒီတော့ချုပ်ရင် သာသနာတော်မှာ မဂ်ဖိုလ်ရဘို့ ဥိးတည်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အဘို့ဗုဒ္ဓ၀ါစနသည် ဘယ်ခေတ်မဆို ပြောင်းစရာပြင်စရာမရှိ ပြည့်စုံပြီးပါ ( ဒုတိယ လျှာရှည်ခြင်း နိဋ္ဌိတံ )
စောဒကတက်နေကျပြဿနာက မင်းတို့ထေရ၀ါဒကလဲ ဘုရားဟော ၊ မဟာယာနကလဲ ဘုရားဟော ပြောနေပါလား ဆိုတဲ့ ငြင်းနေကျစကားပါ ။
ဒီပြဿနာကတော့ သာသနာဝင် သံဃာဂုဏ်ရည်ကို မလေးမြတ်သော သူများအတွက်ဖြေစရာမရှိပါ ။
လေးမြတ်သောသူများအတွက်ကတော့ စထဲက ဒီအမေးမပေါ်ပါ ။
သာသနာတော်မှာ ဆရာစဉ်ဆက်ဆိုတာ ရှိပါတယ် ။
ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်ထဲက မဟာသာဝကကြီးတွေဟာ ဘုရားရှင် နှုတ်ခပါတ်တော်ကို နှုတ်တက်ရွရွ ရွတ်ဆို ထိန်းသိမ်းကြသလို ဘုရားရှင်ရဲ့မူရင်း ၀စနနဲ့သာဝကကြီးများရဲ့ထပ်ဆင့် အကျယ်ဖွင့်ဟောတော်မူချက်တွေကို သီးခြား မရောရှက်စေဘဲဆောင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလိုဆောင်ထားသော တရားတော်တို့ ကို တတိယသာဝကဖြစ်တော်မူသော မဟာကဿပကိုယ်တော်တိုင်ဦးဆောင်လို့ဧတဒဂ်၅တန်ခံ ဘုရားရှင်ရဲ့ညီတော် အလုပ်အကျွေးဖြစ်တော်မူသော အရှင် အာနန္ဒာ ၊ ၀ိနည်းဓိုရ် အရှင်ဥပါလိတို့ ပါဝင်တဲ့၅၀၀သော ရဟန္တာတို့ က သန့် စင် ထိန်းသိမ်းတော်မူခဲ့တာကို ပထမ သင်္ဂါယနာ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒီအစဉ်အတိုင်းထေရ၀ါဒ စဉ်ဆက် ထိန်းသိမ်းလာလို့ဆဋ္ဌ သင်္ဂါယနာတိုင်ခဲ့ ပါပြီ။ အလွဲအမှားကင်းစင်တယ်ဆိုတာကို အရင်တခါတင်ပြဘူးသလိုဘဲ ဆဋ္ဌမူ မြန်မာပြန်နဲ့စတုတ္ထမူ အင်္ဂလိပ်ပြန်များ မကွဲလွဲတာက သက်သေပြနေပါတယ် ။ ဦးဥက္ကဋ္ဌတို့ ကစခဲ့သော အဋ္ဌကထာဆရာများကိ စွတ်စွဲချက်ကတော့ မကြာခဏပေါ်နေကျဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါမှန်နိုင်သလားဆိုတာကို လေ့လာတော့ နမူနာ ပြစရာပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တပါး ထွန်းတောက်ခဲ့တာ မမေ့စေချင်ပါ ။
ဓါးမကူးဆရာတော်လို့ တွင်ခဲ့သော တောင်ဖီလာဆရာတော် ဟာ အနောက်ဘက်လွန်မင်းက ပြည်မြို့ ကို ငါတိုက်တာမှာ ရှင်တဆူ လူတယောက်သာ ရ၏လို့မိန့် ခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ပါ ။ ဒီဆရာတော်ဘုရားဟာ မိမိပြုအပ်သော နိဿယထက်တိုကျဉ်းပြည့်စုံတဲ့ရွှေဥမင်ဆရာတော်ရဲ့နိဿယကို ကြည့်ပြီးနောက် နောက်လူတွေ နှလုံးမကွဲပြားရအောင် မိမိနိဿယကို မီးတင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါလေးဟာ ကျမ်းပြုဆရာတော်တွေရဲ့မြတ်သော နှလုံးကို သက်သေပြုချက်လေးပါ ။ ( တတိယအချက်ပြီး)
ဒီတော့ ၀ိနည်းသိက္ခါပုဒ် ၂၂၇သွယ်ထင်ရှားရှိပါတယ် ။
ဘယ်ဟာ အကုသိုလ် ၊ ဘယ်ဟာ ကာမာဝစရကုသိုလ် ၊ဘယ်ဟာ သမထ ၊ ဘယ်ဟာ ၀ိပဿနာလို့ထင်ရှားရှိပါတယ် ။ ဒီလို ထင်ရှားရှိပြီးအချက်တွေဟာ ဓမ္မဖြစ်ပါတယ် ။ ဓမ္မလမ်းကြောင်းက သွေဖီတဲ့အယူ ဟောပြောချက်တွေ မှန်ရင် အဓမ္မ ( တရားမဟုတ် ) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအချက်တွေ ပေါ်လာရင် ဓမ္မ၀ါဒီတွေ အနေနဲ့စိစစ်တင်ပြရပါတယ် ။ ဒီလိုတင်ပြတာဟာ လူကိုမုန်းလို့နာမည်ကြီးချင်လို့ မဟုတ်ရပါ။ ဓမ္မလမ်းကြောင်းမသွေရအောင်ထောက်ရပြင်ရတာသာဖြစ်ပါတယ် ။
၀ိနိစ္ဆယဆိုတာ ဘုရားရှင်လက်ထက်ထဲက ရှိပါတယ်
အရှင်ယမက အယူလွဲတာကို အရှင်သာရိပုတြာက ၀ိနိစ္ဆယပြုပြီးလမ်းတည့်စေခဲ့ပါတယ် ။
အရှင်ဥပသေန စေတနာနဲ့ မှားသော အမှားကို မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင် ၀ိနိစ္ဆယပြု ၀ိနည်းတော်သတ်မှတ် လမ်းတည့်စေခဲ့ပါတယ် ။
နောင်ခေတ်မှာ သင်္ဂါယနာတင်သံဃာတော်ကြီးများရဲ့ ဂုဏ်ကိုတော့ ထပ်အမွှန်းတင်စရာမလိုတော့ထင်ပါတယ် ။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားဟာ ဆရာအစဉ်အဆက် လေးစားရသော သီဟိုဖြစ် ဋီကာကျော်မှ ဗုဒ္ဓ၀ါစနနဲ့ကွဲလွဲချက်များကို ဋီကာမော်နဲ့ တည့်ခဲ့ ရသလို မဟာစည်ဆရာတော်ဟာလဲ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်ထဲက လွဲချော်ချက်များကို သူ့ ရဲ့ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မြန်မာပြန်မှာတည့်ခဲ့ရပါတယ်။
ခုနောက်ဆုံးလဲ ရဟန္တာလို့ ထင်ရှားသော မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောပြောချက်များထဲက ပါဠိတော်နဲ့ကွဲလွဲသော အချက်များနဲ့လူများအကောက်အယူလွဲစေနိုင်သော အချက်များကို မိုးကုတ်ဝိနိစ္ဆယနဲ့တည့်မတ်ပေးခဲ့ရတာ အများအသိပါ ။
Posted by tint at 4:02 PM 12 comments:
tint | 8:29 AM | 10 Comments so far
အဓမ္မ၀ါဒီများဖေါ်ထုတ်ဟန့် တားတဲ့အသင်းလေးရယ်လို့ဖြစ်လာတော့ အားပေးတဲ့ သူလဲ ရှိသလို ကန့် ကွက်ရှုံ့ချတဲ့ သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
လောကဓံ တရားထဲ အ၀င်မို့ မဆန်းလို့ ပြောလို့ရသလို အသင်းအနနဲ့ လဲ မိမိဦးတည်ရာကို လျှော့လိမ့်မယ်လို့ မဟုတ်ပါ ။
ဒါပေမဲ့ခြင်္သေ့ လည်ပြန်ပေါ့လေ ။ ကန့် ကွက်ကြသူတွေ ဆဲဘာပေးကြသူတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ကြစို့။
@အုပ်စု ၁) အသင်းမှ အဓမ္မ၀ါဒီအဖြစ်ဖေါ်ထုတ် ခံရသူများနဲ့အပေါင်းပါများ @
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အထူးပြောစရာမရှိလို့ ဘဲ ဆိုပရစေ ။
နိုင်ငံတော်သီးခြားခုံရုံး အမှတ် ၂) လူသေလူဖြစ်ဝိနိစ္ဆယဆရာတော်များ မိန့် ကြားခဲ့သလိုပါဘဲ ။
မိမိဘာသာ ယူချင်တဲ့အယူယူခြင်းသည် ခုံရုံးရောက်ကြောင်းမဟုတ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံပြီး ဗုဒ္ဓဟောမြွက်တော်မူသော တရားတော်များနဲ့ဆန့် ကျင်ဘက် ဟောကြားဖြန့် ဝေနေခြင်းသည်သာ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ဦးဥက္ကဋ္ဌဘာသာ ၊ ဦးဥာဏဘာသာ လို့ လွတ်လပ်စွာ ထူထောင်ကြပါက မိမိတို့ အနေနဲ့ ပါတ်သက်စရာမရှိပါ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပါနေလို့ သာ မိမိတို့ပါတ်သက်နေရတာပါ ။
ဒီနေရာမှာ တချက် ထောက်ပြလိုတာက မိမိတို့ အနေနဲ့ လဲ အရိယာများနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ မဟုတ်လို့အမှားလုံးဝကင်းမယ်လို့မခံယူထားပါ ။ မိမိတို့ ရေးသားခဲ့ တဲ့ဆောင်းပါ့းများမှာ အမှားပါတယ်ဆိုပါက ဘာကြောင့်မှားတယ်ဆိုတာကို ပါဠိတော် ၊အဋ္ဌာကထာဋီကာအကိုးအထောက်များနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်က မိမိတို့ အနေနဲ့အမှားကို ၀န်ခံ တောင်းပန်ဘို့ အမြဲ အသင့်ပါ ။ ( ခုချိန်ထိတော့ အဲလိုဖြေရှင်းတာ မတွေ့ ရသေးဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်သော ဆဲစာများသာ ၀မ်းနဲစွာတွေ့ နေရပါတယ် ။ )
@အုပ်စု၂) ဒီမိုကရေစိခေတ်ကြီးထဲ မင်းတို့ တွေထေ၇၀ါဒစည်းတွေ ကမ်းတွေ လုပ်မနေပါနဲ့။ ဟူမင်းရိုက်ဆိုတာ ငါတို့ ထင်ရာလုပ်ခွင့်ကွတဲ့။ @
အင်း ။ ဒီလူစုတွေအတွက်ကတော့ အသင်းနဲ့ ဆိုင်မယ် မထင်ပါဘူး နိုင်ဂံယေးဆြာကြီးတွေသာ သူတို့ လူသူတို့ ရှင်းရမှာပါ ။
@အုပ်စု၃) ကိုယ့်ဆရာတို့ အော်နေတာလဲ အာညောင်းလှရော့မယ် ။ ကိုယ့်ဆရာတို့ အော်လို့ဘယ်အဓမ္မ၀ါဒီမှ ပလိပ်ဖမ်းတယ်လဲ မကြားမိပါဘူး ။ ဒီတော့ လေကုန်ခံမနေပါနဲ့ @
ဒါကတော့ အသင်းနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများကို ခွဲမမြင်တာပါ ။ အသင်းရဲ့ တာဝန်က အယူတခုဟာ ထေရ၀ါဒနဲ့မကိုက်မညီဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသအမည်ခံနေသော အယူများကို ထောက်ပြဘို့ သာဖြစ်ပါတယ် ။ အရေးယူခြင်းမယူခြင်းဟာ တည်ဆဲ ဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများနဲ့ သာဆိုင်ပါတယ်
@အုပ်စု၎) ကိုယ့်ဆရာတို့ ထေရ၀ါဒတိပိဋကတွေ နဲ့ခုကိုးကားနေတဲ့ဆဋ္ဌမူဟာ ဘယ်လောက်တိကျလို့ လဲ @
ဒါမှာတော့ သံဂါယနာဆိုတဲ့သဘောကို သိပြီးသူတွေ ဒီအမေးမျိုးမမေးပါ။
တချက်ဘဲထောက်လိုတာက သီရိလင်္ကာ နဲ့ထိုင်းဆရာတော်များဟာ စတုတ္ထသံဂါယနာ ပါဠိတော်များကို အဓိက သုံးဆဲပါ ။ မြန်မာကတော့ ဆဋ္ဌမူသုံးပါတယ် ။ ဒီမူ ၂ခုကို အင်္ဂလိပ်ပြန်နဲ့ မြန်မာပြန်များ အလွယ်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် ။ မိမိကိုယ်တိုင် ၆နှစ်မက အင်္ဂလိပ်မူရော မြန်မာမူပါ သုံးနေခဲ့တာမှာ ကွဲလွဲချက်ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ မိပါ ။
@အုပ်စု ၅) ကွာ လူ့ ဘ၀တိုလှတဲ့ ထဲ မင်းတို့ တွေ သူများလိုက်ပြောနေ အချိန်ကုန်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မဂ်ဖိုလ်ရအောင်လုပ်စမ်းပါ @
ဒါမှာ အပေါ်ယံကြည့်ရင်မှန်ပါတယ် ။ တကယ်လဲ အချိန်မရကြပါဘူး ။ ရဟန်းလဲ ရဟန်းကိစ္စ။လူလဲ လူကိစ္စနဲ့ ပါ ။ နောက်တချက်က သူများဝေဘန်မယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်က မလွယ်ပါဘူး။ သူရေးတာ ပြောတာကို သဘောပေါက်တဲ့ ထိ အဖန်ဖန်ဖတ်ရနားထောင်ရပါတယ် ။ တခါမှားနေတယ်လို့ယဆရင် ဘယ်လိုမှားလဲဆိုတာ ပါဠိတော်အဋ္ဌာကထာဋီကာ နဲ့ရှာပြီးထောက်ရပါတယ်။ အဲလိုစုံပြန်တော့ ချရေးရ တင်ပြရပြပါတယ် ။ တင်ပြပြီးနဲ့ ပြီးသလားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ပါ ။ မိမိတင်ပြခဲ့ တဲ့ အဆိုကို ထောက်ပြလာခဲ့သော် ပြန်လှန် ရှင်းပြနိုင်ဘို့ပြင်ထားရပြန်ပါတယ် ။
ဒါဆိုရဘာလို့ လုပ်နေသေးလဲ ။ မေးစရာပါ ။
ရတနာ ၃ပါးဟာ မိမိတို့ ဘ၀မှာကျေးဇူးကြီးလှပါတယ် ။
ထိုကျေးဇူးကြီးလှသော ရတနာ ၃ပါးအ၀င်တရားတော်တွေကို ပြင်ဆင်လာ နောင်လူတွေအထင်မှားအောင်လုပ်လာတဲ့အခါ ငါနဲ မဆိုင်ပါဘူးလို့ထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆို ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မိမိတို့ဘ၀မှာကျေးဇူးများလှတဲ့တရားတော်တွေ နှောင်းလူတွေ အကျိုးမခံစားရတော့မဲ့ အနေကို လက်ပိုက်ကြည့်မယ်လို့တွေးမိတိုင်း အရှင်မဟာကဿပကစလို့ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့မြောင်းမြဆရာတော်ဘုရား ဦးဥာနက နဲ့မကွေးဆရာတော်ဘုရားတို့ ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်ကို သတိရလို့သူတို့ မျက်နှာတော်ထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိက အမြဲဝင်ဝင်လာပါတယ်။ ဒီကိုယ်တော်ကြီးများ သာကြောင့်ကြမဲ့ နေခဲ့သော် ငါတို့ တွေ ဘုရားရှင်နှုတ်ခပါတ်တော်ကို နာနိုင်မယ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ အသိလေးကြောင့် သားကျွေးမှုမယားကျွေးမှု ၊ ပညာရေး ၊ လူမှုရေး အလုပ်တွေကြားက ရသမျှရေးဖြစ်ညှစ်ရေးနေခဲ့ တာဖြစ်ပါကြောင်း
Posted by tint at 8:29 AM 10 comments:
No.1 ရှင်ဣဒ္ဓိပါလ ၏ ၀န်ခံကတိပြုချက်
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 8:09 AM | Be the first to comment!
သံဃနာယက ၀ိနိစ္ဆယ ဆုံးဖြတ်ချက် ၀န်ခံကတိပြုချက်
အပိုဒ် (င) တွင် ၀န်ခံကတိပြုချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းခံရပါမည်ဟု ဟု ပါရှိပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် အထက်သို့သက်သေခံအဖြစ် တင်ပြနိုင်ရန် No.1 ရှင်ဣဒ္ဓိပါလ ၏ လှုပ်ရှားမှု့များ
ဖြန့်ဝေစာများ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်များ အစရှိသော ခိုင်လုံသော အထောက်ထားများရှိပါက
ဓမ္မဥပဒေ ပြန်ပွါးရေးအသင်းသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဘလော့တွင် ပုံတင်ရ အဆင်မပြေသည့်အတွက်ကြောင့်
၀န်ခံကတိပြုချက် မူရင်းကို http://dhammaanalysis.multiply.com/photos/album/13/13 တွင်
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 8:09 AM No comments:
ခွေမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် (သို့မဟုတ်) No . 1 ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်များ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 7:38 AM | 1 Comment so far
ခွေမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် ဆိုသော စကားပုံလေးကို မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ကြားဖူးကြမည်ထင်ပေ၏။
အမြီးကောက်နေသော ခွေးကို ဖြောင့်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျည်တောက်စွပ်ပေးသော်ငြား
ထိုကျည်တောက်ကို ချွတ်လိုက်သည့်အခါတွင် အမြီးသည် ကောက်မြဲကောက်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
ထိုစကားပုံလေးကို တီထွင်ခဲ့သော မြန်မာရှေးပညာရှိတို့သည် ယခုခေတ်အခါတွင် ပေါ်ပေါက်နေသော
သာသနာဖျက် အဓမ္မ၀ါဒီများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထိုစကားပုံလေးကို ဆိုခဲ့လေသလား ထင်မှတ်ရပေသည်။
မှန်ပေသည်၊ သာသနာဖျက် အဓမ္မ၀ါဒီ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သံဃမဟာနာယက ၀ိနိစ္ဆယ ဆရာတော်များ၏
ရှေ့မှောက်တွင် နောင် မလုပ်တော့ပါဘူးဟု ၀န်ခံကတိပြု လက်မှတ်ထိုးပြီး မိမိနေရာရောက်သည့်အခါတွင်
သူတို့၏၀ါဒကို စွန့်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်မြဲဆက်လုပ်နေကြပေ၏။
ယခုလည်း ပေါ်ပေါက်လာပေပြီ တောင်တွင်း အညတရဘိက္ခု တဲ့၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့ တော်တော်ပြန့်နှံ့နေပါပြီ
လွန်ခဲ့သည့် ၁ လပိုင်းလောက်ကတည်းက ကရင်ပြည်နယ်တွင် ပို့ချသောသင်တန်းခွေတို့ facebook နှင့်
အခြားသော web စာမျက်နှာများတွင် အများအပြားတွေ့ခဲ့ရပေပြီ။ နှစ်လပိုင်းတွင် သံဃနာယကမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး
နောင်မလုပ်ဖို့ ၀န်ခံလက်မှတ်များ ထိုးပြီးဖြစ်ပေသည်။
ဆက်မလုပ်ဘဲ ငြိမ်သွားပြီထင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ၀န်ခံကတိပြုချက်များကို အွန်လိုင်းပေါ်သို့ မတင်ဖြစ်ခဲ့ပေ။
အခုတော့ အထင်အနဲ့အမြင် လွှဲချေပြီ၊ ကိုယ်တော်ချောက မြန်မာပြည်တွင်မကဘဲ ပြည်ပထိတောင်
ရောက်၍သွားပေပြီတကား။ တကယ့်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကို စော်ကား ဖျက်ဆီးနေပေပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဝတ်ရတဲ့ သင်္ကန်းတော်ကို ၀တ်ဆင်ပြီး
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ချမှတ်ထားတဲ့ ၀ိနည်းဥပဒေကို လုံးဝလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်နေပေပြီတကား။
လူသေလူဖြစ် အဖွဲ့၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသူ ပီသပါပေ၏။ အာဂပုဂ္ဂိုလ်ပင်
မြတ်ဗုဒ္ဓသာ ရှိနေဦးမည်ဆိုလျှင် ဘွဲ့တွေတသီကြီးပေးပြီး ချီးမြင့်မှာ သေချာပေ၏။ ထိုဘွဲ့တို့မှာ .......
မိစ္ဆာတပ ( အကျင့်မှားတဲ့ကောင်)၊
မာယာတပ (လူတွေကို လိမ်နေတဲ့ကောင်)၊
၀ဉ္စနာတပ (လူတွေကို လှည့်စားနေတဲ့ကောင်) ဟူသော ဘွဲ့များဖြင့် ချီးမြင့်ပေလိမ့်မည်။
(ယခုတော့ ဘုရားရှင်မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့် စာရေးသူကပင် ချီးမြင့်လိုက်ရပါသည်)
ထေရ၀ါဒရဟန်းတော်များသည် ဂန္ထဓူရ၊ ၀ိပဿနာဓူရနှစ်ခုသာ ကျင့်ကြံတော်မူပါ၏။
ဂန္ထဓူရသည် စာသင်စာချခြင်းဖြစ်၍ ၀ိပဿနာဓူရသည် တရားအားထုတ်၊ တရားဟောခြင်း ဖြစ်၏။
ထိုနှစ်ပါးမှလွဲ၍ အကသင်တန်းပေးခြင်း၊ ဗေဒင်ဟောခြင်း၊ ယတြာချေခြင်း၊ ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်
ဆေးကုခြင်းစသည်များသည် ထေရ၀ါဒရဟန်းတော်များ၏ အလုပ်မဟုတ်ပေ။
အလဇ္ဇီ ဒုဿီလများ၏ အလုပ်များသာဖြစ်ပေသည်။
ဦးဥတ္တမ (ကလောင်အမည် ရှင်ဣဒ္ဓိပါလ၊ အညတရဘိက္ခု) သည်ကား အကသင်တန်းပေးခြင်းသာမက
တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်စီးထားသော လူသေလူဖြစ် ရှင်ဥက္ကဌ ၏ စာများကိုလည်း
ဖြန့်ဝေနေလိုက်သေး၏။ သို့အတွက် အလဇ္ဇီနှင့် ထိုက်တန်သောဘွဲ့များကို ချီးမြင့်လိုက်ရပေသည်။
(နည်းများ နည်းနေသေးလားတော့ မသိရပေ)
ဘုရားဘက်က နေဖို့ အရေးကြီးတယ်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 7:38 AM 1 comment:
စိန်ခေါ်သူ မည်သူနည်း ၃
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 1:46 AM | Be the first to comment!
အို..စာရှုသူ၊ ဖော်ပြပါအဖြေ ၁၂-ချက်တို့ကို သေချာဖတ်ရှုပြီးသွားပြီဆိုလျှင် ၄င်း၏ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ၎င်း၏ အရေးအသားများသည် မည်သို့မျှ မညီညွတ်ကြောင်းကို စာရှုသူကိုယ်တိုင်ပင် ထင်ထင်ကြီး မြင်နိုင်ပါပြီ။
သို့ဆိုလျှင် ၄င်း၏ “အထူးသဖြင့် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးအတွက်-ဦးတည်ရည်ရွယ်လျက” ဟူ၍ ရေးသားထားချက်သည် ဗြောင်လိမ် ထားသည့် မုသားဝါစာမျှသာ ဖြစ်နေပါတော့သည်တကား။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် ယခုကောက်နုတ်ထုတ်ယူပြအပ်သော၊ စာမျက်နှာ(၃) အစရှိသည်တို့၌ ပါရှိနေသော ၄င်း၏စာသားများက သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားစေမည့် အသုံးအနှုန်းများချည်း ဖြစ်နေပါပြီ။ သာသနာတော်ကြီး ပြိုကွဲပျက်စီးစေရေးသို့ ရှေးရှုထားသော မရိုးမသား စိန်ခေါ်စကားများချည်း ဖြစ်နေပါပြီ။
ရိုးကြောင်း ဂုဏ်တင်၊ ရှေးပုံပြင်ဝယ်-
ချိန်ခွင်တည်ကာ၊ တစ်ဖက်မှာ၊ ကောင်းစွာ ရိုးသားခြင်း။
တစ်ဖက်တွင်းမှာ၊ မြေကမ္ဘာ၊ ကမ္ဘာမြေက ပေါ့လေခြင်း။
ကမ္ဘာမြေနှင့်၊ ကျောက်-သံ ဆင့်၊ မြေနှင့်ဘက်က ပေါ့လေခြင်း။
မြေ-သံ အပြင်၊ သက်ရှိ တင်၊ မြေပြင်ဘက်က ပေါ့လေခြင်း။
ရိုးသားခြင်းက၊ ဂုဏ် ပြည့်ဝ၏
သူမှ ပြန်ငြား၊ မရိုးသားကြောင့်
ကြီးမား ပြစ်ရှိ၊ အ-ဝီစိ၌
ကျဘိ ရှည်ကြာ၊ သူ့ခေါင်းမှာလျှင်
ကမ္ဘာမြေ ပိ၊ ကျောက် သံ ပိ နှင့်
သက်ရှိ ပိ ကာ၊ လေးရရှာ-ဟု
ရှေးခါ ဘိုးဘွား၊ ဆုံးမထားသည်
အမေး။ ။ ၄င်းက ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(ဍ)တွင်- “အထူးသဖြင့် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာ ထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး....အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးအတွက်-ဦးတည်ရည်ရွယ် လျက်” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားသည်။
၄င်းစာသားများက ၄င်း၏ရေးသားချက်အတိုင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မည်သို့မည်ပုံ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည်နည်း။ သာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးကို မည်သို့မည်ပုံ အကောင်အထည်ဖော်နိုင် မည်နည်း။
ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်ပြစကား ၂-လုံးဖြင့် ၄င်းက ပြလိုသည့်မြင်ကွင်းမှာ “မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ဖျက်ဆီးနေသူ ဖြစ်သည်- သံဃဘေဒကပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် အမျိုးပြိုကွဲပျက်စီးရေးကို ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်- အမျိုးဖျက်သူ ဖြစ်သည်။ ဘာသာ ပြိုကွဲပျက်စီးရေးကို ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်- ဘာသာဖျက်သူ ဖြစ်သည်။ သာသနာတော်ပြိုကွဲပျက်စီးရေးကို ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်- သာသနာဖျက်သူ ဖြစ်သည်”ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းပြပေးထားသည့်အမြင်အတိုင်း စာရှုသူတို့က မြင်ကြသည်- မမြင်ကြသည်မှာ စာရှုသူတို့အပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ ၄င်းက မြင်စေလိုသည့်အတိုင်း မြင်နေသူများလည်းရှိနိုင်သည်။
၄င်းကမြင်စေလိုသည့်အတိုင်း မမြင်သူများလည်း ရှိနိုင်သည်။
သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်မြင်သူများလည်း ရှိကြလိမ့်ဦးမည်။ အဘယ်သို့ပြောင်းပြန်မြင်သနည်းဟူမူကား- အရှင်ထာဝရအမည်ခံသူ ၄င်းသည် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ဖျက်ဆီးနေသူ ဖြစ်သည်- သံဃဘေဒကပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ အရှင်ထာဝရအမည်ခံသူ ၄င်းသည် အမျိုးပြိုကွဲပျက်စီးရေးကို ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်- အမျိုးဖျက်သူ ဖြစ်သည်။ ဘာသာပြိုကွဲပျက်စီးရေးကို ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်- ဘာသာဖျက်သူ ဖြစ်သည်။ သာသနာတော်ပြိုကွဲပျက်စီးရေးကို ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်- သာသနာဖျက်သူ ဖြစ်သည်ဟူ၍ မြင်သူများလည်း ရှိကြလိမ့်မည်။
ကိုယ့်အမြင်ကို ပညာရှိများအလယ်တွင် ပိဋကတ်စံဖြင့် တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းနိုင်ရန် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထွက်၍ စိစစ်ခံစေလိုပါသည်။
အဖြေ(၁)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၁၃-၁၄)တို့၌ “ထို့ကြောင့် ပရဝါဒီတို့၏” ကြားရင်းနာရင်း သောတာပန်တည်တယ် ဆိုတဲ့ စကားဟာ လုံးဝမှားနေပါတယ်။ ဘုရားလက်ထက်ကလဲ သောတာပန်မတည်ခဲ့ကြဘူး” ဟူသောစကားတို့သည် သာသနာ့ဗာဟိရပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အမှားစကားသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
“သို့ပါ၍ ပရဝါဒီ၏ ” ဘုရားလက်ထက်ကလည်း သောတာပန်မတည်ခဲ့ဘူး, စသောစကားတို့သည် အမှားသာ ဖြစ်၏” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
ထိုစကား ၂-ရပ်၏မမှားပုံကို ရှေ့တွင် ရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါလျက် “ထိုစကားရှင်သည် သာသနာ့ ဗာဟိရကပုဂ္ဂိုလ်(သာသနာ့ပြင်ဘက်ကသတ္တဝါ)ဖြစ်သည်” ဟုဆိုလိုက်လျှင် အဆိုခံရသူက ယင်းစကားအတိုင်း မှားနေသူမဟုတ်ခြင်းကြောင့် “ဆဲတတ်သူ ၄င်း၏ စကားစုသည် ဆဲတတ်သူ၎င်းထံမှာပင်” ဝင်ကပ်နေလျက် ရှိပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းသည်သာလျှင် “သာသနာ့ဗာဟိရကပုဂ္ဂိုလ်” ဖြစ်ပါတော့သည်။ သာသနာ့ဗာဟိရကပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အသွားအပြန် ဆက်ဆံရသည့် ဝေဖန်ရေးဆရာဘဝကို ဝဋ်ကဲ့သို့ပင် မှတ်ယူချင်လာပေတော့သည်။
အဖြေ(၂)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၁၅-၁၆)တို့၌ “ပရဝါဒီတို့က ဘုရားတရားကို နာယူသူတို့မှာ မှတ်မိရုံသာ။ ပဋိဝေဓဥာဏ် မဖြစ်ဟု ဆိုထားပါလျှင် “ဒေသနာဝသာနေ သောတာပတ္တိဖလေ ပတိဋ္ဌဟိံသု။ ဒေသနာဝ သာနေ ဗဟူ သောတာပတ္တိဖလာဒီနိ ပါပုဏိံသူ-တိ။” အထက်ပါ တရားစကားတို့ကို ပြက်ရယ်ပြုရာ ရောက်ပေတော့မည်။ ယင်းစကားရပ်များ အဋ္ဌကထာများစွာတို့၌ မြောက်မြားစွာ တွေ့ရှိရသည်” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
ထိုစကားစုတွင် မူလစကားရှင် ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ၏ အဆိုသည် မမှားချေ။ မမှားကြောင်းကို အမေးနှင့်အဖြေ(၂) အခန်း အဖြေ(၉)စသည်တို့မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စစ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝိဘဇ္ဇဝါဒီက အဋ္ဌကထာ စကားတို့ကို ပြက်ရယ်ပြုသည် မမည်ချေ။
၄င်းသည်သာလျှင် စာကို မမြင်ဘဲ တလွဲယူကောက်ပြီး ရေးသားပြသလိုက်သည့်အတွက် ၄င်း၏ ကောက်ကျစ် နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်လာပါသည်။
အဖြေ(၃)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၃-၄)တို့၌ “စာရေးသူသည် သူတို့ရေးသော(ပ) မိမိကိုယ်ကိုယ် ကို ချီးကျူးအမွှမ်းတင်မှု အတ္တုက္ကံသနတွေများပြီး သူတပါးကို ကဲ့ရဲ့နှိမ့်ချမှု ပရဝမ္ဘနစကားရပ်များသာ (ပ) ခံယူထား ကြသည်” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်း၏ဖော်ပြပါရေးသားချက်သည် ဘိက္ခုဓမ္မပိယ၊ နန်းဦး(တမ္ပဝတီ)၊ ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ၊ မစိုးရိမ်စာသင်သားတို့ကို စာရှုသူတို့က အလေးမထားနိုင်အောင် ရေးပြချက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ပေါ်ပေါက်နေသည့် အငြင်းပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်မှု လုံးဝမရှိချေ။ ဘောင်မဝင်သောစကားများဟု ဆိုလိုပါသည်။
သို့သော် အံ့ဩဖွယ်ရှိသည်မှာ “မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို ချီးကျူးအမွှမ်းတင်မှု အတ္တုက္ကံသနတွေများပြီး သူတစ်ပါးကို ကဲ့ရဲ့နှိမ့်ချမှု ပရဝမ္ဘနစကားရပ်များသာ” ဟုဆိုသော်လည်း စာရေးသူ ၄-ဦးတို့၏ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို ချီးကျူးအမွှမ်းတင်မှု အတ္တုက္ကံသနတွေများပုံပြစာပိုဒ်မျိုးကို တိတိကျကျ ထုတ်ပြပေးနိုင်ခြင်း မရှိချေ။
စာရေးသူ ၄-ဦးတို့၏ သူတပါးကို ကဲ့ရဲ့နှိမ့်ချမှု ပရဝမ္ဘနစကားရပ်များပုံပြစာပိုဒ်မျိုးကိုလည်း တိတိကျကျ ထုတ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အသားလွတ်ပြော-ပြောနေခြင်းသာ ဖြစ်နေပါသည်။ သတိပြုသင့်ပါပေသည်။
၄င်း၏ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို ချီးကျူးအမွှမ်းတင်မှု အတ္တုက္ကံသနစာပိုဒ်နှင့် သူတပါးကို ကဲ့ရဲ့နှိမ့်ချမှု ပရဝမ္ဘနစကား ရပ်ကိုမူ စာရေးသူမစိုးရိမ်စာသင်သားက တိတိကျကျ ထုတ်ပြပေးလိုက်ပါဦးမည်။ ကြည့်ပါ။
အဖြေ(၄)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၅)၌ “ဤနေရာ၌ အထူးပြုတင်ပြလိုသည်မှာ ယင်းဓမ္မကထိက ဆရာတော်များဟော တရားအားလုံးကို မှန်သည်ဟု မဆိုသာပါ။ ပုထုဇဉ်အလျောက် အရွေးအကောက်များ အနည်းငယ် တိမ်းပါးချွတ်ချော်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အမှားအယွင်းတွေ့သည်ရှိသော် စုပေါင်းဝိုင်းဝန်းညှိနှိုင်း အဖြေရှာ၍ သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ် အမှန်ဖြင့်သာ ပြုပြင်သင့်ပါ၏” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဤစာပိုဒ်သည် ၄င်းကို ၄င်းက သူတော်ကောင်းအသွင် ထင်မြင်စေချက် ဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော် ၄င်းမှာ စာပိုဒ်ထဲကအတိုင်း စိတ်နေစိတ်ထားရှိလျှင် “မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာရေးစိန်ခေါ်မှုအသစ်” စာမူသည် ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် အလုပ်တခြား အပြောတခြားအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူတော်ကောင်းဟန် ကို ခြုံထားလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်တော့သည်။ အတ္တုက္ကံသနကထာမျှသာ ဖြစ်သည်-ဟု မှတ်။
အဖြေ(၅)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၅)၌ “ပထမနိဗ္ဗာန်စာအုပ် ၃၈ ရှိ ” ဒေသနာနုသာရေန ဥာဏံ ပေသေတွာ သောတာပတ္တိဖလေ ပတိဋ္ဌိတော= ဟောအပ်သော ဒေသနာအစဉ်ကို ဥာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့ သောတာပန်တည်တယ်” ဟု တပေါင်းတည်း မပြောဘဲ တရားဟောတရားနာခြင်းတို့ကို အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့လိုမှုကြောင့် သီးခြားစီ ခွဲထုတ်ပြခြင်းမှာ ရိုးသားသော စေတနာအမှန် မဖြစ်နိုင်ပေ” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၅)ပါစကားစုသည် ပရဝမ္ဘနကထာ ဖြစ်ပါသည်။
၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(စ-ဆ)တို့၌ “သူတို့အနေနှင့် လူအများစုလက်ခံကြည်ညိုသော ဆရာတော်များကို မယှဉ်ဝံ့ရကား ဆင်ကိုဆင်ချင်းတိုက်- ကျားကိုကျားချင်းတိုက်ဆိုသောမူအရ သာသနာတော်ထဲမှ ပရိယတ္တိအထိုက် အလျောက် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူ ရဟန်းအချို့၊ သီလရှင်အချို့ကို ဆရာမွေး၍ နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ စသော ပရိသတ်အများစု အထင်ကြီးလက်ခံကိုးစားထားကြသည့် ဆရာတော်များကို ပစ်မှတ်အဖြစ် ပစ်ခတ်ထိုးနှက်ရန် သွေးထိုး စည်းရုံး ရန်တိုက်ခဲ့ကြပါသည်ဘုရား။
“သူတို့၏ ဆရာမွေးစီးပွားရှာရည်ရွယ်ချက်လည်း အသင့်အတင့် အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုရပါမည်ဘုရား။ သူတို့ ရရှိသောငွေကြေးအမြတ်အစွန်းမှာလည်း သာသနာတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာပွန်းပဲ့တိုက်စားရာမှ ရရှိဖြစ်ပေါ်လာသော အမြတ်အစွန်းတို့သာ ဖြစ်ပါသည်။
“အမှန်မှာ အာဇီဝဟေတု အကောင်းအဆိုး မခွဲခြားဘဲ နာမည်ကြီးဆရာတော်တို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု အပြင် အခြားဘာသာဝင်တို့ကပင် သို့လောသို့လော တွေးတောဒွိဟ သံသယဖြစ်ကာ သာသနာတစ်ရပ်လုံးအပေါ် အယုံအကြည်မရှိ အရှိန်အစော်ကင်းမဲ့ပြီး ယင်းတို့မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်များ လူထုကြားသို့ စိမ့်ဝင်ပြန့်ပွား ရောင်းအားကောင်း ရေးအတွက်သာ ယုတ်ညံ့သောရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြသော သာသနာ့အဖျက်သဘောဆောင် လုပ်ရပ် များပင် ဖြစ်ပါတော့သည်ဘုရား” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။၄င်း၏စာမျက်နှာ(စ-ဆ)ပါစကားစုများအားလုံးသည် ပရဝမ္ဘနကထာ ဖြစ်ပါသည်။ “သူတို့အနေနှင့်” ပုဒ်မှာ သူတို့ဟူသည် “မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာများ” ကို ဆိုလိုပါသည်။
မဂ္ဂဇင်း ၄-စောင်တို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာ အကျိုးအတွက် မှန်ကန်သောသဘောထားဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ပြန့်ပွားနေကြောင်း ကြေညာပေးလိုက်ပါရစေ။
၄င်း၏စာမျက်နှာ(ဆ)၌ “စင်စစ် ယင်းမဂ္ဂဇင်းတိုက်ပိုင် စီးပွားရေးသမားတို့သည် ပရိယတ်စာပေကို အနည်း အကျဉ်းမျှ သင်ကြားတတ်မြောက်သူများ မဟုတ်ကြသလို သာသနာနှင့်ပတ်သက်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်သမိုင်းမှတ်တမ်း ဆို၍ ဘာတစ်ခုမှ ရှိခဲ့ကြသူများ မဟုတ်ပါဘူးဘုရား” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။၄င်း၏စာမျက်နှာ(ဆ)ပါစကားစုသည် ပရဝမ္ဘနကထာသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ “သာသနာနှင့်ပတ်သက်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်” ဆိုတာ ဘာကို ခေါ်ဆိုပါသနည်း။ “သာသနာလာ တရားတော်တွေကို ဒဿနအသစ်တွေဖြင့် ရောမွှေပြီး စာအုပ်တွေထုတ်လုပ်ကာ မိမိ၏ ညီအစ်ကိုအစ်မနှမတို့အတွက် အလုပ်ပေး ထားခြင်းမျိုး” ကို ဆိုလိုပါသလား။ ယင်းသို့သော သာသနာရေးစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုလျှင် အဆိုပါအယ်ဒီတာတို့မှာ ရှိကြဟန်မတူပေ။
နှစ်ဖက်စလုံးကို သေချာသိအောင် ထောက်လှမ်းစုံစမ်းကြည့်ပြီးမှ သေချာသိသောအသိဖြင့်သာ မိမိရရ ဆုံးဖြတ်တော်မူကြစေလိုပါသည်။
၄င်း၏စာမျက်နှာ(ဆ-ဇ)တို့၌ “အယ်ဒီတာဖြစ်သူတို့က ကုန်းချောစကားပြောပုံများ၊ လုပ်ဇာတ်ဆင်ပုံများ” ကို ယုံလောက်အောင် ရေးပြထားပါသည်။ စာများလွန်း၍ ကူးယူဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ ထားလိုက်ပါသည်။ မူရင်းမှာ ကြည့်နိုင်ပါ သည်။
သို့သော် ၄င်းစကားတို့တွင် “ကုန်းချောစကား” ဟုဆိုထားသည့် အယ်ဒီတာတို့၏စကားများသည် “အမှန်စကားများ” သာ ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းတိုက်များစွာသို့ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီး လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။ မယုံလျှင် လေ့လာကြည့်ကြပါကုန်။
၄င်း၏စာမျက်နှာ(ဇ-ဈ)တို့၌ “ဤသို့ဗုဒ္ဓ၏ ဥပဒေတော်ကို မလိုက်နာသည့်အပြင် နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယကအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်တို့ကိုပါ သွေဖည်လျက် ညီတော်နောင်တော် ရဟန်းအချင်းချင်း အစိတ်စိတ် ကွဲပြားစေရန် မလိုအပ်သော ထေရဝါဒသန့်ရှင်းရေး အဓမ္မဝါဒ ဖယ်ရှားရေး စသည့်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတပ်ကာ အဖွဲ့အစည်း သီးခြားတည်ထောင်ခြင်း၊ ဂိုဏ်းဂဏဖွဲ့၍ ရန်စအပြစ်ရှာခြင်း စသော သံဃာ့စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပြိုကွဲပျက်စီးကြောင်းလုပ်ရပ်များ ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်ဘုရား။ ယင်းလုပ်ရပ်တို့သည်ပင် မျက်မှောက်ခေတ်၏ ဘာသာရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်ဘုရား” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၄င်း၏စာမျက်နှာ(ဇ-ဈ)ပါစကားစုများသည် ပရဝမ္ဘနကထာအစစ် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်က ဩဝါဒပေးတော်မူသည့် အတိုင်း လုပ်ကိုင်ထားသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပင် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်တို့ကို သွေဖည်ကြောင်း ပြဆိုထားလေရာ “မဟာဟာသ” ဟုသာ သမုတ်ထိုက်ပါပေတော့သည်။
အဓမ္မဝါဒ ဖော်ထုတ်တားဆီးဖယ်ရှားရေး အကျိုးဆောင်များက စီစဉ်သည့် “သာသနာတော် သန့်ရှင်း တည်တံ့ပြန့်ပွားရေး သာရဏီယဩဝါဒကထာများနှင့် လျှောက်ထားလွှာများ” အမည်ရှိ စာအုပ်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် သဘောပေါက်နိုင်စရာ ရှိပါသည်။
ထေရဝါဒသန့်ရှင်းရေး အဓမ္မဝါဒဖော်ထုတ်တားဆီးဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းများသည် တကယ်လိုအပ် နေသော လုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် မြင့်မြတ်လှသော သာသနာရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြစ်ပါကြောင်း ကိုလည်း နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီး၏ ဩဝါဒကထာများတွင် အလွန်ထင်ရှားစွာ မိန့်မှာထားတော်မူပါသည်။
ဪ သြော်...အရှင်ထာဝရအမည်ခံသူ ၄င်းသည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီး၏ ဩဝါဒကထာများကို “ဘာသာရေးစိန်ခေါ်ချက်”ဟု သတ်မှတ်ကြေညာဝံ့သူဖြစ်ခြင်းကြောင့် “နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးများကိုပင် စိန်ခေါ်ရဲသူ” လူစွမ်းကောင်း ရှင်စွမ်းကောင်း ဖြစ်ပေတော့သကိုး။ နောင်တွင် ဘုရားရှင်ကိုသော်လည်း စိန်ခေါ်ရဲလေလိမ့်ဦးမည်လား။
၄င်း၏စာမျက်နှာ(ဈ-ည)တို့၌ “အမှန်မှာ (ပ)သတိချပ်သင့်ပါသည်ဘုရား” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၄င်း၏စာမျက်နှာ(ဈ-ည)ပါစကားစုများသည် ပရဝမ္ဘနကထာ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းအကြောင်းအရာအတိုင်း တကယ်ဖြစ်နေသည်ဟု သက်သေခံမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထေရဝါဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဘုန်းကြီးတွေ မညီညွတ်သည် မဟုတ်ပေ။ အဓမ္မဝါဒီတွေ ရှိနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဓမ္မဝါဒီတွေရှိနေလျှင် ဤသို့ဤပုံ ဖြစ်ရသည်မှာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဓမ္မတာသာ ဖြစ်ပါပေတော့သည်။
အထူးမှတ်ချက်။ ။ မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာရေးစိန်ခေါ်မှုအသစ်-စာမူတစ်ခုလုံး အစမှအဆုံး တိုင်အောင် ပရဝမ္ဘနကထာများသာ များပါပေတော့သည်။ စာမျက်နှာတိုင်းမှာပင် “ပရဝါဒီ” ဟု အမည်တပ်၍ မစိုးရိမ် စာသင်သားအပေါ် အပြစ်မြင်စေရန် ရေးသားပြသချက်များကား ကူးထုတ်ပြနေစရာ မလိုပါပြီ။
အဖြေ(၆)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၁၉)၌ “သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားနာခြင်းသည် ကာရဏူပစာအားဖြင့် တရားရနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်က ဓမ္မအစစ်ဖြစ်ဖို့ (ပ) အဓမ္မဝါဒီ၊ ဓမ္မမစ္ဆရိယဝါဒီ ဖြစ်ပေရော့မည်။ (ပ) တရားဟော တရားနာမှုသည် အပြစ်မဖြစ်။ (ပ) ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မစသည်တို့ကို အပြစ်ဖွဲ့ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ကို တားမြစ်သူသာ ဖြစ်ပေရော့ မည်။ (ပ) သာသနာတော် အကျိုးမဲ့စေရန် တမင်ရန်စောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်ပေသည်” ဟူ၍ ရေးသား ပြသထား ပါသည်။
၄င်းတွင် “ဓမ္မအစစ်မဖြစ်ခြင်းကြောင့် အဓမ္မဝါဒဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဝေဖန်ခံရသည်” ဟုသာ မှတ်ပါလေ။ ရိုးသားမှုရှိဖို့ လိုပါသည်။
တရားဟောမှုတရားနာမှုသည် ဓမ္မဝါဒတရားဖြစ်လျှင် အပြစ်မရှိပါ။ အဓမ္မဝါဒတရား ဖြစ်နေ လျှင် ယခုဘဝမှာလဲ သံဃဝိနိစ္ဆယခုံရုံးမှာ အပြစ်ရှိသူအဖြစ် ထင်ရှားနိုင်ပါသည်။ နောင်ဘဝတွေမှာ လည်း အပါယ်လေးပါးအပြစ်များ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
အဓမ္မဝါဒ ဖော်ထုတ်တားဆီးသူများကို အဓမ္မဝါဒီ ဖြစ်သည်ဟုလည်းကာင်း၊ ဓမ္မမစ္ဆရိယဝါဒီ ဖြစ်သည်ဟု လည်းကောင်း၊ နိဗ္ဗာန်ကိုတားမြစ်သူ ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း၊ သာသနာအကျိုးမဲ့စေရန်-ရန်ပြုသူ ဖြစ်သည်ဟု လည်းကောင်း စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ထားချက်များကား အသိဥာဏ်ရှိသူတို့ရှေ့မှာ ယုံကြည်လောက်သော စကားများ မဟုတ်။
အဖြေ(၇)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(င-စ)၌ “ဤကဲ့သို့ သာသနာ့အကျိုးစီးပွား စည်ပင်ထွန်းကား ပြန့်ပြောသာယာခဲ့သလို တစ်ဖက်မှလည်း သာသာကို ခုတုံးလုပ် စီးပွားရှာ စားသောက်နေသူတို့မှာလည်း လာဘ်နည်းပါး လာခဲ့သည်မှာ ဓမ္မတာသာ ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
“အထူးသဖြင့် မျက်မှောက်ခေတ် ဓမ္မကထိက ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဂန္ထကာရက ဆရာတော်များ၏ ဟောကြားသော တရားတော်များနာကြားခြင်း၊ ယင်းဆရာတော်တို့ ရေးသားပြုစုသော ကျမ်းစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုမှာ လက်ခံနှစ်ခြိုက် အကြိုက်တွေ့လာကြသည်ဖြစ်ရာ-အချို့အချို့သော ဘာသာရေးမဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ်စာစောင်တို့မှာ စီးပွားရေးအရ ထင်တိုင်းမပေါက် ခရီးမရောက် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ (ပ) အကောင်းအဆိုးမခွဲခြားဘဲ နာမည်ကြီးဆရာတော်တို့ကို (ပ) မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်များ လူထုကြားသို့ (ပ) သာသနာ့အပျက်သဘောဆောင်လုပ်ရပ်များပင် ဖြစ်ပါတော့သည်ဘုရား” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းတွင် သာသာကို ခုတုံးလုပ် စီးပွားရှာ စားသောက်နေသူတို့ဟူသည်မှာ ဘယ်သူတွေဖြစ်သနည်း..။ နောက်ကြောင်းသမိုင်းများကို သေသေချာချာ စူးစမ်း ဝေဖန် သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်။
“မဂ္ဂဇင်း” ဟူသည်မှာ “ဓမ္မရံသီ၊ ဓမ္မရတနာ၊ မြတ်ပန်းရဂုံ၊ အနန္တဂုဏ်ရည်” တို့ကို ဆိုလိုကြောင်း သိရပါသည်။ ငြင်းလိုကလည်း ငြင်းနိုင်ပါသည်။
“အကောင်းအဆိုးမခွဲခြားဘဲ” ဟူသော စကားလုံးမှာ “ဘာမှ အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စကားလုံး” သာ ဖြစ်သည်။ အကောင်းဖြစ်သော နာမည်ကြီးဆရာတော်များကို မည်သူတို့က မဂ္ဂဇင်းကနေ အပြစ်တင်နေနိုင်အံ့နည်း။ ယုံသင့်မှ ယုံထိုက်ပါသည်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးမှ ယုံသင့်ရာကို ယုံမည်ဆိုလျှင် ထိုသူမျိုးအတွက် ဖော်ပြပါမဂ္ဂဇင်းများကို သာသနာရေးစာစစ်အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ပြန်ကြားရေးစာစစ်အဖွဲ့တို့၏ ခွင့်ပြုချက်အရ လစဉ် ထုတ်ဝေ ပေးနေပါသည်။ တစ်ဖက်စကားနောက် ကောက်ကောက်ပါသူမျိုးအတွက်တော့ အပြစ်ကျစရာရှိလာလျှင် ထိုသူ့မှာပါ အပြစ်မလွတ် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
အဖြေ(၈)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(ည)၌ “တပည့်တော် အချုပ်အားဖြင့် လျှောက်ထားတင်ပြလို သည်မှာ အထက်ပါ အကြောင်းအခြင်းအရာကိစ္စများကြောင့် တပည့်တော်တို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်အစွမ်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ သံဃာထုတစ်ရပ်လုံး၏ စုပေါင်းစွမ်းအားဖြင့် ဒါယကာ ဒါယိကာမနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အကူအညီကိုပါ ရယူကာ ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ အနီးစပ်ဆုံးမှာရှိသော အတွင်းရန် အလဇ္ဇီ အဓမ္မဝါဒီ အဝိနယဝါဒီတို့ကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှား သုတ်သင်ရန် အချိန်တန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လက်ရှိအချိန်မှစ၍ အမြစ်ဖြတ်နှိမ်နင်းတော်လှန်ကြပါစို့” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းစကားတို့တွင် အရေးအကြီးဆုံးမှာ “ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ အနီးစပ်ဆုံးမှာရှိသော အတွင်းရန် အလဇ္ဇီ အဓမ္မဝါဒီ အဝိနယဝါဒီတို့ကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားသုတ်သင်ရန် အချိန်တန်ပြီ” ဟူသောစကားစုသာ ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းစကား၏ အရကောက်သရုပ်ကို တည့်တည့်ဖော်ပြခြင်း မရှိဘဲ နဝေတိန်တောင်လုပ်ကာ အဟုတ်ထင် စေခဲ့သည်။ သံဃာထု တစ်ရပ်လုံးကိုလည်း နဝေတိန်တောင် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒကာဒကာမတွေကိုလည်း ဝေဝေ၀ါးဝါး ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အထူးအားဖြင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများကိုပင် သံသယပွားစေခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဘာကို ကူညီရမှာလဲ။ ဒကာဒကာမတွေက ဘာကို ကူညီရမှာလဲ။ သံဃာထုက ဘာကို ကူညီရမှာလဲ။ မေးလိုက်ပါပြီ။ ဖြေစမ်းပါဦး။
အဖြေမှာ “ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ အနီးစပ်ဆုံးမှာရှိသော အတွင်းရန် အလဇ္ဇီ အဓမ္မဝါဒီ အဝိနယဝါဒီတို့ကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားသုတ်သင်ရန် ကူညီကြပါ” တဲ့။ ဤအဖြေကတော့ “မဟာဟာသ” မဟုတ်တော့ပြီ။
အမေး။ ။ အလဇ္ဇီဆိုသည်မှာ ဘယ်သူနည်း။ အဓမ္မဝါဒီဆိုသည်မှာ ဘယ်သူနည်း။ အဝိနယ ဝါဒီ ဆိုသည်မှာ ဘယ်သူနည်း။
အဖြေ။ ။ ၄င်းစာအုပ်-စာမျက်နှာ(၉၈/၁၁၂/ ၁၄၀/၁၉၆)တို့အရ “ပရဝါဒီမည်သော ကျွန်ုပ်မစိုးရိမ် စာသင်သား၊ သင် ပရဝါဒီ=တိတ္ထိဂိုဏ်းသား၊ ဝိဘဇ္ဇဝါဒီအမည်ခံ-မစိုးရိမ်စာသင်သားအမည်ခံ-အဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်၊ မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ အဓမ္မဝါဒ အဝိနယဝါဒ” ဟူ၍ ရေးသားပြသထားချက်အရ မစိုးရိမ်စာသင်သားနှင့် သဘောတူသူများကို ဆိုလိုပါသည်။
ဤအဖြေသည် မှန်သလော- မှားသလောဆိုသည်ကို စိစစ်ဆင်ခြင်ကြည့်သင့်ပါသည်။ ကောက်ကျစ်သော စိတ်စေတနာဖြင့် လုပ်ကြံထားသည့် မုသားဝါစာအဖြေမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မစိုးရိမ်စာသင်သားနှင့် သဘောတူသူများက အလဇ္ဇီမဟုတ်ကြောင်း အစစ်ခံနိုင်ကြ ပါသည်။ အဓမ္မဝါဒီမဟုတ်ကြောင်း အစစ်ခံနိုင်ကြပါသည်။ အဝိနယဝါဒီမဟုတ်ကြောင်း အစစ်ခံနိုင်ကြပါသည်။
အကယ်၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ အကူအညီရရှိအောင် တောင်းဆိုနိုင်သည် ဖြစ်ငြားအံ့..။ ယင်းသို့ဖြစ်သည် ရှိသော် ...
အလဇ္ဇီများ ဖြစ်သည်-မဖြစ်သည် တစ်ချက်၊
ပရဝါဒီများ ဖြစ်သည်-မဖြစ်သည် တစ်ချက်၊
စသည်တို့ကို “နိုင်ငံတော်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်စေလျက်- နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းဝင် နိုင်ငံတော်ဥပဒေအတည်ပြုဖြင့် အစစ်ခံသွားမည်” ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပေးလိုသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 1:46 AM No comments:
စိန်ခေါ်သူ မည်သူနည်း ၂
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:50 AM | မစိုးရိမ် စာသင်သား Be the first to comment!
အဖြေ(၃)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၅)၌ (သို့ဖြစ်ရာ သူတို့ကိုယ်တိုင် အလဂဒ္ဒူပမာ စာသင်နည်း ဖြင့်သင်၍ သူတို့ကို လူအထင်ကြီးစေရန်၊ တစ်ဖက်သားတို့ကို စော်ကားနှိမ့်ချရေးသားခြင်းသည်သာ သူတို့၏ ထေရဝါဒနှင့် သက်ဆိုင်သော အမြင့်မားဆုံး သာသနာရေးရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါသည်)ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းက (မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ သာသနာရေးရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်ဖက်သားတို့ကို စော်ကားနှိမ့်ချ ရေးသား ရန်)ဟု စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ထားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းစွပ်စွဲချက်အတိုင်း ဟုတ်သည်-မဟုတ်သည်ကို မစိုးရိမ်စာသင်သား ရေးသားသော စာအုပ်များထဲမှ (စိတ်ထားဖြူစင်ပါရမီရှင်) စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်မျှကို ဖတ်ကြည့်လိုက်လျှင်ပင် အမှန်ကို သိမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဖြေ(၄)။ ။ ၄င်း၏ စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၅-၆)တို့၌ (သာသနာတော်၌ အပြစ်ဖွဲ့ရန်ရှာတတ်သော လူစွမ်းကောင်းလုပ်ရပ်များသည် သာသနာတည်တံ့ရေးအတွက်မဖြစ်ဘဲ သာသနာဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်း၏ အကြောင်း ပင်ဖြစ်ကြောင်းကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဝိနည်းသုတ္တန်ဒေသနာတော်တို့တွင် အများဆုံးတွေ့ရပေ၏။ ...။ ပဋိသန္ထာရေ အဂါရဝါ ဝိဟရန္တိ-------။ အထက်ပါ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ကိုလည်း စာရေးသူ အထူးသတိပြုမိပါ၏။ သို့သော် ဤနေရာ ၌ တစ်ဖက်သတ်ရန်မူတတ်သော ပရိယတ်ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ ဓမ္မနည်းလမ်းမကျဘဲ ငါသိငါတတ် ငါ့စကားနွားရ လုပ်တတ်သော ပရဝါဒီတို့ကို (သင်တို့၌လည်း အမှားတွေရှိနေသည်)ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ထားတတ်စေရန် ထောက်ပြပေးလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါ၏)
၄င်းတွင် (ကိမိလသုတ္တန်)ကို ကိုးကားပြသထားသော်လည်း ၄င်းသုတ္တန်မှာ (အဓမ္မဝါဒတွေကို မသိချင်ယောင် ဆောင်၍ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်အောင် နေရစ်ကြလော့၊ အဓမ္မဝါဒ=အမှားတရားတွေကို လက်ခံရစ်ကြလော့)ဟူ၍ တစ်စက်ကမျှ မပါခြင်းကြောင့် ၄င်းကိမိလသုတ္တန်သည် အဓမ္မဝါဒဖော်ထုတ်တားဆီးဖယ်ရှားရေးကို ဆောင်ရွက်နေသော မစိုးရိမ်စာသင်သားကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ရန် ကြိုးစားနေသူအတွက် သာဓကမမြောက်ပေ။ လက်ကိုင်တုတ်မဖြစ်ပေ။ မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် ဓမ္မဝါဒီ သံဃာတော်များကို ဂါရဝပြုလျက် နေထိုင်ကျင့်သုံးလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ဆုံဖူး သူတိုင်း သိကြပါသည်။
မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် အပြစ်ဖွဲ့ရန်ရှာတတ်သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ လူစွမ်းကောင်းလုပ်နေသူ မဟုတ် ကြောင်း၊ သာသနာတော် တည်တံ့ပြန့်ပွားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူသာဖြစ်ကြောင်း၊ ပရိယတ်ကို အလွဲ သုံးစား ပြုလုပ်တတ်သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ (ငါသိငါတတ် ငါ့စကားနွားရ)လုပ်တတ်သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ မစိုးရိမ် စာသင်သားမှာ မရှင်းနိုင်လောက်အောင် ခေါင်းငုံ့ခံလိုက်ရမည့်အမှားများ လုံးဝမရှိကြောင်းတို့ကို ကြေညာ လိုပါသည်။ မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ စာအုပ်များ၊ ဟောတရားများ၌ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။
၄င်းတို့သည်ကား မိမိဘာသာ အမှန်လုပ်ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်များကို စာအုပ်ထဲကအတိုင်းမှန်ပါသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသလား...၊ ပြောဝံ့ပါသလား။ ဤနေရာတွင် ငါ့စကားနွားရလုပ်သူမှာ မည်သူဖြစ်သနည်းဟုမေးရ ပေတော့မည်။
မည်သူ့မှာ အမှားတွေရှိရှိ-ထိုအမှားသည် ဝါဒရေးရာတစ်ခုအနေဖြင့် အမှားမျိုးဆက် (နှိပ်စက်နေမည့် အမှားမျိုး) ရှိနေလျှင် ဝေဖန်ဖော်ထုတ်တင်ပြပေးရန် ရိုးသားသူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါသည်။
အဖြေ(၅)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၇)၌ (ပရဝါဒီတို့သည် တရားဟောခြင်း(ဓမ္မဒေသနာ)၊ တရားနာခြင်း (ဓမ္မဿဝန) ဟူသော ပုညကိရိယဝတ္ထုတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းများဖြင့် တရားမရနိုင်။ ယခုမျက်မှောက်ခေတ် တရားပွဲများမှာ အလဟဿ အပိုအလုပ်များအနေဖြင့်သာ ထင်မြင်ယူဆသူတို့ ဖြစ်၏။ ရှေ့၌ အက္ခရာစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြ အပ်သော သူတို့၏စကားရပ်များကို အနှစ်ချုပ် စစ်ထုတ်ကြည့်သောအခါ အောက်ပါအတိုင်း တစ်ခုတည်းသောအဖြေကို တွေ့ရပေ၏။
(တရားဟောတရားနာခြင်းဖြင့် တရားမရ။ တရားမသိနိုင်။ ဘုရားလက်ထက်ကလဲ ဘုရားတရား ဟောရာ၌ တရားမရခဲ့ကြ။ သာမန်ပုထုဇဉ်တို့ဟောက ပို၍ပင် တရားမရနိုင်ကြောင်း။ အခုခေတ်မှာ မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သူတို့ မရှိနိုင်တော့ကြောင်း။ အထူးသဖြင့် တရားဟောတရားပြတရားနာခြင်းအလုပ်ကို သူတို့ မနှစ်မြို့ကြောင်း (ကောက်ချက်)တစ်ခုအဖြစ် ချမှတ်နိုင်ပေသည်)ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းတွင် ဘိက္ခုဓမ္မပိယဆရာတော်၏ (ပထမနိဗ္ဗာန်}-မှ
(က) မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာ မဂ်ဖိုလ်ရသူနည်းပါးကြောင်း သံယုတ်၊ ပါ၊ (သံ၊၁၊ ၄၂၂) မှာ ဟောကြားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားနာရုံသက်သက် ဒဿဖြင့် တရားမရနိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောဆိုပါတယ်။ (ပထမနိဗ္ဗာန်နှင့်ဝိပဿနာတစ္ဆေ၊ စာ-၄၁)
(ခ) တင်ပါ့ဘုရား၊ ဒီလောက်ဆိုရင် ပုထုဇဉ်ရဟန်းတစ်ပါးက တရားဟောရင် တရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေ လေးမဂ်လေးဖိုလ်ရနိုင်တယ်-မရနိုင်ဘူးဆိုတာ တပည့်တော် သဘောပေါက်ပါပြီ။ (ပထမနိဗ္ဗာန်နှင့် ဝိပဿနာ တစ္ဆေ၊ စာ-၉)
(ဂ) တရားနာရင် သောတာပန်တည်ရမယ်၊ ကြားရင်းနာရင်း သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ လုံးဝမှားနေပါတယ်။ တရားနာရုံသက်သက် ဒီခေတ်မှာလဲ သောတာပန် မတည်နိုင်ပါဘူး၊ ဘုရားလက်ထက် ကလဲ သောတာပန်မတည်ခဲ့ကြဘူး၊ ဘာလို့မတည်သလဲဆိုတော့ ဆက်ပြီး ပြောပါ့မယ်၊ အခုတော့ ဒီလောက်ပဲ ရပ်ထားဦးမယ်။ (ပထမနိဗ္ဗာန်နှင့်ဝိပဿနာတစ္ဆေ၊ စာ-၁၀)
(င) သံကိုသံဖျက် သံချေးတက်ဆိုသလို အချည်းအနှီးဖြစ်တဲ့ သာသနာတွင်းသား ရဟန်းတွေသာ သသနာတော်ကို ဖျက်ဆီးမှာပါ၊ သိပ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ (ပထမနိဗ္ဗာန်နှင့်ဝိပဿနာတစ္ဆေ၊ စာ-၄၂)
ဟူသော စာပိုဒ်တို့ကို အက္ခရာစဉ်ဖြင့် အမှတ်ပြ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။
(ဃ) မြတ်ဗုဒ္ဓသည် အဓိကကျသော တရားနာသူကို အထူးငဲ့၍ တရားများစွာတို့ကို အခြားလူတို့က မှတ်မိနိုင်ရုံသာ သိကြပါသော်လည်း ပဋိဝေဓဥာဏ် ဖြစ်လောက်အောင် နားမလည်နိုင်ကြကြောင်း စသည်ဖြင့် မှတ်ယူကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသဘောမှာ ထင်ရှားပါသည်။
မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ စိစစ်ချက် အကျဉ်း-မှ
(စ-၁) ၁၃၇၂-ခုနှစ် ဝါဆိုဦးတွင် စာရေးသူတို့ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အောင်ချမ်းသာဓမ္မာရုံမှာ ဝိပဿနာတရားအဖွဲ့တစ်ခုက ဝါတွင်းကာလ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်ကို သက်ဆိုင်ရာက အသိအမှတ် ပြုခွင့်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ (ပ)။ စာရေးသူက လုံးဝလက်မခံဘဲ လူကြီးလက်မှတ်၏ အရေးမပါပုံမှားနှင့် တိုင်တော ကိစ္စ၏ ရုံးသဘောသွား အဆင့်ဆင့်တို့ကို ရှင်းလင်းပြပြီး လုံးဝပယ်ချလိုက်ပါသည်။
(စ-၂) ၁၃၇၃-ခုနှစ် မိုးညှင်းမြို့တွင် ကျင်းပမည့်တရားပွဲအတွက် တရားပွဲလာရောက်ပင့်သူများက စာရေးသူထံမှောက် ဝင်ရောက်လာကြပါသည်။ (ပ) ထိုတရားပွဲ အစီအစဉ် လုံးဝပျက်သွားပါသည်။
(စ-၃) ယခုလည်း ဓမ္မဒါနပြုလိုသူတို့၏ အစီအစဉ် ပျက်လိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ ထိုသို့ ပျက်သောအခါတွင် ဘာ့ကြောင့်ပျက်သနည်းဟု အမေးရောက်လာလျှင် စာရေးသူ၏ မှတ်ချက်ကြောင့်ဟု ဖြေကြပါလိမ့်မည်။
ဟူ၍ ၄င်းက ထုတ်ပြထားပါသည်။
မူရင်းကို အဓိပ္ပာယ်မှန်ပေါက်အောက် အခေါက်ခေါက် ဖတ်ကြည့်သင့်ပါသည်။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် (တရားဟောခြင်း(ဓမ္မဒေသနာ)၊ တရားနာခြင်း(ဓမ္မဿဝန)ဟူသော ပုညကိရိယ ဝတ္ထုတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းများဖြင့် တရားမရနိုင်။ ယခုမျက်မှောက်ခေတ် တရားပွဲများမှာ အလဟဿ အပိုအလုပ်များအနေဖြင့်သာ ဖြစ်၏)ဟူသောစကားမှာ အရှင်ထာဝရ အမည်ခံထားသူ (၄င်း)၏ ကိုယ်ပိုင်စကားမျှသာ ဖြစ်သည်။
ထိုစကားသည် ဘိက္ခုဓမ္မပိယဆရာတော်၏ စကားမဟုတ်ပေ။ ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ၏ စကားမဟုတ်ပေ။ မစိုးရိမ် စာသင်သား၏ စကားမဟုတ်ပေ။ (မူရင်းဖြစ်သော ပထမနိဗ္ဗာန်နှင့်ဝိပဿနာတစ္ဆေ- စသည့်စာအုပ်ကို ရှာဖွေပြီး ဖတ်ရှုကြည့်လျှင် ပိုမိုထင်ရှားစွာ သိမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။) အမှန်မှာမူ ၄င်း၏စကားထဲတွင် (ကောက်ချက်)ဟူ၍ ပါရှိသည်နှင့်အညီ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်သော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် စွပ်စွဲပြောဆိုထားချက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘိက္ခုဓမ္မပိယ၏ (က) (ခ) (ဂ) (င) စကားရပ်များသည် မှန်ကန်သောစကားများ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏စာအုပ်- စာမျက်နှာ(၈/၁၇၇)မှာပါသည့် (သန္တတိအမတ်ကြီးသည်(ပ)ဝိသုဒ္ဓိ ၇-ပါးကို တစ်ပါးပြီးတစ်ပါး ကြိုးစား အားထုတ်ရမှု ရှိနိုင်ပေသည်) ဟူသောစကားနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ (၈/၁၇၇)ပါ စကားတို့ကို အမှန်ဟုယူလျှင် ဘိက္ခုဓမ္မပိယ၏ ဖော်ပြပါ (က) (ခ) (ဂ)စကားတို့ကိုလည်း အမှန်ဟုသာ ယူရမည်။
တစ်ဖန် ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၈)မှာပါသည့် (တရားဟူသည် နာကြားရုံမျှဖြင့် ပြီးပြည့်စုံမှု ရှိသည်ဟု မဆိုသာပါ။ (ပ) အမှန်ပင်ဖြစ်ပါ၏)ဟူသောစကားနှင့် (တရားနာရုံသက်သက် ဒဿနဖြင့် တရားမရနိုင်။ ဘာဝနာအလုပ် လုပ်ပါမှ တရားရနိုင်တယ်ဟုဆိုပါလျှင် လက်ခံနိုင်(ပ)}}ဟူသောစကားတို့နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် အထူးတင်ပြလိုသည်မှာ ၄င်းသည် ၄င်း၏မရိုးမသားပြုလုပ်တတ်သည့်ဥာဉ်အတိုင်း မရိုးမသား ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ပထမနိဗ္ဗာန်ရေးသားသူသည် ဘိက္ခုဓမ္မပိယ ဖြစ်ပါ၏။
ဝိပဿနာတစ္ဆေရေးသူသည် နန်းဦး(တမ္ပဝတီ) ဖြစ်ပါ၏။
ထေရဝါဒဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ အမှားဝင်္ကပါရေးသားသူသည် ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ ဖြစ်ပါ၏။
ပခုက္ကူဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရား အပိုင်း(၁) အပိုင်း(၂) အပိုင်း(၃)တို့ကို စိစစ်ချက်အကျဉ်း-ရေးသား သူသည် မစိုးရိမ်စာသင်သား ဖြစ်ပါ၏-ဟု ၄င်းက သေချာခွဲခြား သိမြင်ထားပါသည်။ သို့ပါလျက်ကယ်နှင့် ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ် ၄-ဦးတို့ကို (ပရဝါဒီ)နာမ်စားဖြင့် မှတ်သားပြလျက် တစ်အုပ်လုံးမှာ သုံးနှုန်းရေးသားပြသသည်။ ထို့နောက် စာမျက်နှာ(၉၈)အရောက်တွင်မှ (ပရဝါဒီမည်သော မစိုးရိမ်စာသင်သား}}ဟု လုံးချလိုက်သည်။ (ပရဝါဒီဟု ပါရှိသမျှအားလုံးသည် မစိုးရိမ်စာသင်သားပင် ဖြစ်တော့သည်}}ဟု သိမှတ်သွားစေပါသည်။
(ဘိက္ခုဓမ္မပိယ}မှာ အမှားရှိခဲ့လျှင်လည်း စာရှုသူတို့က (မစိုးရိမ်စာသင်သား}အပေါ်သာ အပြစ်မြင်စေရန်၊
(နန်းဦး(တမ္ပဝတီ))မှာ အမှားရှိခဲ့လျှင်လည်း စာရှုသူတို့က (မစိုးရိမ်စာသင်သား}အပေါ်သာ အပြစ်မြင်စေရန်၊
(ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ}မှာ အမှားရှိခဲ့လျှင်လည်း စာရှုသူတို့က (မစိုးရိမ်စာသင်သား}အပေါ်သာ အပြစ်မြင်စေရန်၊
(မစိုးရိမ်စာသင်သား}မှာ အမှားရှိခဲ့လျှင်လည်း စာရှုသူတို့က (မစိုးရိမ်စာသင်သား}အပေါ်သာ အပြစ်မြင်စေရန် တမင် လုပ်ကြံမုသားဆိုကာ မရိုးမသား လုပ်ထားမှု ဖြစ်ပေသည်။ ဤချက်သည် မည်မျှအရေးကြီးပါသနည်း။ အသရေဖျက်မှုအရ အမှုအခင်းမြောက်နိုင်သည်ဟု ယူဆအပ်ပါသည်။
အမှန်အားဖြင့် ရေးသားပြသရမည်မှာ ပထမနိဗ္ဗာန်ကို ဝေဖန်ရာဌာနတို့၌ ပရဝါဒီမည်သော ဘိက္ခုဓမ္မ ပိယဆရာတော်ဟုသာ သုံးနှုန်းရမည်။ ဝိပဿနာတစ္ဆေကို ဝေဖန်ရာဌာနတို့၌ ပရဝါဒီမည်သော နန်းဦး(တမ္ပဝတီ) ဟုသာ သုံးနှုန်းရမည်။ ထေရဝါဒဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာအမှားဝင်္ကပါကို ဝေဖန်ရာဌာနတို့၌ ပရဝါဒီမည်သော ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ ဟုသာ သုံးနှုန်းရမည်။ စိစစ်ချက်အကျဉ်းတို့ကို ဝေဖန်ရာဌာနတို့၌ ပရဝါဒီမည်သော မစိုးရိမ်စာသင်သားဟုသာ သုံးနှုန်းရမည်။
(ဤ၌ (ပရဝါဒီ}အမည်သည် ၄င်းက ကင်ပွန်းတပ်ပေးထားသည့်အမည်ဆိုး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း စာရေးသူတို့၏ တပည့်များကတော့ (အရှင်ဘုရားတို့က အများအကျိုးကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် (ပရဟိတ}ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်လိုပဲ (အများအကျိုးဆောင်သူ}လို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်လာမှာပါ။ သူတို့တွေကတော့ သူတို့အကျိုးပဲ ဆောင်ရွက်သူတွေ ဖြစ်လို့မို့ (သကဝါဒီ}လို့ ဖြစ်သွားမှာပါ}}ဟု အဓိပ္ပာယ်သစ်တစ်ခု ဟာသအနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်သုံးစွဲကြောင်း ရှင်းပြလာပါသေးသည်။)
အဖြေ(၆)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၈)၌ ((ပရဝါဒီတို့သည်) မျှတသောအခြေအနေတွင် ရပ်တည် မနေဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဖြစ်သော တရားဟောခြင်း၊ တရားနာခြင်းအလုပ်တို့ကို ပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း၊ အဓမ္မဝါဒတွေ-စသည်ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မတော်မတရားစွပ်စွဲခြင်း၊ တစ်ဖက်သားကို အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ ရန်စတိုက်ခိုက်နေ ခြင်းတို့ကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင် အဓမ္မဝါဒအတွင်း သက်ဆင်းသွားသူများ ဖြစ်သွား သည်}}ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းတွင် မျှတသောအခြေအနေတွင် ရပ်တည်ရမည်လား...မှန်ကန်သောအခြေအနေတွင် ရပ်တည်ရမည် လား...ဟု မေးခွန်းထုတ်လိုပါသည်။ ပရဝါဒီ အမည်တပ်မခံရသော ဘိက္ခုဓမ္မပီယဆရာတော်၊ ပရဝါဒီ အမည်တပ်မခံ ရသော နန်းဦး(တမ္ပဝတီ)၊ ပရဝါဒီ အမည်တပ်မခံရသော ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ၊ ပရဝါဒီအမည်တပ်ခံရသော မစိုးရိမ်စာသင်သား ပုဂ္ဂိုလ် ၄-ဦးတို့သည် မှန်ကန်သောအခြေအနေတွင် ရပ်တည်နေလျက် ရှိကြပါသည်။
(တရားဟောခြင်း၊ တရားနာခြင်းအလုပ်တို့ကို ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း}}ကို ဓမ္မဝါဒီဆရာ ၄-ဦးတို့က လုံးဝမလုပ်ပါကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား သိစေလိုပါသည်။
အဓမ္မဝါဒဖြစ်သော တရားဟောခြင်း၊ တရားနာခြင်းအလုပ်တို့ကိုသာ ဖော်ထုတ် တားဆီး ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကို ဓမ္မဝါဒီဆရာ ၄-ဦးတို့က ဓမ္မဝါဒီဖြစ်သည်နှင့်ညီအောင် ဆောင်ရွက်နေကြ ပါသည်။
၄င်းက (အဓမ္မဝါဒတွေ-စသည်ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မတော်မတရားစွပ်စွဲခြင်း}}ကို ပြုလုပ်နေသူများ ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားပါသည်။ သင်္ဂါယနာ ၆-တန်တင်အပ်သော ပိဋကတ်တော်နှင့် မညီသည်များကို အဓမ္မဝါဒ တွေဟု ပြောရမည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၏ မြင့်မြတ်သော တာဝန်သိစိတ်အရ ကျင့်အပ်သည့် ကျင့်ဝတ်သာ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖန် (တစ်ဖက်သားကို အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ ရန်စတိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင် အဓမ္မဝါဒ အတွင်း သက်ဆင်းသွားသူများ ဖြစ်သည်}}ဟု စွပ်စွဲထားပြန်ပါသည်။ တစ်ဖက်သားဟူသည်မှာ (တစ်ဖက်သားက ဓမ္မဝါဒီဖြစ်သည်ကို အဓမ္မဝါဒီ}}ဟု ပြောဆိုမိလျှင်ကား စာရေးဆရာ ၄-ဦးတို့သည် အဓမ္မဝါဒအတွင်းသို့ သက်ဆင်းသွား လိမ့်မည် အမှန်။ သို့ရာတွင် (တစ်ဖက်သားက အဓမ္မဝါဒီဖြစ်၍ အဓမ္မဝါဒီ}}ဟု ပြောဆိုရေးသားခြင်းကား အဓမ္မဝါဒ အတွင်းသို့ မသက်ရောက်နိုင်ပေ။
စာရေးဆရာ ၄-ဦးတို့၏ ရေးသားချက်များသည် မည်သည့် ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာ ဋီကာအရ မည်သို့ မှားယွင်းလွဲချော်ခြင်းကြောင့် အဓမ္မဝါဒအတွင်းသို့ သက်ရောက်သွားပါကြောင်း အကိုးအကားပြနိုင်လျှင် အကိုးအကား ပြစေချင်ပါသည်။
အဖြေ(၇)။ ။၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၈)၌ (ပရဝါဒီတို့၏ (က)အမှတ်ပြစကားရပ်တွင် ----(မဂ်ဖိုလ်ရသူ လုံးဝ မရှိနိုင်} ဟူသော စကားမှာ မှားယွင်းပါသည်}}ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းတွင် (မဂ်ဖိုလ်ရသူ လုံးဝမရှိနိုင်}ဟူသော စကားသည် အရှင်ထာဝရအမည်ခံ ၄င်း၏စကားသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ အဖြေ(၅)၌ ပြထားသော (က)အမှတ်ပြစကားနှင့် ပြန်တိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဘိက္ခုဓမ္မပိယက ရေးထားသည်မှာ (တရားနာရုံသက်သက် ဒဿနဖြင့် တရားမရနိုင်ကြောင်း}ဟူ၍သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤစကားကို အရှင်ထာဝရအမည်ခံ ၄င်းက အဘယ်နည်းဖြင့် နားလည်ပြောဆိုလိုခြင်းကြောင့် (မဂ်ဖိုလ် ရသူ လုံးဝမရှိနိုင်}ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်သစ် စာသားအသစ် ဖြစ်ပေါ်လာပါသနည်း။ ရှင်းပြပါ။
အဖြေ(၈)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၉)၌ (ပရဝါဒီတို့၏ (ခ)စကားရပ်လာ ----]ပုထုဇဉ်ရဟန်းတွေ ဟောတဲ့ တရားက လုံးဝတရားမရနိုင်}ဟူ၍ အဘယ်စာပေ၌ လာရှိပါသနည်း}}ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းတွင် (ပုထုဇဉ်ရဟန်းတွေဟောတဲ့ တရားက လုံးဝ တရားမရနိုင်တော့}ဟူသော စကားသည် အရှင် ထာဝရ အမည်ခံ ၄င်း၏စကားသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ အဖြေ(၅)၌ ပြထားသော (ခ)အမှတ်ပြစကားနှင့် ပြန်တိုက် ကြည့်လိုက်ပါ။
ဘိက္ခုဓမ္မပိယက ရေးထားသည်မှာ (ဒီလောက်ဆိုရင် ပုထုဇဉ်ရဟန်းတစ်ပါးက တရားဟောရင် တရားနာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လေးမဂ်လေးဖိုလ် ရနိုင်တယ်-မရနိုင်ဘူးဆိုတာ တပည့်တော်တို့ သဘောပေါက်ပါပြီ} ဟူ၍သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤစကားကို အရှင်ထာဝရအမည်ခံ ၄င်းက အဘယ်နည်းဖြင့် နားလည်ပြောဆိုလိုခြင်းကြောင့် (ပုထုဇဉ် ရဟန်းတွေ ဟောတဲ့ တရားက လုံးဝ တရားမရနိုင်တော့}ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်အသစ် စာသားအသစ် ဖြစ်ပေါ်လာ ပါသနည်း။ ရှင်းပြပါဦး။
၄င်းသည် ဘိက္ခုဓမ္မပိယဆရာတော် သုံးနှုန်းထားသော (ဒီလောက်ဆိုရင်}ဟူသော ပမာဏပြပုဒ်အတွင်းက အပြည့်အစုံအနက်အဓိပ္ပာယ်တို့ကို သုံးသပ်ခြင်းမပြုဘဲ မျက်ကန်းသဖွယ်ပြု၍ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားကြောင်း ထင်ရှားပါ သည်။
အဖြေ(၉)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၉)၌ (ပရဝါဒီတို့၏ (က)စကားရပ်ကို လက်ခံနိုင်စရာ ရှိသော်လည်း (ခ) (ဂ) (ဃ) စကားရပ်တို့မှာ ဘုရားဟော ထေရဝါဒကျန်းဂန်တို့နှင့် လွဲချော်ဆန့်ကျင်နေပါသည်}}ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၁၇)၌ (သို့ဖြစ်၍ (ဃ) ဝါကျလာ (အခြားလူတို့ မှတ်မိရုံ သာမှတ်မိပြီး ပဋိဝေဓဥာဏ်မဖြစ်} ဟူသောစကားမှာ အရူးချေးပန်း ပရမ်းပတာ ပြောဆိုသောစကားသာတည်း}}ဟူ၍လည်းကောင်း၊
၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၂၂/၂၃)တို့၌ ]]အထက်၌ တင်ပြခဲ့ပြီးသော ပါဠိအဋ္ဌကထာ စကားရပ်များဖြင့်ပင် (ဘုရား တရားဟောသည့်အခါ အခြားလူတို့ ပဋိဝေဓဥာဏ် ဖြစ်လောက်အောင် နားမလည်ကြကြောင်း၊ တရားနာရင် သောတာပန်တည်ရမယ်။ ဒီစကားလုံးဝမှားတယ်}စသည်ဖြင့် တရားဟော တရားနာခြင်းအလုပ်ကို အပြစ်ဖွဲ့ ရန်ရှာ တတ်သော ပရဝါဒီတို့၏ စကားတို့သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဝေသာရဇ္ဇဥာဏ်တော်တို့ကို တားမြစ်သော အဓမ္မဝါဒစကားရပ်များ သာ ဖြစ်ပါတော့သည်}}ဟူ၍လည်းကောင်း ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းတို့တွင် တရားနာရင်းကြားရင်းဖြင့် သောတာပန်တည်-မတည်ကိစ္စမှာ (ဂ)ဝါကျနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ (ဂ)ဝါကျလာ မူရင်းစကားသည် ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၈) ၌ (တရားဟူသည် နာကြားရုံမျှနှင့် ပြီးပြည့်စုံမှုရှိသည်ဟု မဆိုသာပါ။ သမ္မပ္ပဓာန် ဝီရိယဖြင့် ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ ကြိုးစားအားထုတ်ပါမှသာ ရနိုင်သည်မှာလည်း အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်}} ဟူသောစကားရပ်၊ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ (၁၇၇)ပါ အတည်ပြုအမှန်ပြ စကားရပ်များနှင့် အတူတူ ပင်ဖြစ်၍ မှန်ပါသည်။ မမှားပေ။ (ဤသို့ဆိုလျှင် အရူးချေးပန်း ပရမ်းပတာစကား ပြောသူကား မည်သူနည်း။)
(ဃ)ဝါကျလာစကားရပ်ပါ မူရင်းစကားစုသည် မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော်ကျမ်း၊ စာမျက်နှာ(၁)မှာ စတင်လာ ရှိသည့် တရားတော်အရ ရေးသားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း အမှားဝင်္ကပါစာအုပ်မှာ အပြည့်အစုံ ပါရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မှန်ပါသည်။
အကယ်၍ ((ဃ)စကားရပ်ကို မမှန်ပါ}}ဟုဆိုလျှင် ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၂၀)တွင် ပါရှိသည့်
(အမှန်ဆိုရသော် တရားလည်းနာရမည်။ နာသည့်အတိုင်းလည်း ကျင့်ရမည်။ ထိုအခါ ပုဂ္ဂလသမ္ပတ္တိဖြစ်သော ဖြည့်ဆည်းဖူးခဲ့သော ပါရမီအထိုက်အလျောက်လည်း ရှိပါက နိဗ္ဗာန်နှင့် လွဲချော်နိုင်စရာ မရှိတော့ချေ}}
ဟူသောစကားကိုလည်း မမှန်ဟုသာ ဆိုရမည်မုချ။ (ဤသို့ဆိုလျှင် အရူးချေးပန်း ပရမ်းပတာစကား ပြောသူကား မည်သူနည်း။)
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပုဂ္ဂလသမ္ပတ္တိဖြစ်သော ဖြည့်ဆည်းဖူးခဲ့သော ပါရမီအထိုက်အလျောက် မရှိပါက နိဗ္ဗာန်နှင့် လွဲချော်နိုင်စရာ ရှိခြင်းကြောင့် တရားဟောသော်လည်း ပဋိဝေဓဥာဏ် မဖြစ်သူများမှာ များစွာပင် ရှိပါပေတော့သည်။ (ဘုရား တရားဟောသည့်အခါ အခြားလူတို့ ပဋိဝေဓဥာဏ် ဖြစ်လောက်အောင် နားမလည်ကြကြောင်း}}မှာ မှန်သောစကားသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။ (အခြားလူ}ဟူသည်မှာ ပါရမီမပြည့်သေးသူ၊ ဣနြေ္ဒမရင့်သေးသူ၊ သောတာပန်တို့အတွက် ဟောအပ်သည့်တရားကို နားမလည်နိုင်သော ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ် စသည်များကို ဆိုလိုပါသည်။ အနာဓိဂတတ္တာ။
မြတ်စွာဘုရားသည် တစ်ရက်လျှင် ၂-ကြိမ် လောကကြီးကို ရှုစားဆင်ခြင်တော်မူလေ့ရှိရာ ဥာဏ်တော်ကွန်ရက် အတွင်း ထင်လင်းစွာ ဝင်လာသူများသာ ပဋိဝေဓဥာဏ် ဖြစ်စေနိုင်သူများ ဖြစ်၍ မဂ်ဖိုလ်ရသူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။ အခြားသူများမှာ ပဋိဝေဓဥာဏ် ဖြစ်-မဖြစ်သည် ဧကန်နည်းအားဖြင့် မသေချာပါ။
အဖြေ(၁၀)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၁၄)၌ (ထို့ထက်ပို၍ခိုင်မာသော ပရဝါဒီတို့၏စကားမှာ (ဃ) စကားရပ်လာ စကားတို့ ဖြစ်သည်။ တရားဟောတရားနာခြင်းအလုပ်ကို သူတို့ လုံးဝမရှုစိမ့်ကြောင်း ပိုမိုထင်ရှားသည်။ (ဘုရားက တရားနာသူကို အထူးငဲ့၍ တရားများစွာကို ဟောခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းတရားတို့ကို အခြားလူတို့က မှတ်မိနိုင်ရုံသာ သိကြပြီး ပဋိဝေဓဥာဏ်ဖြစ်လောက်အောင် နားမလည်ကြကြောင်း စသည်ဖြင့် မှတ်ယူကြပါ}ဟူ၍ အဓမ္မဝါဒတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ခဲ့ပါသည်}}ရေးသားပြသထားပါသည်။
အရှင်ထာဝရအမည်ခံသူ ၄င်းက (အခြားလူတို့က မှတ်မိနိုင်ရုံသာ သိကြပြီး ပဋိဝေဓဥာဏ်ဖြစ်လောက်အောင် နားမလည်ကြကြောင်း စသည်ဖြင့် မှတ်ယူကြပါ}}ဟူသောစကားကို အဓမ္မဝါဒတစ်ရပ်ဟု ဆိုလျှင် ၄င်းကိုယ်တိုင် ပြောဆိုထားသော ၄င်း၏စာအုပ် (စာမျက်နှာ(၂၀)}ပါစကားသည်လည်း အဓမ္မဝါဒစကားပင် ဖြစ်ရပေတော့မည်။ မှန်၏။ အဓိပ္ပာယ်ချင်း အတူတူပင်။
အဖြေ(၁၁)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၁၄)၌ ((က) (ခ) (ဂ)တို့မှာ ဘာဝနာကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း (ဃ)စကားရပ်အရ ဆန့်ကျင်ဘက်(အဆိုး၊အပြစ်)ကို ဦးတည်ထားသည်မှာ သေချာပါ၏။ ယင်း(ဃ)ပါ အဓမ္မဝါဒကို တင်ပြပြီး-တင်ပြလတ္တံ့ ဖြစ်သော-အကိုးအကားတို့ဖြင့် အမှန်အမှား ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပါလော့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ}} ဟူ၍ရေးသားပြသထားပါသည်။
၄င်းသည် တရားဟော၊ တရားနာ၊ တရားပွဲဟူရာတွင် ဓမ္မဝါဒီတရား၊ အဓမ္မဝါဒီတရားဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိကြောင်းကိုမျှ မသိသူ ဖြစ်ပေသည်။ ဓမ္မဝါဒီဖြစ်သော ဓမ္မဒါနကြောင့် ကောင်းသောအကျိုး ကြီးမားပါသည်။ အဓမ္မဝါဒီဖြစ် သော အဓမ္မဒါနကြောင့် ပြောင်းပြန်လှန်၍ မကောင်းသောအကျိုး ကြီးမားပါသည်။ အဇာတသတ်ဝတ္ထုလာ ဒေဝဒတ်၏ အဓမ္မဒါနဟောတရားမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။
၄င်းတွင် (တင်ပြပြီး-တင်ပြလတ္တံ့ ဖြစ်သော အကိုးအကားများ} ကို ရှာကြည့်သောအခါ ပါဠိ-မြန်မာပြန် သာဓက ၁၅-ခု ဖော်ပြထားပါသည်။
၄င်း၏အကိုးအကား ၁၅-ခုစလုံးတွင် (ဘုရားက တရားနာသူကို အထူးငဲ့၍ တရားများစွာကို ဟောခဲ့ ကြောင်း။ ယင်းတရားတို့ကို အခြားလူတို့က မှတ်မိနိုင်ရုံသာ သိကြပြီး ပဋိဝေဓဥာဏ်ဖြစ်လောက်အောင် နားမလည် ကြကြောင်း-ဟူသော စကားသည် အဓမ္မဝါဒတစ်ရပ် ဖြစ်သည်}}ဟူသောစကားကို အမှန်တကယ် အတည်ဖြစ်စေနိုင်သော ပါဠိအဋ္ဌကထာဟူ၍ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မပါရှိချေ။ မဆီမဆိုင်တွေကို ကိုင်မိရာ ကိုင်လိုက်ရပုံ ပေါ်နေပါသည်။
၄င်းပါဠိတော်အဋ္ဌကထာများသည် သူ့နေရာနှင့် သူ့အဓိပ္ပာယ်နှင့် သူ့ဘာသာသူ မှန်ကန်နေကြပါသော်လည်း ၄င်းတို့အားလုံးက (ဃ)ဝါကျပါစကားစုသည် အဓမ္မဝါဒ ဖြစ်သည်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကိုကား မဖြစ်စေနိုင်ပေ။ အကယ်၍ ၄င်းတို့အားလုံးက (ဃ)ဝါကျပါစကားစုသည် အဓမ္မဝါဒ ဖြစ်သည်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်ငြားအံ့။ ပြီးစေနိုင်ငြား အံ့။ ၄င်း၏စာအုပ်-(စာမျက်နှာ(၂၀)}တွင် ပါရှိသည့် စကားသည်လည်း မမှန်သောစကားသာဖြစ်၍ အဓမ္မဝါဒသာ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ (နာသူတိုင်း မဂ်ဖိုလ်ကို ရရမည်-ဆိုလိုရာရောက်သည်-ဟူလို။)
ထို့ထက်တက်၍ဆိုချင်သေးလျှင် ၄င်းသည် (ဃ)ဝါကျပါစကားစုကို တိုက်ခိုက်နေရင်းဖြင့်ပင် (မြတ်စွာ ဘုရား၏ တရားကိုနာကြားရသူတိုင်း မည်သူမဆို (တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမကျန်) အကုန်လုံး အားလုံး ပဋိဝေဓဥာဏ် ရရှိသူချည်းသာ ဖြစ်သည်}}ဟူသော အဓမ္မဝါဒသစ်တစ်ရပ်ကို ကြေညာပြီး ဝန်ခံလိုက်ရာရောက်သွားမည် သာ ဖြစ်ပါသည်။
အဖြေ(၁၂)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၂၃)၌ (ပရဝါဒီတို့၏(င)စကားရပ်၌ (အချည်းအနှီးဖြစ်တဲ့ သာသနာတွင်းသား ရဟန်းတွေကသာ သာသနာကို ဖျက်ဆီးမှာပါ}ဟု အပေါင်းနှင့်ဆိုထားခြင်းကြောင့် သာသနာတွင်း သား ရဟန်းမှန်သမျှ မဂ်ဖိုလ်မှ အချည်းအနှီး ဖြစ်ကုန်တော့၏။ တရားမရနိုင်တော့-စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ သာသနာတော်တွင်းရှိ ရဟန်းသံဃာတော်တို့ကို ပုတ်ခတ်ဆဲရေးထားသော စကားတို့သာ ဖြစ်သည်}}ဟူ၍ ရေးသားပြ သထားပါသည်။
၄င်းတွင် (င)မူရင်းလာစကားနှင့် မဆိုင်ပါ။ (င)မူရင်းမှာ (သံကိုသံဖျက် သံချေးတက်ဆိုသလို အချီးအနှီးဖြစ်တဲ့ သာသနာတွင်းသား ရဟန်းတွေကသာ သာသနာတော်ကို ဖျက်ဆီးမှာပါ}}ဟူ၍သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစကားစုသည် သာသနာဝင်အားလုံး ကြားဖူးနားဝ ပြည့်ဝနေသည့်စကားပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းကောင်းတို့ကို မထိခိုက်စေရန် (အချီးအနှီးဖြစ်တဲ့}ဟူသော ဝိသေသနဖြင့် ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ ((အချီးအနှီးမဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတွေက တော့ သာသနာတော်ကို မဖျက်ဆီးပါ}} ဟူ၍ ဗျတိရေကတ္ထ ထင်ရှားသည့်စကား ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါလျက်ကိုပင် (င)မူရင်းကို ၄င်းက ပြန်လည်ပြောဆိုရာ၌ (သာသနာတွင်းသား ရဟန်းမှန်သမျှ မဂ်ဖိုလ်မှ အချည်းအနှီး ဖြစ်ကုန်တော့၏။ တရားမရနိုင်တော့}}ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်အသစ် စာသားအသစ်ဖြင့် ပြောနိုင်သည့်အတွက် အံ့ဩရပါသည်။
အရှင်ထာဝရ အမည်ခံသူ ၄င်းသည် ဤမျှလောက်ကြွယ်ဝလှပသော မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံနည်းတို့ကို မည်သည့် ဆရာတို့ထံမှ သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့ရပေသနည်း။ စိတ်ဝင်စားလာလေပြီတကား။ စင်စစ်အားဖြင့် သာသနာတော် တွင်းရှိ ရဟန်းသံဃာတော်တို့ကို ပုတ်ခတ်ဆဲရေးသူမှာ အရှင်ထာဝရအမည်ခံ (၄င်း)သာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။
၄င်းဖော်ပြထားသည့် အဟံဘန္တေ-အစချီသည့် သာဓကမှာ သာဓက မမြောက်ပေ။ အချီးအနှီးဖြစ်သော ရဟန်းများကိုလည်း သံသာရဝဋ္ဋတောဖြင့် ဝင်ရောက်လာသူများချည်းဟုဆိုလျှင် ၄င်း၏စကားအတိုင်း ဟုတ်နိုင်-မဟုတ်နိုင်ကို သာသနာရေးဦးစီးဌာန ဝိနိစ္ဆယခုံရုံးဝင် အမှုတွဲများအကြောင်း လေ့လာကြည့်စေချင်ပါဘိသည်။ ပထမ ပါရာဇိကမှုများနှင့် ဒုတိယပါရာဇိကမှုများ ကျူးလွန်ထားသည့် ရဟန်းများကိုလည်း သာသနာဖျက်ဟု မဆိုနိုင်တော့ ပြီလော။ ၄င်းပါရာဇိကကျူးလွန်ပြီးသား ရဟန်းများလည်းပဲ သံသာရဝဋ္ဋတောဖြင့် ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်၍ အချီးအနှီး မဟုတ်သူများတည်း-သာသနာဖျက်မဟုတ်သူများတည်း-ဟု ယူဆရပါမည်လော။
၄င်းက ၄င်းဝါသနာထုံနေသည့် အဆဲစာတို့ဖြင့် ပုံစံချလျက် အောက်ပါအတိုင်း ဆဲရေးပုတ်ခတ်ထားသေးသည်။
မြတ်စွာဘုရားက...ဗုဒ္ဓသာသနာတွင်းသား ရဟန်းတော်များ မဂ်ဖိုလ်မှ အချီးအနှီး မဖြစ်။ (နိဗ္ဗာန်ရသော အကျင့်ကို ကျင့်၏။)
ပရဝါဒီက... ဗုဒ္ဓသာသနာတွင်းသား ရဟန်းတော်များ မဂ်ဖိုလ်မှ အချီးအနှီး ဖြစ်၏။ (နိဗ္ဗာန်ရသော အကျင့်ကို မကျင့်။) (၄င်း၏စာအုပ်၊ စာ-၂၄)
အထူးမှတ်ချက်။ အထက်ပါစကားစုသည် ဘိက္ခုဓမ္မပိယဆရာတော်၏ ((င)ဝါကျပါစကားစု ) မဟုတ်ခြင်း ကြောင့် အရှင်ထာဝရအမည်ခံသူ )၄င်း၏စကားသာလျှင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ ၄င်းသည်သာလျှင် ပရဝါဒီ ဖြစ်ပါ တော့သည်။
အဖြေ(၁၂)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်၌ (စ-၁) (စ-၂) (စ-၃)ဟူ၍ ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားသော်လည်း ၄င်းတို့ ကို သီးသန့်ခွဲခြမ်း၍ ဝေဖန်ထားချက် လုံးဝမပါရှိချေ။
၄င်းစာတို့တွင် မစိုးရိမ်စာသင်သားက ဝိပဿနာတရားအဖွဲ့ တစ်ခုက သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်ကို ...ရှင်းလင်းပြပြီး လုံးဝပယ်ချလိုက်ကြောင်း စသည်တို့ကို စာရှုသူတို့အား သိစေမြင်စေပြီးလျှင် မစိုးရိမ်စာသင်သားအပေါ် အမုန်းစိတ်ဝင်စေလိုခြင်းကြောင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။
အမှန်ကမူ ဝိပဿနာတရားသင်ပြမည့်အဖွဲ့သည် တကယ်မှားသည့် အမှားများကို အစဉ်အဆက် မပြတ်မလပ် ကျူးလွန်နေသည့်အဖွဲ့သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဓမ္မဝါဒ ဖော်ထုတ်တားဆီးဖယ်ရှာရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရ မစိုးရိမ် စာသင်သားက ပယ်ချလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ (မြတ်ပန်းရဂုံမဂ္ဂဇင်း}တွင် ၄င်းဝိပဿနာအဖွဲ့၏ အမှားများ အကြောင်းကို လစဉ်အခန်းဆက် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလျက် ရှိပါသည်။ သူတို့အဖွဲ့က မှားသည်-မမှားသည်တို့ကို သိလိုလျှင် မြတ်ပန်းရဂုံမဂ္ဂဇင်းများကို ရှာဖွေလေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:50 AM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 7:03 AM | မစိုးရိမ်စာသင်သာ3းComments so far
အဓမ္မဝါဒနိဂ္ဂဟကို အဓမ္မဝါဒနိဂ္ဂဟဖြင့် စိစစ်ဝေဖန်ခြင်း
၁၃၇၂-ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်းပိုင်းတွင် ''မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာရေးစိန်ခေါ်မှုအသစ် (အဓမ္မဝါဒနိဂ္ဂဟ)'' စာမူကြမ်းတစ်ခုကို မိတ္ထူများစွာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေနေကြောင်း ကြားသိရသည်။ စာတိုက်မှ အမြန်ချောဖြင့် ပေးပို့၍ စာရေးသူ့ထံလည်း ရောက်ရှိလာသည်။ သက်ဆိုင်ရာသာသနာရေးဦးစီးဌာန စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့ထံ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုရန် တင်ပြထားကြောင်း ကြားသိရပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘာမျှ တုံ့ပြန်မှု-မပြုသေးဘဲ ဖြစ်လာမည့်ဖြစ်စဉ်များ အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရန် အဆုံးသတ်ချိန်တိုင်အောင် စောင့်နေလိုက်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ၁၃၇၂-ခုနှစ် တပိုတွဲလပြည့်နေ့တွင် သာသနာရေးဦးစီးဌာန စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ဝေခွင့် မပြုရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ထိုကြောင့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကနေ ဖြစ်လာမည့်ဖြစ်စဉ်များ လမ်းဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လိုက်ရပါသည်။
သို့ရာတွင် သာသနာရေးဦးစီးဌာန စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ မတင်ပြမီကတည်းက မြို့ရွာဒေသကြီး အသီးသီးသို့ မိတ္ထူများစွာ ဖြန့်ဝေပို့ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ပျံ့နှံ့နေသည့် မိတ္ထူများကြောင့် မစိုးရိမ်စာသင်သားအပေါ် အသိအမြင် လွဲမှားနေသူများ ရှိနေကြကြောင်း သိလိုက်ရပြန်ပါသည်။
ဒကာမကြီးတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ သူတို့မိတ်ဆွေ သီလရှင်ဆရာကြီးကပင် ''မစိုးရိမ်စာသင်သားကို သနားလိုက်တာ၊ သူ့ကိုလဲ ပြန်ဆော်တာရှိတော့ ခံနေရရှာပြီ''ဟု ဆိုသတတ်။ စာကို သေချာမဖတ်ခြင်းကြောင့် သနား နေသည်လား...နားမလည်ခြင်းကြောင့် သနားနေသည်လား... မသိရပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်းစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာတို့သည် မစိုးရိမ်စာသင်သားအပေါ် အပြစ်တင်မိသော၊ အပြစ်တင်နိုင်သော အမှန်အကန်များ မဟုတ်ခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းစာအုပ်ထဲမှ မစိုးရိမ်စာသင်သားအား နာမည်ပျက်စေရန် လုပ်ကြံထားပုံများကို ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ပါပြီ။
၄င်းမိတ္ထူမူတွင် စာကိုယ်က ၂၃၄-မျက်နှာ၊ မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာရေးစိန်ခေါ်မှုအသစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သံဃာ ထုအား လျှောက်ထားတောင်းပန်လွှာက ၁ဝ-မျက်နှာ(က-ည)၊ စာရေးသူ၏ပဋိညာဉ်က ၃-မျက်နှာ(ဋ-ဍ)၊ ရတနတ္တယပဏာမဂါထာက ၃-မျက်နှာ(ဏ-ထ) ပါရှိသည်။
''အထူးသဖြင့် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အမျိုးဘာသာသာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးအတွက်- ဦးတည်ရည်ရွယ်လျက်...
စာရှုသူ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းရှင်လူအများစုတို့အတွက်....''ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။
၄င်းစာအုပ်-ရေးသားသူ၏အမည်ကို အရှင်ထာဝရ(ရန်ကုန်)ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤရှင်းလင်းချက်တွင် အရှင်ထာဝရ(ရန်ကုန်)ကို ''၄င်း'' ဟူသော နာမ်စားဖြင့် သတ်မှတ်၍ သုံးနှုန်းသွားပါမည်။
အမေး ။ ။ ၄င်းက ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(ဍ)တွင်- ''အထူးသဖြင့် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာ ထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး....အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးအတွက်-ဦးတည်ရည်ရွယ် လျက်''ဟူ၍ ရေးသားပြသထားသည်။
၄င်းစာသားများက ၄င်း၏ရေးသားချက်အတိုင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မည်သို့မည်ပုံ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည်နည်း။ သာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးကို မည်သို့မည်ပုံ အကောင်အထည်ဖော်နိုင် မည်နည်း။
''မှားယွင်းဖောက်ပြန် အကျင့်တန်၍ ရန်လိုစစ်ခင်း အဓမ္မဝါဒီတသင်းတို့ကို နှိမ်နင်းဆုံးမကြောင်းဆုံးမရာ ဖြစ်သော (ဝါ) တရားဟောတရားနာ အပြစ်ရှာသော အပုညကြိယဝါဒ၊
သမ္မာဒိဋ္ဌိကျင့်စဉ်ကို ပစ်ပယ်သော မိစ္ဆာဒိဌိဝါဒ၊ ပုထုဇဉ်ဘဝဖြင့်သာ သေရမည်ဟု ယူဆသော နတ္ထိကဝါဒ၊ ဒီဘဝသေလျှင် ပြတ်သည်ဟု ယူဆသော ဧကဘဝဥစ္ဆေဒဝါဒ၊
အသင်္ခတ-အနတ္တကို အတ္တ=အနှစ်အသားရှိဟု ယူဆသော သာရတ္တနိဗ္ဗာနဝါဒ၊ ဣန္ဒြိယ သံဝရသီလကို ဖောက်ဖျက်သော (တနည်း) ကိုယ်နှုတ်နှလုံး မယဉ်ကျေး-ကြမ်းတမ်းရိုးပျသော အဝိနယဝါဒ၊ သံဃာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ဖျက်ဆီးသော (ဝါ) သံဃာသင်းခွဲသော ဘေဒကရဝါဒ စသည် များပြား မြတ်ဗုဒ္ဓကို စွပ်စွဲသော အဗ္ဘာစိက္ခနဝါဒီ အလီလီတို့၏ အဓမ္မဒေဝဒတ်လက်သစ်ဝါဒ-တို့ကို နှိမ်နင်းရာ အဓမ္မဝါဒနိဂ္ဂဟအမည်ရသော ကျမ်းကို'' ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
အဖြေ။ ။ ၄င်းတို့တွင်- (၁) ''မှားယွင်းဖောက်ပြန် အကျင့်တန်၍ ရန်လိုစစ်ခင်း အဓမ္မဝါဒီတသင်း'' ဟူသည်မှာ ဘယ်သူတွေကို ဆိုလိုပါသနည်း..ဟုမေးလျှင်
''မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် မှားယွင်းဖောက်ပြန် အကျင့်တန် ၍ ရန်လိုစစ်ခင်း အဓမ္မဝါဒီတသင်း ဖြစ်၏''ဟု အဖြေထွက်စေလိုကြောင်း သိသာပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်းက ၄င်းစာအုပ်-စာမျက်နှာ(၉၈/၁၁၂/ ၁၄ဝ/၁၉၆)တို့တွင်
''ပရဝါဒီမည်သော ကျွန်ုပ်မစိုးရိမ်စာသင်သား၊ သင်ပရဝါဒီ=တိတ္ထိဂိုဏ်းသား၊ ဝိဘဇ္ဇဝါဒီအမည်ခံ- မစိုးရိမ် စာသင်သားအမည်ခံ- အဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်၊ မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ အဓမ္မဝါဒ အဝိနယဝါဒ''ဟူ၍ ရေးသား ပြသထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (ဤ၌ ''ပရဝါဒီမည်သော ကျွန်ုပ်မစိုးရိမ်စာသင်သား''အသုံးအနှုန်းသည် ၄င်း၏ အသုံးအနှုန်းပင်။)
မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် ၄င်း၏ဖော်ပြပါရေးသားချက်အတိုင်း အဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ်နိုင်သည်- မဟုတ်နိုင် သည်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုပါက
မစိုးရိမ်စာသင်သားထုတ်ဝေသည့် စာအုပ် ၁၇-အုပ်၊
မစိုးရိမ်စာသင်သား အထူးစီစဉ်ထားသည့် စာအုပ် ၅-အုပ်၊
မစိုးရိမ်စာသင်သားတည်းဖြတ်၍ အမှာစာရေးပေးထားသည့် ''နယသာဂရ ပဌာန်းတရားတော်''အစရှိသည့် စာအုပ် ၈-အုပ်၊
မစိုးရိမ်စာသင်သား ဟောပြောထားသည့် ရုပ်သံပါ အဓမ္မဝါဒဖော်ထုတ်တားဆီးဖယ်ရှားရေးတရားတော် ၅-ချပ် (ပုဒ်ရေအားဖြင့် ၂ဝ ကျော်)၊
အသံသက်သက်ပါ အဓမ္မဝါဒဖော်ထုတ်တားဆီးဖယ်ရှားရေးတရားတော် ၁ချပ် (ပုဒ်ရေ ၃၅ ပုဒ်)တို့နှင့်-
လစဉ်ထုတ် ဓမ္မရံသီ၊ ဓမ္မရတနာ၊ မြတ်ပန်းရဂုံ၊ အနန္တဂုဏ်ရည်ပါ မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုပြီးမှ နား ထောင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကြပါရန် ပန်ကြားလိုပါသည်။ မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ ကလောင်အမည်ခွဲ ၆-ခုစလုံးကို ''မစိုးရိမ်စာသင်သားအပေါ်မဆင်မခြင်စွပ်စွဲချက်''စာတမ်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါစာအုပ်များ၊ တရားများကို ဖတ်ရှု နားထောင်ပြီးပါက မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် ရိုးသားမှန်ကန် ကျင့်ဖြောင့်မှန်၍ နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ ဓမ္မဝါဒီ ဖြစ်ပေသည်ကို အညီအမျှ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါတွင်
''မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာရေးစိန်ခေါ်မှုအသစ်ရေးသားသူ၏ မရိုးမသား လုပ်ကြံထားမှုများ''ကို ထင်ထင်လင်းလင်း အမြင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မည်။
(၂) တရားဟောတရားနာ အပြစ်ရှာသော အပုညကြိယဝါဒီ
(၃) သမ္မာဒိဌိကျင့်စဉ်ကို ပစ်ပယ်သော မိစ္ဆာဒိဌိဝါဒီ
(၄) ပုထုဇဉ်ဘဝဖြင့်သာ သေရမည်ဟု ယူဆသော နတ္ထိကဝါဒီ
(၅) ဒီဘဝသေလျှင် ပြတ်သည်ဟု ယူဆသော ဧကဘဝဥစ္ဆေဒဝါဒီ
(၆) အသင်္ခတ-အနတ္တကို အတ္တ=အနှစ်အသားရှိဟု ယူဆသော သာရတ္တနိဗ္ဗာနဝါဒီ (သာရ+အတ္တ+နိဗ္ဗာန)
(၇)ဣန္ဒြိယသံဝရသီလကို ဖောက်ဖျက်သော (တနည်း) ကိုယ်နှုတ်နှလုံး မယဉ်ကျေး-ကြမ်းတမ်း ရိုင်းပျသော အဝိနယဝါဒီ
(၈) သံဃာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ဖျက်ဆီးသော (ဝါ) သံဃာသင်းခွဲသော ဘေဒကရဝါဒီ
(၉) စသည်များပြား မြတ်ဗုဒ္ဓကို စွပ်စွဲသော အဗ္ဘာစိက္ခနဝါဒီ အလီလီတို့၏ အဓမ္မဒေဝဒတ်လက်သစ်ဝါဒီ ဟူသည်မှာ
ဘယ်သူတွေကို ဆိုလိုပါသနည်း...ဟုမေးလျှင် “မစိုးရိမ်စာသင်သားပင် ဖြစ်၏” ဟု အဖြေထွက် စေလိုကြောင်း သိသာပါသည်။
''မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် ၄င်း၏ဖော်ပြပါရေးသားချက်အတိုင်း ဟုတ်နိုင်သည်- မဟုတ်နိုင်သည်''တို့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ ဆောင်းပါးများ၊ စာအုပ်များ၊ ဟောတရားများကို ဖတ်ရှုနားထောင်ကြည့် စေလိုပါသည်။
ဖော်ပြပါစာအုပ်များ၊ တရားများကို ဖတ်ရှု နားထောင်ပြီးပါက မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် ရိုးသားမှန်ကန် ကျင့်ဖြောင့်မှန်၍ နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ ဓမ္မဝါဒီ ဖြစ်ပေသည်ကို အညီအမျှ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါတွင် ''မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာရေးစိန်ခေါ်မှုအသစ်ရေးသားသူ၏ မရိုးမသား လုပ်ကြံထားမှုများ''ကို ထင်ထင်လင်းလင်း အမြင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မည်။
၄င်း၏ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ၄င်း၏အရေးအသားများသည် မည်သို့မျှ ညီညွတ်ခြင်းမရှိပါ။ မစိုးရိမ်စာသင် သားကို ယုံကြည်နေသူများက မစိုးရိမ်စာသင်သားအပေါ်တွင် အထင်အမြင်လွဲမှားသွားစေရန် ၄င်းက ရန်တိုက် ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဆိုလျှင် ၄င်း၏ ''အထူးသဖြင့် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး...၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးအတွက်- ဦးတည်ရည်ရွယ်လျက်''ဟူ၍ ရေးသားပြသထားချက်သည် ဗြောင်လိမ်ထားသည့် မုသားဝါစာမျှသာ၊ တစ်နည်း ဒုစရိုက်မှုလွန်ကျူးထားခြင်းမျှသာ ဖြစ်နေပါတော့သည်တကား။
အမေး။ ။ ၄င်းက ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(ဍ)တွင်- ''အထူးသဖြင့် သာသနာတော်အတွင်း သံဃာ ထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး....အမျိုးး ဘာသာ သာသနာတော်ကြီး မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးအတွက်-ဦးတည်ရည်ရွယ် လျက်''ဟူ၍ ရေးသားပြသထားသည်။
၄င်းစာသားများက ၄င်း၏ရေးသားချက်အတိုင်း သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မည်သို့မည်ပုံ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည်နည်း။ သာသနာတော်ကြီး
မပြိုကွဲမပျက်စီးစေရေးကို မည်သို့မည်ပုံ အကောင်အထည်ဖော်နိုင် မည်နည်း။
အဖြေ(၁)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၃)၌ ''ပရဝါဒီတို့၏ ရှေ့၌တင်ပြခဲ့သောစကားများသည် ဓမ္မဝါဒ ဟုတ်-မဟုတ် မစစ်ကြောမီ ယင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာခံယူချက် ဆက်ဆံမှုသဘောထားနှင့် သာသနာရေး ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို အထိုက်အလျောက် တင်ပြပေးလိုပါသည်''ဟူ၍ ရေးသားပြသထားပါသည်။
ပရဝါဒီဟူသည်မှာ ဘယ်သူတွေကို ဆိုလိုပါသနည်း..ဟုမေးလျှင် မစိုးရိမ်စာသင်သားကို ဆိုလိုကြောင်း အဖြေထွက်ပါသည်။
အဓိပ္ပာယ်မှာ ''မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာခံယူချက် ဆက်ဆံမှုသဘောထားနှင့် သာသနာ ရေးရည်ရွယ်ချက်တို့ကို အထိုက်အလျောက် တင်ပြပေးလိုပါသည်''ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ၄င်းသည် ၄င်းဖော်ပြထားသည့် ''အတ္တနော ပမာဏံ န ဇာနာတိ''ဟူသည်အညီ မိမိ၏ပမာဏကို မိမိကိုယ်တိုင်က မသိတတ်လေ။
ယခုကောက်နုတ်ထုတ်ယူပြအပ်သော၊ စာမျက်နှာ(၃) အစရှိသည်တို့၌ ပါရှိနေသော '၄င်း'၏ စာသားများက သံဃာထုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားစေမည့် အသုံးအနှုန်းများချည်း ဖြစ်နေ ကြောင်း ထင်ရှားလာပါလိမ့်မည်။ သာသနာတော်ကြီး ပြိုကွဲပျက်စီးစေရေးသို့ ရှေးရှုထားသော မရိုး မသား စိန်ခေါ်စကားများချည်း ဖြစ်နေကြောင်း ထင်ရှားလာပါလိမ့်မည်။
မစိုးရိမ်စာသင်သား၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာခံယူချက် ဆက်ဆံမှုသဘောထားနှင့် သာသနာရေးရည်ရွယ်ချက်တို့ကို စိတ်ထားဖြူစင်ပါရမီရှင်စာအုပ်တွင်လည်းကောင်း၊
မြတ်ပန်းရဂုံမဂ္ဂဇင်း၊ သာသနပါလ-ဓမ္မကထာအခန်း- ဝေဖန်ရေး ဆရာတစ်ပါး၏ သဘောထားဆိုင်ရာ အင်တာဗျူးအဖြေတို့တွင်လည်းကောင်း၊
ဓမ္မအလင်းတန်းအမည်ရှိ အဓမ္မဝါဒ ဖော်ထုတ်တားဆီးဖယ်ရှားရေးနှိုးဆော်လွှာစာအုပ်တွင်လည်းကောင်း အထင်အရှား ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် ပမာဏမှာ ''မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် ဓမ္မဝါဒီ မဟုတ်ကြောင်း (ဝါ) မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် အဓမ္မဝါဒီ ဖြစ်ကြောင်း'' စစ်ကြောပြသရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ထင်ရှားအောင် စစ်ကြောပြသနိုင်လျှင် စစ်ကြောပြသရန် ၄င်းမှာ တာဝန်ရှိပါသည်။ မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် အမှန်တကယ်ပင် အဓမ္မဝါဒီ ဖြစ်နေသည်ဆိုလျှင် ဝိနိစ္ဆယခုံရုံးသို့ တင်ပြစွဲဆိုရန်ပင် ၄င်းမှာ တာဝန်ရှိနေပါသည်။ စွဲဆိုသင့်လှပါသည်။
အဖြေ(၂)။ ။ ၄င်း၏စာအုပ်-စာမျက်နှာ(၄)၌ ''(ပရဝါဒီတို့သည်)-ယင်းသို့ခံယူထားသည့်အလျောက် အလွန်လှပသော စကားလုံးတစ်လုံးကို လက်ကိုင်ပြုလုပ်ထားလိုက်ပုံမှာ ထေရဝါဒသာသနာ သန့်ရှင်းတည်တံ့ရေးအတွက် အဓမ္မဝါဒတွေကို ဖယ်ရှားပစ်မည်-ဟူ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း သာသနာတွင်းသား ရဟန်းသံဃာတော်များ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပရိသတ်အများစု လက်ခံကိုးကွယ် ကြည်ညိုမှုကို ခံယူနေကြသော ဓမ္မကထိက ကမ္မဌာနာစရိယဆရာ တော်များကို အပျက်သဘောဆောင်သည့်အမြင်ဖြင့် လိုက်လံနှိပ်ကွပ် စွပ်စွဲရေးသားပါသည်''ဟူ၍ ရေးသားပြသ ထားပါသည်။
၄င်းတွင် ''အဓမ္မဝါဒတွေဖယ်ရှားရေးကို မစိုးရိမ်စာသင်သားက ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း''သည် မှန်သောစကားသာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ''အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပရိသတ်အများစု လက်ခံကိုးကွယ် ကြည်ညိုမှုကို ခံယူနေ ကြသော ဓမ္မကထိက ကမ္မဌာနာစရိယ ဆရာတော်များ''တွင်-
'ဓမ္မဝါဒီများ'ဟူ၍ ရှိပါသည်၊ 'အဓမ္မဝါဒီများ'ဟူ၍ ရှိပါသည်။ ဤနှစ်မျိုးတို့တွင် ''မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် အဓမ္မဝါဒီ ဓမ္မကထိက ကမ္မဌာနာစရိယတို့၏ အဓမ္မဝါဒတို့ကို လိုက်လံ နှိပ်ကွပ်ရေးသားနေသည်''ဟုဆိုလျှင်လည်း မှန်သောစကားသာ ဖြစ်ပါသည်။
''မစိုးရိမ်စာသင်သားသည် ဓမ္မဝါဒီ ဓမ္မကထိက ကမ္မဌာနာစရိယတို့၏ ဓမ္မဝါဒတို့ကို လိုက်လံနှိပ်ကွပ် စွပ်စွဲရေးသားနေသည်''ဟုဆိုလျှင်မူကား မှားသောစကား၊ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံစွပ်စွဲထားသောစကားသာ ဖြစ်သွားပါသည်။
အထူးပြောပြထားလိုသည်မှာ ''ပရိသတ်အများစု လက်ခံကိုးကွယ် ကြည်ညိုမှုကို ခံယူနေကြသော ဓမ္မကထိက ကမ္မဌာနာစရိယ ဆရာတော်အားလုံးသည် ဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များ ဖြစ်တော်မူကြသည်''ဟူ၍ ဆိုနိုင်ပါမည်လော။ ဝိနိစ္ဆယအပြုခံခဲ့ရသော ဓမ္မကထိက၊ ကမ္မဌာနာစရိယများ အထင်အရှားရှိနေသည်ပင် မဟုတ်ပါလော။
အပျက်သဘောဆောင်သည့်အမြင်ဖြင့် လိုက်လံနှိပ်ကွပ် စွပ်စွဲရေးသားနေကြောင်း ၄င်းက စွပ်စွဲပြောဆိုထား သည်။ မစိုးရိမ်စာသင်သားမှာ ဓမ္မဝါဒီ ဓမ္မကထိက ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယတို့၏ ဓမ္မဝါဒတို့ကို လိုက်လံနှိပ်ကွပ် စွပ်စွဲရေးသား ထားချက်ဟူ၍ တစ်ချက်မျှ မရှိပါ။ မစိုးရိမ်စာသင်သား ရေးခဲ့သမျှတို့နှင့် ဟောခဲ့သမျှတို့ကို ဖတ်ရှု နားထောင်လျှင် သိနိုင်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 7:03 AM3comments:
တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာ မိုးပွာဦးဉာဏအား ထောငျခတြာ မှနျကနျသ...
လူသလေူဖွဈနှငျ့ ဝါဒနုဝါဒမြား ဝိနိစ်ဆယချေါ ထရေဝါဒစှ...
ခွေမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် (သို့မဟုတ်) No . 1 ရဲ့ ...
မိုးပွာဝိနိစ်ဆယ ကောကျနှုတျခကျြမြား (၃)
လူသလေူဖွဈ နောကျလိုကျ မိုးပွာ မိုးပွာရှငျဉာဏသညျ- လူသလေူဖွဈဝါဒကို မြိုးစခေ့ပြေးသှားသော ဦးဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ သမ်မာဒိဋ်ဌိ သုတသေနဆိုသူတို့၏ “အဘိဓမ်မာ...